shwezinu: January 2012
မင်းလူ ၏ အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ, အပိုင်း (၁၃) (ဇာတ်သိမ်း)
ထိုညက ဘီယာဆိုင်က ထွက်လာပြီးနောက် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံထုတ်သည်။ ထီလက်မှတ် ကို ပြန် ယူချင်သော ဆန္ဒက တားမရအောင်ဖြစ်နေ၏။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရအောင် လုပ်မည်။ ငွေနှစ်ဆယ့် ငါးသိန်း ကို တပ်မက်သောလောဘအပြင် ကိုယ့်လက်ထဲရောက်ပြီးမှ သူများ ဆီလွဲပေးလိုက်မိလို့ မခံချိ မခံသာဖြစ်သောစိတ်လည်း ပါသည်။
Posted by SHWE ZIN U at 7:34 AM7comments Links to this post
Labels: မင်းလူ ၏ အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ
ဝင်းငြိမ်း နှင့် စာရေးဆရာများ ပေဖူးလွှာစာပေအင်တာဗျူး, အပိုင်း (၂၅)
စာဖတ်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပေးခြင်း ကဏ္ဍအတွက် ရွေးချယ်ထားသူကတော့ "စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်" ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးက မြန်မာမှု၊ မြန်မာ့ဓလေ့တွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေ နားလည် နိုင်အောင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဆောင်းပါးတွေ၊ ၀တ္ထုတွေ ရေးပြီး သူတို့ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေတွေကို မြန်မာ စာဖတ် ပရိသတ်တွေ နားလည်နိုင်အောင် မြန်မာစာပေနဲ့ တင်ပြပေးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်က ဆရာမကြီး ကို "ယဉ်ကျေးမှုနှစ်ခု ပေါင်းကူးပေးသူ" လို့ပဲ တင်စားလိုက်ပါတယ်။
Posted by SHWE ZIN U at 7:04 AM 1 comments Links to this post
Labels: ဝင်းငြိမ်း နှင့် စာရေးဆရာများ ပေဖူးလွှာစာပေအင်တာဗျူး
ဆောင်းဝင်းလတ် ၏ ပင်လယ်စာ အမှတ်တရ ညတည
များမကြာသေးမီက စာပေသမား လူရွယ်နှစ်ဦးတို့ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် ထိုင်ကာ လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည် ဆိုင်လေးမှ တစ်ဆင့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို မျှော်နေကြသည် မကြာမတင်မှာပင် သူတို့ မျှော်နေသော မိတ်ဆွေ ရောက်လာသည်။ ရန်ကုန်မြို့လယ် တစ်နေရာ၌ တိုက်ခန်းငှားဖို့ကိစ္စ ဆွေးနွေးကြသည်။ သူတို့ မျှော် နေသော သူမှာ တိုက်ခန်းရအောင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တွင် အဆိုပါ လူရွယ်နှစ်ဦးအနက်မှ လူရွယ်တစ်ဦးက ကျွန်တော်ထံသို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်သည်။
Posted by SHWE ZIN U at 6:48 AM5comments Links to this post
Labels: ပန်းသတင်း (၂ဝ၁၂)
မင်းလူ ၏ အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ, အပိုင်း (၁၂)
(ချစ်ဦးက ထီလက်မှတ်ကို ယူပြီးထွက်သွားသည်။ု)
သူထွက်သွားပြီး ခဏအကြာမှာပင် လူတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။
''နှစ်အစ နှစ်အဆုံး မရှိဘူးလား''
ထီဆိုင်ရှင် က ရှာကြည့်ပြီး။
Posted by SHWE ZIN U at 6:39 AM0comments Links to this post
ဝင်းငြိမ်း နှင့် စာရေးဆရာများ ပေဖူးလွှာစာပေအင်တာဗျူး, အပိုင်း (၂၄)
အချစ်နဲ့ သူ၏ ကိုကို
ဒီလ ကျွန်တော် တွေ့ဆုံပေးမယ့်သူက စာပေ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတ အနုပညာသုံးလောကမှာ ကျင်လည်နေတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ အဆိုကျော် "သုမောင်"လေ။
" အချစ်" ၀တ္ထုနဲ့ စာပေလောကမှာ အောင်မြင်မှု ရခဲ့ပြီး "အချစ်နဲ့ သူ၏ကိုကို" ရုပ်ရှင်ကားမှာ ပရိသတ် တွေ သူ့ကို လက်ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ ဆရာသုမောင် တွေ့ဆုံပေးမယ့် ကဏ္ဍကို "အချစ် ၏ ကိုကို"လို့ပဲ ခေါင်းစီးတပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
" ဆရာက စာရေးဆရာကြီး ဦးသာဓုရဲ့သား၊ စာရေးဆရာ မောင်ဝဏ္ဏရဲ့ညီဆိုတော့ စာပေလောကထဲ ၀င်ရာ မှာ သူတို့တစ်တွေရဲ့ အကူအညီ ရခဲ့ပါသလား၊ စာပေလောကထဲ စ၀င်လာပုံကစပြီး ပြောကြ ရအောင်"
" စာပေလောကထဲကို ကျွန်တော် စရောက်လာတာက ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဟုတ်တယ်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် စစချင်း ဘာလုပ်ရသလဲ ဆိုတော့ ယုဝတီဂျာနယ်မှာ စာပြင်ဆရာ လုပ်ရတယ်။ အဲဒီ ယုဝတီဂျာနယ်မှာပဲ ကဗျာ အတိုအထွာကလေးတွေ စရေးဖြစ်တယ်။ ယုဝတီဂျာနယ်ရဲ့ ထုံးစံက ကဗျာနဲ့ ဆောင်းပါးလောက်ပဲ အမျိုးသား စာရေးဆရာတွေ သုံးတယ်။ ကျန်တာက အမျိုးသမီးတွေချည်း ရေးကြတယ်။ ယုဝတီဂျာနယ် ဆိုတော့ လည်း ယုဝတီတွေ ချည်းပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော့် အဖေကတော့ ဘယ်လိုမှ အားမပေးဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ဖန်တီးဖို့ပဲ အားပေးတယ်။ စာရေးပါ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက် ပါ၊ သီချင်းဆိုပါ ဆိုတာတွေ မပြောဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ရုန်းကန်တတ်ဖို့ အားပေးတယ်၊ ဒါလောက်ပဲ"
" ဆရာက ၀တ္ထုတိုလည်း ရေးတယ်၊ လုံးချင်းဝတ္ထုရှည်တွေလည်း ရေးတယ်ဆိုတော့ ၀တ္ထုတိုနဲ့ ၀တ္ထုရှည် ဘယ်လို ကွာခြားပါသလဲ"
" ကျွန်တော် မြင်တာ ပြောရရင်တော့ ၀တ္ထုတိုက မိုးကြိုးပစ်သလို ခံစားရတယ်၊ ရေးရင်လည်း မိုးကြိုးပစ် သလိုပဲ ရေးရတယ်။ ၀တ္ထုရှည်ကတော့ မိုးတွေ တစိမ့်စိမ့် ရွာနေသလို ရေးရတယ်။ အဲသလိုပဲ ခံစား ရပါ တယ် "
" ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ဖန်တီးဖို့အတွက် ဘယ်လို ခံစားရှာဖွေယူပါသလဲ၊ ဆရာ့ဝတ္ထုတွေက အများအားဖြင့် ဆရာ့ အမေ၊ ဆရာ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေချည်းပဲလို့ ပြောကြတယ် "
" ကျွန်တော် ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ရဖို့ရာ သိပ်မခက်ပါဘူး။ သိပ်မခက်ဘူးဆိုလို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောတာ မဟုတ် ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက ပေါ့ပေါ့တန်တန် ပြောတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ရဖို့ ကျွန်တော့် အတွက် သိပ်မခက်သလို သိပ်ခက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
သိပ်မခက်ဘူး ဆိုတာက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် မိသားစု၊ ကျွန်တော့် အသိုင်း အ၀ိုင်း အကြောင်း၊ မိသားစုဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ တကယ့် အရင်းအချာ မိသားစုအပြင်၊ အစွယ် အပွား မိသားစုတွေအပြင် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ မိသားစုတွေပါ ပါတယ်။
ဒီမိသားစုတွေအကြောင်း ရေးလို့ ကျဉ်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် (ဒါ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ထင် ပါတယ်။ ငါ ရေးတာ ကျဉ်းတယ်လို့) "သို့သော် မဟုတ်ဘူးဗျ။ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားတော့ အဲဒီလူ တွေဟာလည်း လူတွေပဲဆိုတာ သွားတွေ့တယ်။ သူတို့က ခွေးတွေ၊ နွားတွေမှ မဟုတ်ဘဲ။ လူတွေဗျ ... လူတွေ ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော့် အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ကျွန်တော့် မိသားစုထဲမှာ ရှိတဲ့ ချမ်းသာတဲ့ လူတွေ၊ ကား ၁၃-၄ စီးပိုင်တဲ့ လူတွေ ရှိသလို လုံးဝစုတ်ပြတ်သတ်ပြီး တဲကုပ်မှာ နေရတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတာပဲ။ သူတို့ အကြောင်းကို ရေးတဲ့အတွက် ၀တ္ထုတွေ ရလာတယ်။ အဲဒါ လူတွေအကြောင်း ကို ရေးတာပဲ။ အဲဒါ တစ်ကမ္ဘာလုံးအကြောင်း ရေးတာပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
ကျွန်တော့်ကို တချို့က ဝေဖန်တယ်။ သူ့အမေအကြောင်းချဉ်း ရေးနေတာပဲတဲ့။ သူ့အမေအကြောင်း ရေး နေတယ် လာပြောတယ်၊ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော် ရေးနေတာ ကျွန်တော့် အမေအကြောင်းတွေ မဟုတ်ဘူး။ "အမေတွေ" အကြောင်းတွေ ရေးနေတာ။ လူတိုင်းမှာ အမေရှိတယ်။ လူဖြစ်လာရင် အမေ ရှိရ မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ရေးနေတာဟာ ကျွန်တော့် အမေအကြောင်းသာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေတွေ အားလုံး အကြောင်း ပါလို့ ပြောချင်တယ်။
၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ကို ဘယ်လို ဖန်တီးယူပါသလဲ ဆိုတာကို ပြောရရင် ဥပမာ-ကိုဝင်းငြိမ်းတို့ ပေဖူးလွှာမှာ ပါခဲ့တဲ့ "အသက်ကြီးတတ်ကြပါစေ"ကို ပြန်ပြောပြမယ်။
ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့် ၀တ္ထုတို စုပြီးထုတ်တဲ့ "ဍရင်ကောက်" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထွက်တယ်။ အဲဒီ စာအုပ်မှာလည်း အများအားဖြင့် အမေ့အကြောင်း၊ အဖေ့အကြောင်း၊ ဦးလေးအကြောင်း၊ အဒေါ် အကြောင်း၊ ကျွန်တော့် အလုပ်သမားတွေအကြောင်း စသဖြင့် ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တော် ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ဆီ သွားပို့တယ်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် မဟုတ်ပါဘူးလေ။ ထုတ်ဝေသူက လက်ဆောင် ပေးတဲ့ အုပ် သုံးဆယ်စလုံး လူကြီးတွေ ကျွန်တော် အကုန်လျှောက်ပို့တယ်။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ဆီ ရောက်တော့ ဆရာကြီးက ကော်ဖီခွက်ကလေးကိုင်ပြီး လာပို့ရင်း ဧည့်ခံတယ်။ "ကိုသုမောင် ...တဲ့၊ စာအုပ် လာပို့တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျားတဲ့။ ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ ဖျား သွားတယ်။ ကြောက်သွားတယ်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်က ကျွန်တော့် အဖေရဲ့ ဆရာ။ ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင် ဆရာ့ ဆရာ။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့် အဘိုးလောက် ရှိတယ်ဆိုတော့ ဂုဏ၀ုဍ္ဎိ၊ ၀ယ၀ုဍ္ဎိအရ ကျွန်တော်က ကြောက်ရမယ်။ ရိုသေရမယ်။ ချစ်ရမယ်။ အဲဒီနည်းတူ သူကလည်း ချစ်ရမယ်။
သို့သော်လည်း ပြဿနာက "ကိုသုမောင်" လို့ ခေါ်လိုက်တာ။ ပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ" လို့ ပြောလိုက်တာ။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ နောက် သူ့ဇနီး ဆရာမကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည် ထွက်လာတယ်။ ထွက်လာတော့ ဆရာမကြီးကလည်း "သြော် ကိုသုမောင် ရောက်နေပါလား" တဲ့။ ဆရာမကြီး ဒေါ်ကြည်ကြည် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းမှာတုန်းက နံရံကပ်စာစောင်မှာ ကဗျာလေးတွေ၊ စာလေးတွေ ရေးတုန်း မြန်မာစာဌာနမှာ သူက အကြီးအကဲ။ အဲဒီတုန်းက နာမည် မတပ်တတ်လို့ "ဆရာမကြီး နာမည် ဘယ်လို တပ်ရင် ကောင်းမလဲ" လို့ သွားမေးလို့ဗျ။
" ဟဲ့ ... စာဆိုသား ဖြစ်ပြီးတော့ ဒါလောက်မှ မလုပ်တတ်ဘူးလား၊ မကိုင်တတ်ဘူးလား "လို့ ပြောတယ်။ ဆရာမကြီးက စာဆိုသားလို့ ပြောတယ်၊ စာရေးဆရာ သားလို့ မပြောဘူးဆိုတော့ အခုအချိန်ကျမှ ကျွန်တော့်ကို လာပြီး "ကိုသုမောင်၊ ကြွပါရှင်" ဘာညာလာလုပ်တော့ ဆရာကြီးနဲ့ ဆရာမကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် တော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ်။ ဘာပြန်လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဘူး။ မနေနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ ကျွန်တော် ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
" ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီး ကျွန်တော်ဟာ သားလောက်၊ မြေးလောက် ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလို ဆက်ဆံနေကြတာလဲ၊ ဟဲ့ကောင် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြောကြ ပါလား။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို မပြောကြတာတုံး" လို့ ဆိုတော့ ဆရာကြီးတို့က အရင်နဲ့ မတူတော့ ဘူးလေကွယ်တဲ့။ အသက်အရွယ် ကြီးတာ၊ မကြီးတာနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ဂုဏ်က ကြီးလာလေပြီကွယ်တဲ့။ တကယ် ကို လူကြီးဆန် ဆန် ပြောတယ်။
ဆိုတော့ လူကြီးတွေရဲ့ "ကာရိုက်တာ"ကို လိုက်ဖမ်းရင် တချို့က တစ်မျိုး၊ တချို့က တစ်မျိုး တွေ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော် ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ် ရလိုက်တာပဲ။ အဲဒါဟာ "အင်တာနေရှင်နယ်" ၀တ္ထုတိုလိုင်းထဲ ၀င်တယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ တချို့ လူကြီးတွေကျတော့ တူအရွယ်၊ သားအရွယ်မို့ ဆဲဆိုပြီး နှုတ်ဆက်တယ်၊ စကားပြောတယ်။ ဒီကွာခြားချက်ကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရာက ၀တ္ထုတို ရလိုက်တာပဲ။
အဲဒီတော့ ခု ရေးလိုက်တာလည်း ကျွန်တော့်အဖေ၊ ကျွန်တော့် အမေ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေး လိုက်တာပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့် အမေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာက ဒီအရေး အကြောင်းတွေ အားလုံး ပေါ်နေ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အမေ့ဝတ္ထုတွေ အများဆုံး ကျွန်တော် ရေးဖြစ်တာပဲ "
" စာပေ လောကထဲ ခြေချဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေကို ဆရာ ဘယ်လိုများအကြံပေးချင်သလဲ "
" အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဒီလို ရှိတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးသားသား ကိစ္စ ရှာကြံတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တချို့က ပြောတယ်ဗျ။ ၀တ္ထုဆိုတာ ချစ်ကြိုက်ကွဲညားပြီးရင် ဒါပဲတဲ့။ ချစ်ကြိုက်ကွဲညားက ချစ်ကြိုက်ကွဲညား ပဲပေါ့။ အဲဒါကို ပရိသတ်က ကြိုက်တယ်။ အဲဒါ သိထား ဖို့က တစ် အချက်။
နှစ်က ဘာလဲဆိုတော့ အဲဒီ ချစ်ကြိုက်ကွဲညားတွေကို ဝေဖန်ဖို့ အချက်။ သုံးက ဘာလဲဆိုတော့ ချစ်ကြိုက် ကွဲညား ပြီးတော့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး မပေးစားလို့ လူကြမ်းနဲ့ ပေးစားရမလား။ ဒါကို စဉ်းစားတတ်ရမယ်။ အဲဒီလို တစ်ပတ်လည်ပြီး ရိုးရိုးသားသား တွေးတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ရှိရမယ်။
အဲ ... ပြီးတော့ စာများများဖတ်၊ များများ ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒီလို များများတွေး၊ များများရေနိုင်တဲ့ အချိန်ကျမှ တိုင်းပြုပြည်ပြု စာပေကို ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ် စဉ်းစားရမယ်။ ရေးရမယ်။ ဒါလောက်ပဲ အကြံပေးချင်ပါတယ် "
" ဆရာ ခုတစ်လော ကဗျာတွေ ရေးနေတာ တွေ့ရတယ်။ ၀တ္ထုမရေးခင်ကကော ကဗျာ ရေးခဲ့သေး သလား"
" ရေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာက "မိုးသောက်တော်လှန်ရေး" ဆိုတဲ့ ကဗျာပဲ။ ယုဝတီ ဂျာနယ်မှာ ပထမဆုံး ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပဲ။
ခုတစ်လော ကဗျာတွေ ရေးတာကတော့ ဖျတ်ခနဲ ဖျတ်ခနဲ ပေါ်လာတာတွေကို ဖျတ်ခနဲ ဖျတ်ခနဲ အခြားသူတွေကို တင်ပြတဲ့ နေရာမှာ ကဗျာဟာ ၀တ္ထု (၀တ္ထုမှာတော့ ၀တ္ထုတို၊ ၀တ္ထုရှည်လို့ ရှိရာမှာ ၀တ္ထုတို က မိုးကြိုးပစ်သလို ဒိုင်းခနဲ တစ်ချက် ပစ်လိုက်ရုံနဲ့ အများကြီး ထိရောက်တယ် "
" ဆရာ ကဗျာရေးတဲ့နေရာမှာ ကာရန်နဲ့ပဲ ရေးသလား၊ ကာရန်မဲ့ကဗျာ ရေးသလား "
" ကျွန်တော် ကာရန်နဲ့ပဲ ရေးပါတယ်။ ဒါက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို လက်ခံထားပါတယ်"
" ရှင်နေမင်း သို့ ပေးစာ ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်ဝတ္ထု ရေးပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ် ဘာသာပြန် ၀တ္ထု မရေးဖြစ် တော့ဘူးလား။ ရေးဖို့ကော အစီအစဉ် ရှိလား "
" ကျွန်တော်တို့ ၀တ္ထုဖတ်တဲ့နေရာမျာ ပြဿနာ ရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ် ၀တ္ထုဆိုတာကတော့ တာပြီး ပြောလိက်တာပါ။ အနောက်တိုင်း ၀တ္ထုအားလုံး ပါတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဝတ္ထုတွေမှာ ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စတွေ ပါတယ်။ ပြီးတော့ စာပေ စိစစ်ရေးလို့ အထိန်းအကွပ် လုပ်ပေးတဲ့ဌာနတွေ ရှိတယ်။ ဟိုဘက်က လာတဲ့ စာပေတွေကတော့ လွတ်လွတ် လပ်လပ်ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ဖတ်တဲ့နေရာမှာ လူဆိုတာ သဘာဝအလျောက် ယိမ်းတတ် ယိုင်တတ်တဲ့ သဘော ရှိတယ်။ အဲဒီလို ယိမ်းယိုင်သွားစေမယ့် စာမျိုး ကျွန်တော်တို့ ဘာသာပြန်ရင် မဖြစ်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ တတ် နိုင်ရင် ဘာသာမပြန်ဘဲ နေတာ ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။
ရှေ့လျှောက်တော့ လုပ်မယ်လို့ ကျွန်တော် စိတ်ကူးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ကိစ္စတွေ ပါရင်တော့ ပယ်ရမှာပဲ "
" ဆရာ ရေးခဲ့ တဲ့ "အချစ်သစ်ပင်"က နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကို မှီးခဲ့တာလား "
" အချစ်သစ်ပင် နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပထမဦးဆုံး မင်းမင်းလတ် ဆိုတာကို စပြီး ကြားဖူးတာပဲ။ Yellow Ribbon ပေါ့ဗျာ။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းက တကယ် ခံစားကြည့်တော့ ပိုကောင်းတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ၀တ္ထုရေးချင် စိတ်ပေါ်လာလို့ ၀တ္ထုအတိုကလေးတစ်ပုဒ် ကျွန်တော် ရေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီကျောရိုးကိုပဲ ပြန်ယူပြီး ကျွန်တော့် စိတ်ကူးကို ကျွန်တော် ၀တ္ထုရှည် ပြန်ရေးခဲ့တာပါ။ ဒါပါပဲ "
" အချစ်ဝတ္ထု က ဆရာ့ပထမဆုံး ၀တ္ထုနော် "
" ဟုတ်ပါတယ် "
" အဲဒီဝတ္ထု အရေးအသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခု ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ ဘယ်လို ခံစားမိသလဲ "
" အချစ်ဝတ္ထုမှာ ကျွန်တော့်ဘာသာ ရေးခဲ့တဲ့ အမှာစာမှာ ကျွန်တော် ရေးထားပါတယ်။ ဆရာဗန်းမော်တင် အောင်က သူ့ပထမဆုံး ရေးတဲ့ "ဖုန်းမောင့် တစ်ယောက်တည်းရယ်" ၀တ္ထုမှာ တော့ကာပဲရယ်နဲ့၊ တော့ကာ ပဲရယ် နဲ့ လို့ ရေးခဲ့တာကို နောက်ဆယ်နှစ် ကြာတော့ ဒီစာအုပ်ကို ပြန်ရိုက်ရာမှာ သူ ရှက်နေတယ်တဲ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူ ရေးခဲ့တဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ ပြုံးမိတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် အရေးအသားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုချိန်ထိ ပြုံးမိတယ် မဟုတ်ဘူးလို့။ ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေစဉ် က အမှာစာ ထပ်ထည့်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် အဖေဟာ ဒီနေ့ထက်ထိ ခုံဖိနပ်ပဲ စီးတယ်။ အဲဒီအတွက် ခုံဖိနပ်ကြီး အောက်နေပြီလို့ ပြောလို့မရဘူး။ ခုံဖိနပ်ကြီးက ခေတ်မဟားတော့ဘူး။ သားရေဖိနပ် စီးပါလားလို့ ပြောလို့ မရဘူး။ လူဆိုတာ သူ့စိတ်ကူးနဲ့ သူပဲ။ ဆိုတော့ "အချစ်" ၀တ္ထုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးအသားကို ဒီနေ့ ထက်ထိ ကျွန်တော် ကြိုက်နေတုန်းပဲ။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ကွာတာတစ်ခုကတော့ ရှိတယ်။ စာရေးဆရာ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကြိုက်တာနဲ့၊ ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြိုက်တာ ...။
ဆိုပါစို့ဗျာ၊ ခုခေတ်မှာ ဘာကားတွေ ခေတ်စားတယ် ပြောပြော ဂျစ်ကားကို လက်လွှတ်လို့ မရဘူး။ အဲဒီနည်းတူပဲ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုလည်း ကျွန်တော် လက်မလွှတ်နိုင် ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော် လုပ်ဦးမလားဆိုတော့ မလုပ်တော့ဘူး။ ဒါကို နောက်လူငယ်တွေ လုပ် လိမ့်မယ်၊ ချာတိတ်တွေ၊ နောက်တက်လာမယ့် လူငယ်တွေ လုပ်လိုက်မယ်။ သို့သော် မကြိုက်ဘူးလား ဆိုတော့ ကြိုက်တယ်။
ကိုယ့်သားသမီးပဲဗျာ။ အသက် ဘယ်လောက် ကြီးသွားကြီးသွား မချစ်ရဘူးလို့မှ မရှိဘဲ။ ဒါက ရှင်းရှင်း လေး ပါ"
" အချစ်ဝတ္ထုတွေ ရေးတဲ့ စာရေးဆရာ၊ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်အနေနဲ့ "အချစ်" နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ခံစားမိပါသလဲ။ သိတယ် မဟုတ်လား၊ ကျွန်တော် မေးချင်တာ"
" ကိုဝင်းငြိမ်းရေ ... ခင်ဗျား မေးတဲ့ အချစ်ကို ကျွန်တော် စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျွန်တော့် မိန်းမ ဈေးက ဘယ် အချိန် ပြန်လာမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော့် သားလေးနဲ့ သမီးလေး ဈေးကအပြန် ကားပေါ် က လိမ့်ကျမလား၊ ဘာလား ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်"
" ဆရာ့ ကလောင်နာမည် ယူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းပြောပြပါဦး။ ကလောင်နာမည်တူ ခပ်ဆင်ဆင် ပေါ့ လေ၊ ကြားဖူးသလားလို့ "
" ကလောင်နာမည် ယူခဲ့တာကတော့ ကျွန်တော့် အဖေ ခပ်ငယ်ငယ်က သုမောင်ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည်နဲ့ ၀တ္ထုအတိုအစကလေးတွေ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ကြံကြံဖန်ဖန် "သာဓု" နဲ့ကျမှ အောင်မြင်တယ်။ ကောင်းပါတယ်။ တစ်သက်လုံး ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ဒီနာမည်က ပါနေမှာကိုး။
ကျွန်တော့် အလှည့်ကျမှ ဒီကလောင်နာမည်က အောင်မြင်လာတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မြတ်မြတ်နိုးနိုး ဒီနာမည် ကို အဖေ့ဆီက အမွေအဖြစ် ယူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမေ့ဆီက အမွေယူစရာဆိုလို့ ဦးနှောက် ပဲ ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီနာမည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ တန်းတူ အချိန်လောက်တုန်းက "တက္ကသိုလ် သုမောင်" ဆိုပြီး တစ်ယောက် ပေါ်ဖူးပါတယ်။ ဆရာတက္ကသိုလ်သုမောင်ပေါ့။ အမည်ရင်းက ဦးတင်ကိုကို လို့ ကြားပါတယ်။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးလား၊ ဗိုလ်မှူးကြီးလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
နောက်ပြီးတော့လည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မှာ ကျွန်တော် စာအုပ်တွေ မွှေတဲ့နှောက်တဲ့ နေရာမှာ "တက္ကသိုလ်သုမောင်" ဆိုပြီး သရော်စာ ရေးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ် "
" ကျေးဇူးပဲ ဆရာ၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် မေးချင်ပါတယ်။ နှောင်းတမြေ့မြေ့ကစပြီး ဒီနေ့အထိ သရုပ်ဆောင် ခဲ့ရာမှာ ဘယ်လို အခန်းမျိုး သရုပ်ဆောင်ရတာ ပိုပြီးအားရပါသလဲ "
" သဘာဝကျကျ နဲ့ ရယ်ရတဲ့ ကားမျိုးကို သဘောကျတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ အလွမ်းတွေ ရိုက် ချင်တယ်။ လွမ်းပြရမှာလည်း ကျုပ် ရုပ်ကြီးနဲ့ လွမ်းပြရတော့ တစ်မျိုးကြီးပဲဗျ။ အဲဒီတော့ လောင်တာ ကောင်း တယ်ဗျ။ လူတွေ ပျော်နေရင် ကောင်းတာပဲပေါ့။ လူတွေ စိတ်ညစ်ရရင် မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ ကားတွေပဲ ရိုက်ချင်တယ်"
" ငယ်သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ရှိလေသည် ကားမှာ ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီးနောက် ဒါရိုက်တာ မလုပ်တော့ဘူး လား၊ လုပ်ဖို့ကော အစီအစဉ်ရှိလား "
" ငယ်သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော် ပထမဆုံး ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ ကားပါပဲ။ ပထမ ဦးဆုံးဆိုလို့ နောက်ထပ် ရှိ သေးလားဆိုတော့ မရှိဘူးဗျ။ မရှိဘူးဆိုတာက နှစ်မျိုးဗျ။ ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာ မလုပ်တာလည်း ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိတာလည်း ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိမှ ဒါရိုက်တာ လုပ်လို့ရတာကိုး။ သူများတွေ လာငှားရင် ရိုက်ရအောင်ကလည်း ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ အဖေက စပြီး အစဉ်အဆက်ကိုက ကျွန်တော့်ညီ အငယ်ဆုံး မင်းလူအထိ သူများ ခိုင်းရင် မလုပ်ချင်ဘူး။
ဆိုပါစို့ဗျာ ... ဟိုတစ်လောတုန်းက ကျွန်တော့် ၀တ္ထု"ကြွေး"ကို "အကြွေး" အဖြစ်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ လာငှား တယ်။ အဲဒါ မန္တလေးက မယူဘူး။ အောက်မြန်မာပြည်ကလည်း မယူဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နာမည် က "အကြွေး" ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ နာမည်ပြောင်းပေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော့်မှာ နာမည်ပြောင်း ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီပြဿနာမျိုးတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိတော့ ဒါရိုက်တာ လုပ်ဖို့ တော်တော် ခက်နေတယ်။
လုပ်တော့ လုပ်မှာပါပဲ။ မလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့် အဖေက ဒါရိုက်တာ၊ ကျွန်တော့် အစ်ကိုက ဒါရိုက်တာဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒါရိုက်တာ မလုပ်လို့ မရတော့ဘူး၊ လုပ်ရမယ်။ ဒါ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ မိရိုးဖလာပဲ "
" ငယ်သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ရှိလေသည် ကြော်ငြာပိုစတာမှာ ဘာဖြစ်လို့ လက်လေးချောင်း ထောင်ပြ ထား တာလဲ "
" ရှင်းရှင်းလေးပါ။ တချို့က ပြောတယ်။ မင်းသား မင်းသမီး လေးယောက်ပါလို့တဲ့။ သုံးချောင်း ထောင်တော့ ဘာညာပေါ့ဗျာ ပြောကြတယ်၊ တစ်ချောင်းထောင်ရင် သတိထားလို့ ပြောရာ ရောက်တယ်။ နှစ်ချောင်း ထောင်တော့ ခုခေတ် ကလေးစကားနဲ့ ပြောရင် "ပိစ်"ပေါ့။ အေးချမ်းစေပေါ့။ သုံးချောင်း ထောင်ရင် ငယ်သူ ငယ်ချင်း သုံးယောက် အဓိပ္ပာယ်ပေါ့။ လေးချောင်း ထောင်တော့ ဘာလဲလို့ လာမေး ကြတယ်။ အဲဒါ ကြော် ငြာပဲပေါ့။ ကျွန်တော် ကြော်ငြာစာရွက် သက်သာသွားတာပေါ့ "
" ဆရာ ၀တ္ထုရေး တဲ့ နေရာမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတဲ့ဝတ္ထု ရှိပါသလား "
" ၀တ္ထုရေးတဲ့နေရာမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ စိတ်မကူးပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်နယ်က ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ၀တ္ထုကလေး ရေးပေးပါဆိုပြီး လာတတ်တယ်။ အဲဒါမျိုးကျတော့ ရေးရတယ်။ သို့သော် တစ်ခါ တလေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ၀တ္ထုရေးတာပဲ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရကောင်းမလားလို့ ဆိုတဲ့ အတွေးကလေး ၀င်လာ လိုက် ရင် အဲဒီဘက်ကို ယိုင်ယိုင်သွားတတ်တာမျိုး ရှိတယ်။ ဥပမာ - " အကယ်ဒမီ" ၀တ္ထု ... "
" ရုပ်ရှင် ရိုက်ရင်းကော ၀တ္ထုရေးဖြစ်တာမျိုး ရှိသလား "
" ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ရေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ တစ်မျိုးက ဒီကောင်မတွေ ယိုးဒယားကပြီး တော်တော် နဲ့ ရောက်မလာသေးလို့ ပျင်းတဲ့အချိန်မှာ ရေးဖြစ်တာ ရှိတယ်။ ယိုးဒယားကနေတယ်ဆိုတာ ကိုဝင်းငြိမ်း သိရဲ့လား။ လက်သီးနဲ့ ထိုးမယ့်အရေးကို မထိုးသေးဘဲ ဟန်ပြင်နေတာကို ပြောတာဗျ။
နောက်တစ်မျိုးက အဲဒီရိုက်ကွင်းထဲက လူတွေရဲ့ ဘ၀ကို ကြည့်ပြီး ရေးဖြစ်တာမျိုး၊ ဆိုပါတော့ဗျာ၊ ကျွန်တော် ရောက်သွားရင် မင်းသား၊ မင်းသား၊ မင်းသားဆိုပြီး ဘာစားမလဲ၊ ဘာလုပ်မလဲ မေးကြတယ်၊ နေရာ ပေးကြတယ်။ မင်းသမီး လာရင်လည်း ဒီလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဟို ... လူကြမ်းကျတော့ တစ်မျိုး၊ အဲဒီထက်ဆိုးတဲ့ မီးထိုး၊ မှန်ထိုး ကလေးတွေကျတော့ ပစ်ထားကြတယ်။ အဲဒီဘ၀တွေ တွေ့ရတော့ ၀တ္ထု ရေးဖြစ်သွားတယ် "
" သရုပ်ဆောင် ရှားပါးတဲ့ ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ဖြေရှင်းရင် ကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါသလဲ "
" ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အပါအ၀င် နာမည်ရှိတဲ့ မင်းသားတွေ၊ နာမည်ရှိတဲ့ မင်းသမီးတွေ တဖြည်းဖြည်း နာမည်မကျ ကျသွားအောင် ဒါရိုက်တာတွေက ရိုက်ပေးလိုက်ရင် နောက်ထပ် သရုပ်ဆောင်သစ်တွေ တက်လာမှာပါပဲ။ ရှင်းပါတယ်နော် "
" ဂီတဘက် ဆက်ကြရအောင်၊ ခေတ်ဟောင်းတေးတွေ ပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာ မူရင်းကို နားထောင်လေ့ရှိပါ သလား"
" အထူးသဖြင့် ခေတ်ဟောင်းက မူရင်းကို မြန်မာ့အသံမှာ သွားနားထောင်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကျွန်တော့် အရင် ပြန်ဆိုသွားကြတဲ့ ကိုဝင်းဦးတို့၊ ကိုမင်းနောင်၊ ကိုမောင်မောင်ကြီး၊ ဇော်မင်းလေး စသူ တို့ရဲ့ သီချင်း တွေကိုလည်း ပြန်နားထောင်ပါတယ်။
မူရင်းသီချင်းကို ရေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ရှိသေးရင် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆီမှာ သွားလေ့လာပါတယ်။ မရှိတော့ ရင် ပါဝင်တီးခတ်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆီမှာ ချဉ်းကပ်လေ့လာပါတယ်"
" ဥသြဘသောင်ရဲ့ သီချင်းတွေကို ဆိုရာမှာ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်ပိုင်အသံနဲ့ မဆိုဘဲ သူ့အသံနဲ့ တူအောင် လုပ် ဆို ပါသလဲ "
" သူဆိုတဲ့ သီချင်းမို့ သူ့အသံနဲ့တူအောင် လုပ်ဆိုတာပါ။ ဥသြဘသောင် ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကျွန်တော်က ကိုဝင်းဦး အသံနဲ့ ဆိုမယ်၊ သုမောင် အသံနဲ့ ဆိုမယ်ဆိုရင် ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ပါ။ တချို့သီချင်းတွေမှာ ကျွန်တော့် မူနဲ့ ဆိုတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥသြဘသောင်ကတော့ ကျွန်တော် သိပ်ပြီး လေးစားကြည်ညို တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မို့ သူ့အသံနဲ့ မတူ တူအောင် လုပ်ဆိုခဲ့တာပါ"
" သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ တချို့က လျှာဖျားနဲ့၊ တချို့က လည်ချောင်းက၊ တချို့က ရင်ထဲက ဆိုကြတယ်။ ကိုသုမောင် က ဘယ်လို ဆိုပါသလဲ "
" ကျွန်တော်ကတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ ဆိုပါတယ်။ ရင်ထဲကလာတဲ့ အသံဟာ အသက်အ၀င်ဆုံးလို့လည်း ယုံကြည် လို့ပါ"
" ဒီနေ့ ဂီတလောကအပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ "
" လူဆိုးဖြစ်ဖြစ်၊ လူကောင်းဖြစ်ဖြစ် သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ကောင်းနေကြတာပါပဲ "
" ခေတ်ပေါ်ဂီတ အပေါ်မှာကော "
" ဟဲ ဟဲ ... ဟဲ ဟဲ ... "
" ဘယ်လိုလဲ ... နှာစေးနေလိုက်တာလား။ ဒါဆို ဒီနေ့ ရေးနေကြတဲ့ တေးစာသားတွေအပေါ်မှာကော ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ "
" ဒီမေးခွန်းမှာတော့ နှစ်ခု ပြောပါရစေ။ တစ်ခုက အများအားဖြင့် လူငယ်တွေကို ဘက်လိုက်ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ပေးတာ တွေ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အရမ်းလွမ်းပြီး၊ အရမ်းဒေါသ တွေကြီးနေကြတာ တွေ့ပါတယ် "
" ကိုသုမောင် အခု ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်း တော်တော်များများမှာ သရုပ်ဆောင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ကက်ဆက်ဇာတ်လမ်း တော်တော်များများဟာ ဗရုတ်သုတ်ခနဲ့ တော်တော် ဒုက္ခပေးနေကြပါတယ်။ ဒီလို ဇာတ်လမ်း တွေမှာကော သရုပ်ဆောင်ပေးနေတာပဲလား "
" အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို ကျွန်တော် တော်တော် ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခု တစ်နိုင်ငံလုံး စာတတ်မြောက်ရေးကိစ္စလုပ်နေတယ်။ အဲဒီလို လုပ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် နောင် လာမယ့် ညဘယ်နှနှစ်လဲတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ အဲဒီကျရင် တစ်နိုင်ငံလုံး စာတတ် သွားမယ်ဆိုရင် အခု ကိုဝင်းငြိမ်း ပြောတဲ့ ဗရုတ်သုတ်ခ အားလုံး ပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ မရသေးဘူး။ သူတို့ အသိဥာဏ်ဟာ နည်းနည်း နိမ့်နေသေးတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး စာတတ်လာရင်တော့ အသိဥာဏ်တွေ မြင့်မားလာပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာလုပ်မယ်၊ ဘာကိုင်မယ် ဆိုတာ တွေ ပေါ်လာမယ်။ အဲဒီအခါမှာ အလိုလိုနေရင်း အခုနက ကိစ္စတွေ ပျောက်သွားပြီး အကျိုးပြု စာပေ၊ အကျိုးပြုဇာတ်လမ်း၊ အကျိုးပြု တေးသရုပ်ဖော်၊ အကျိုးပြုရုပ်ရှင်၊ အကျိုးပြုသီချင်း စသည်ဖြင့် ပေါ်ပေါက် လာ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ကျွန်တော် ယုံကြည်ထားပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ဒီဗရုတ်သုတ်ခတွေမှာလည်း ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်နေရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ကျွေးမွေးထားရတဲ့သူ မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖေ လက်ထက်ကတည်းက စခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားတွေရော၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေရော ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ တာဝန်အများကြီးရှိပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခြံထဲမှာ ကလေးချည်းပဲ ၈၇ ယောက် ရှိတယ်။ အဲဒီကလေးတွေကို ကျွေးနိုင်ဖို့ အတွက် တစ်ခါတစ်ရံမှာ မတတ်သာတဲ့အဆုံးမှာ ဒီကိစ္စကို လုပ်နေရပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းရင် လဦးဦးသုမောင်၊ ပိုက်ဆံတစ်မတ် ပေးပါ" ဆိုတဲ့ ကလေး ၈၇ ယောက်အတွက် ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်နေရပါတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ "
" စာပေ ဟောပြောပွဲ တွေကို ကျင်းပတဲ့နေရာမှာ ၀င်ကြေး၊ အခကြေးငွေ ယူနေကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ "
" အစဉ်အလာအရကတော့ စာပေဟောပြောပွဲကို ငွေကြေးပေးပြီး နားထောင်ရတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကြိုးကြားကြိုးကြား ငွေကြေးလက်ခံပြီးတော့ လုပ်လာကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီအတွက် ကောင်းတာလည်း ရှိသလို၊ မကောင်းတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာကောင်းလာသလဲဆိုတော့ အခကြေးငွေ မယူဘဲ အပေါစားဆန်ဆန် လုပ်တော့ အပေါစား ဟေးလားဝါးလား လုပ်တဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ဖူးတာ သန့်သွားတယ်။ မကောင်းတာကတော့ တကယ် နားထောင်ချင်ပါလျက်နဲ့ ငွေကြေး မတတ်နိုင် လို့ နားမထောင်ရတဲ့သူတွေ ရှိတဲ့အတွက် ဟောပြောရတဲ့ စာရေးဆရာတွေဘက်က နစ်နာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တကယ့် စာဖတ်ပရိသတ် လျော့သွားသလိုပါပဲ "
" ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာ ... အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဆရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရတာ မပြည့်စုံသေးပေမယ့် စာဖတ် ပရိသတ် သိချင်တာတွေ တော်တော်များများတော့ ဆွေးနွေးခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ ပေဖူးလွှာအတွက် အချိန်ပေး ခဲ့တဲ့အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာ ကျင်လည်နေရတဲ့ အနုပညာအားလုံးမှာ အောင်မြင် ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်"
ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ်-၃၂၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်။
Posted by SHWE ZIN U at 6:20 AM0comments Links to this post
သော်တာဆွေ ၏ ငွေကို လေလိုသုံးသူ အပိုင်း (၃) (ဇာတ်သိမ်း)
ထိုနေ့ နံနက်က စထရင်းဟိုတယ်တွင် သူရှိကြောင်းသိရ၍ ကျွန်တော် ကိုးနာရီလောက် သူ့အခန်း ရောက် သွားသော အခါ သူ့လက်စွဲတော် အပြင် အခြား လူနှစ်ဦးရောက်နေချေပြီ။
"ကဲ.. ဒီနေ့ မနက်စာ ဘယ်ဟိုတယ်မှာ စားကြမလဲ" ဟု မေးမြဲ။
"ကဲ… ဒီမနက်တော့ မီးရထားဟိုတယ်မှာပဲ စားကြမယ်ဗျာ၊ အဲဒီမှာ မစားရတာလဲ တော်တော် ကြာပြီ၊ ဘယ့်နှယ်လဲ ကိုဆွေ"
ဟိုတယ်ဟင်း ခံတွင်း မတွေ့လေလျှင် ဗရစ်ဗတောက် ပြောတတ်သော ကျွန်တော့်အား မေး၏။
"ကောင်းပါတယ်ဗျာ.. မီးရထားဟိုတယ်က အဘေလုံးဟင်းချိုကို ကျွန်တော် တော်တော် ကြိုက်တယ်"
ကိုမြမောင် သည် အစားအသောက် အကျွေးအမွေး၌ ရက်ရောသူဖြစ်သည်။ ဘယ်အခါမဆို သူနှင့် ပါသွားသူတို့အား ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာ ကိုယ်မှာစားကြ၊ ကြိုက်ရာအရက်ကို သောက်။
ထိုနေ့ နံနက်စာကို ကျွန်တော်တို့ခြောက်ယောက် မီးရထားဟိုတယ်မျာ ဆယ့်တစ်နာရီလောက် ကစ၍ စားကြသည်။ ခေါ်ထားသော ကောင်မလေးများလည်း ဟိုတယ်အပေါ်ထပ်အခန်းထဲမှာ သူလိုရာ မှာ စားစေသည်။
ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲလောက် ကျွန်တော်တို့ စားသောက်ပြီးကြသောအခါ ကိုမြမောင်က "ကဲကိုဆွေ.. ခင်ဗျား အိမ် ပြန်ပို့ရမလား၊ ကျွန်တော့်အခန်းမှာပဲ နေဦးမလား"
"အိမ် မှာ အိုက်တယ်ဗျာ၊ ခင်ဗျား အခန်း ထဲမှာပဲ အောင်းနေဦးမယ် ညစာစားပြီးမှ ပြန်မယ်"
ကျွန်တော် ဟိုတယ်စာ နှင့် ဝေးခဲ့တာ တစ်ပတ်ရှိခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် ညစာကို မီးရထား ဟိုတယ် ထက် ကောင်းသောဟိုတယ်မှာ စားချင်သေးသည်။
သူ့ လက်စွဲတော် အား ကျွန်တော့်ကို စထရင်းဟိုတယ်သို့ သူ့ကားနှင့် လိုက်ပို့စေ၏။ ကျွန်တော် သည် သူဌေးမင်း စည်းစိမ်ဖြင့် ကိုမြမောင် အခန်းအောင်းရင်း ကိုမြမောင် အကြောင်းကို စဉ်းစား သည်။
ကျွန်တော်တို့အရပ် မှာ ပြောလေ့ပြောထ ရှိကြသည်။
"ဟဲ့.. ငွေကို ထွင်းထဲက နှိုက်ရတယ်များ အောက်မေ့နေသလား"
ဤစကားနှစ်ရပ်သည် ကိုမြမောင်နှင့် လားလားမျှ မအပ်စပ်ပါချေ။ ချမ်းသာသည်ဖြစ်၍ ငွေကို တွင်းထဲက နှိုက် ယူသည် မဟုတ်ပါလား။
ကိုမြမောင် သည် မိုးကုတ်သား။ သူ့မိဘများက ပတ္တမြားတွင်းဖြင့် ချမ်းသာသည်ဖြစ်၍ ငွေကို တွင်းထဲက နှိုက် ယူသည် မဟုတ်ပါလား။
ကိုမြမောင် အား ငွေကိုရေလိုသုံးတဲ့လူပဲဆိုလျှင် "ဒရယ်၊ ယုန်၊ ကြောင်၊ တွေ့တိုင်းအောင်သည်။ တောတောင် သနင်း ခြင်္သေ့မင်း"ဆိုဘိသကဲ့ သို့ ဟိနတ္တဒေသ သင့်ချေမည်။ ကျွန်နုပ်တို့သည် ရေကို သုံးရန် ယူငင်ရသေးသည်။ သိုလှောင် ရသေးသည်။ ခွက်ဖြင့် ခပ်ရသေးသည် မဟုတ် ပါလား။
ကိုမြမောင် က ငွေကို ရှာဖွေစရာလည်း မလို၊ သိုလှောင်စရာလည်းမလို။ ယူငင်စရာလည်း မလို ရောက်လေ ရာရာမှာ သူလက်မှတ် ထိုးလိုက်ရုံဖြင့် ပြီး၏။ သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းပြောလိုက်ရုံ နှင့် သူလိုချင်သော ငွေ ရှေ့သို့ ရောက်လာရ၏။
စင်စစ် သူငွေသုံးပုံမှာ ကျွန်တော်တို့ လေကို သုံးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။. ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က သူ့အား ငွေကို လေလို သုံးတဲ့လူဟု တင်စားခြင်းဖြစ်ပါ၏။
သူသည် မော်တော်ကား ကို အလဲလဲထား၍ အမျိုးမျိုးစီးရန်ဝါသနာ ပါ၏။ မော်တော်ကားကို ကလေး ကစား စရာ ဝယ်သလိုဝယ်၏။ မကြိုက်မနှစ်သက်တော့လျှင်လည်း ကလေးကစားစရာ လွှင့်ပစ်သလို လွှင့်ပစ် တတ်၏။
တစ်ကြိမ်သောအခါ သူ့တွင် ရန်ကုန်မှာစီးသော (ဃ-၃၅၀၀)ပစ်ကတ်ကားကြီး ရှိနေ၏။ အမြင် မှာ အင်မတန် ကြီးကျယ်ပါပေသည်။ ခန့်ထည်ပါပေသည်။ ကိုယ်ထည် အထိန်းရှိ၍ ချိုင့်ပက် တက်နင်းလို့မှ ဆောင့်ခြင်း၊ ခုန်ခြင်း မရှိပါပေ။ ကျွန်တော်ကား သူနှင့် သည်ကားကြီး စီးရတာ အလွန်နှစ်သတ်၏။
သို့သော် သူသည် ထိုကားကြီးကို ငြီးမွေ့ လာသည်ဟု ပြောသည်။ ဒါကြီး စီးရတာ တုံးတယ် ဟု ဆိုသည်။ ဒါနှင့် သူသည် တခြားကားတစ်စီး ဝယ်မည်ဟု ရှာဖွေစေပြီးနောက် ထို့နေ့၌ ထိုကားကြီးကို သူ့မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်အား အလကား ပေးပစ်လိုက်တော့၏။။
ဤကားကြီး သူတည်းသော စထရင်းဟိုတယ်နံဘေးမှ ထွက်သွားပြီး မကြာမီ သူနောက်ထပ် ဝယ်မည့် မာစီဒီဘင့် ကားကြီး တစ်စီး ပွဲစားနှစ်ဦးဖြင့် ရောက်လာ၍ သူနှင့်ကျွန်တော်သည် မြို့ လုံးပတ်လည် လျှေက်စီး ကြည့်လိုက်ကြ၏။
ကျွန်တော့်အား "ကိုဆွေ ဘယ့်နှယ်လဲ" ဟု မေး၏။
ကျွန်တော် ဘယ့်နှယ်ပြောတတ်ပါ့မလဲ စာရှုသူရယ်။ သူ့အရာ သူသာသိပေမည် မဟုတ်ပါ လား။
သူ နှစ်သက်၍ ဟိုတယ်ပြန်ပြီး ဈေးဆိုကြသောအခါ ရောင်းသူများက တစ်သိန်း စဆို၏။
ကိုမြမောင် က ကိုးသောင်းပေး၏။
"ကျုပ် တစ်ခွန်းပဲ ပြောတတ်တယ်"
ရောင်းသူများကလည်း ခေါင်းမာစွာပင် ကိုးသောင်းငါးထောင် မျှမရလျှင် ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မရောင်းနိုင်ပါဟု ဆိုပြီး ပြန်သွားကြ၏။
ကိုမြမောင်လည်း ငွေငါးထောင်ကို အရေးလုပ်၍မဟုတ်ပေ။ သူ့စကားတစ်ခွန်းပဲဟု တောင့်ခံ လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုနေ့၌ သူနှင့်ကျွန်တော်သည် ကားမရှိတော့သဖြင့် အခြင်းအပြင်သို့ မထွက်ကြတော့ ဘဲ ညနေ ရောက်သောအခါ၌ စထရင်းဟိ်ုတယ်မှာပဲ သောက်ကြ၏။
အရက် သောက်ရာတွင် ကျွန်တော်သည် စထရင်းဟိုတယ်မှာ မကြိုက်ဆုံးဖြစ်လေ၏။ ပုလင်း လိုက် တောင်း မရ၊ တစ်ခါပေး ဟတ်ပက်၊ ဟတ်ပက်ကို ဘီလ်တွေက တစ်ခါပေးတိုင်း တစ်ခါ ရေး၍ လင်ပန်း ပေါ်မှာ ပါလာ၏။
နောက်ပြီး အစား ကလည်း (ထိုစဉ်က) ဥရောပစာသာဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့ မနှစ်သက်။ ကိုမြမောင်က ကျွန်တော့် မျက်နှာ အကဲခတ်၍ တစ်နေ့တလေ သည်းခံစားသောက်ပါဗျာဟု ပြော၏။ သို့ဖြင့် ကျွန်တော် ရောသူရော မူး ၍ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်သောအခါ ကိုမြမောင် က…ဒီ ညတော့ ကျွန်တော် ကားမရှိလို့ လိုက်မပို့ နိုင်ဘူး ဟော်တယ် က တက်စီ နဲ့သာပြန်ပေတော့ ဟုပြောသည်။
"ဟာ… တက္ကစီကားက နံပါတ်နီနီကြီးနဲ့ မစီးချင်ဘူးဗျာ"
ကျွန်တော်က မူး၍ ထုံးစံအတိုင်း ဂျီတိုက်လာ၏။
"ဟာ… ခင်ဗျားသက်သက် ကျွန်တော့်ခွလုပ်ပြီဗျာ"
"ဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်က အကောင်းပြောတာပါ၊ စရိတ်ကုန် သက်သာအောင်လို့"
"တော်… တော်၊ ခင်ဗျား အိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်မရောက်ရင် ခင်ဗျားမိန်းမက ကျွန်တော့် ဂျီကျဦးမှာ"
"ဘာ… ကျွန်တော့်ကား မရှိလို့"
ကျွန်တော့် စကားမဆုံးမီ ဖြတ်ပြောပြီး တယ်လီဖုန်းဆီသို့ ထသွားသည်။ နောက်ထပ် ကျွန်တော် တို့ တစ်ခွက်စီ လောက် အကုန်မှာ နေ့ခင်း က ကားလာရောင်းသူများ ရောက်လာကြသည်။
"ခင်ဗျား တို့ ကား ထားခဲ့တော့၊ ငွေတော့ ခုတစ်ပြားမှ ပေးစရာမရှိဘူး၊ ဟိုဆိုင်ပိတ်သွားပြီ၊ နက်ဖြန်မှ လာ ယူကြ"
စထရင်းဟိုတယ် ၌ရှိသော မိုးကုတ်ပတ္တမြားဆိုင်မှာ ကိုမြမောင်၏ငွေတိုက်ဖြစ်သည်။ သူ ဘယ်လောက် လိုချင် လိုချင် အဲသည်ဆိုင်က အချိန်မီရအောင် ဆောင်ကြဉ်းပေးရသည်။ ဟိုလူနှစ်ယောက်ကလည်း ဘာမျှ မပြောချေ။ ကိုယ်စိတ်ပေါ့ပါးစွာနှင့် ကားသော့လေးချပြီး ထွက်သွားကြလေ၏။
ငွေကို ဘယ်လောက် ဂရုမစိုက်သောလူပါနည်း။
ကျွန်တော်နှင့် သိကျွမ်းစအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၌ မြမောင်ကုမ္ပဏီဟု ခန်းလုံး ပြည့် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီး နှင့် ရှိသည်။
သူဤကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ ငွေလေးသိန်းကျော် သူအဖြောင်ခံရ၍ ဝတ်လုံငှားပြီး တရားစွဲ သည်။
အမှု့ ရုံးချိန်း နေ့မှာ သူ့ဝတ်လုံအား မှာလိုက်သည်။
..ကျွန်တော် ရုံးမှာ အချိန်ကုန်ခံပြီး ထိုင်မနေချင်ဘူး၊ အမှု့စစ်ခါနီး ဆယ်မိနစ်လောက်မှာ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ..ဟု ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်၏၊
ကျွန်တော်တို့ သည် ထိုနေ့မှာ သူ့ဝတ်လုံဆီက ဖုန်းသံစောင့်ရင်း ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ရှိ မိုးကုတ်ကလပ် မှာ ဝီစကီနှင့် ဇိမ်ခံနေကြသည်။
သူ့ဝတ်လုံ ထံမှဖုန်းလာလေသော် ကိုမြောငမသည် သွားနားထောင်ပြီး မျက်နှာရှုံကာ ပြန်လာလျှက်..
ဒုက္ခ ဘဲ အပေါ်ဖုံးအင်ကျီ ၀တ်ခဲ့ရဥိးမတဲ့ဗျ..
အေးပေါ့ဗျာ..ငွေလေးသိန်း အမှုရှင် တရားလိုကြီးဆိုတော့ လူကြီးလူကောင်းလို ဝတ်ရဦးမှာပေါ့ဗျ..
ကိုမြမောင်သည် ဘယ်တော့မှ ထည်ထည်ဝါဝါ ဝတ်ဆင်လေမရှိပေ။ ဟာဝေယံ ရှပ်လက်တိုလေး နှင့် ချည်ချောလုံချည် သာ ဝတ်လေ့ ရှိသည်။ သိုဖြင့် သူ ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ နှင့် ထွက်လာလျှက် ..ကဲ ကိုဆွေ ခင်ဗျား တို့ပါ လိုက်ခဲ့ကြဗျာ..ပြန်လာမှ ဆက်သောက်ကြတာပေါ့ သိပ်ကြာမယ် မထင်ပါဘူး.
ကျွန်တော် တို့ သောက်ဖော်တစ်သိုက် လိုက်သွားကြသည်။
ရုံးမှာ တစ်နာရီလောက် အစစ်ခံရသည်။ တရားသူကြီးရှေ့မှာ မတ်တတ်ရပ်လျှက် တရားခံဝတ်လုံ၏ မေးမြန်း ခြင်း ကိုခံရသည်။
ဤအဖြစ်ကို သူ လုံးဝမနှစ်သက်
ထို့ကြောင့် ဤစစ်ချက်ပြီးသောအခါ သူ့ဝတ်လုံအား အမှုကိုပြန်၍ ရုပ်သိမ်းစေလိုက်တော့၏။
သက်သက် ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ် ဒုက္ခခံရတယ်ဗျာ။ ဒီငွေလဲ ပြန်မလိုချင်တော့ပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ သူ့အဖို့ သည် ငွေလေးသိန်း ပြန်ရတော့ကော ဘာထူးဦးမည်နည်း၊
ကိုမြမောင်ကို ဝမ်းတွင်းပါသူဌေးဟု ခေါ်ရမည်ဖြစ်၏၊ သူ့ မိဘများသည် မိုးကုတ်မြို့တွင် ကံအကောင်းဆုံး ကျောက် အအောင်ဆုံးဖြစ်၏၊၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး မဖြစ်မီက သူ့အဖေသည် ပြင်သစ်ပြည် ပဲရစ်မြို့တွင် ပတ္တမြား ဆိုင်သွားဖွင့်ထား၍ မြန်မာပြည်က ကျောက်မျက်ရတနာများကို ကမ္ဘာ့ ဈေးထိပ်တန်းမှာ ရောင်း ခဲ့သူဖြစ်၏၊ ၁၉၄၅-၄၆ ခုနှစ်တွင် ကိုမြမောင်သည် ပဲရစ် မြို့မှာ သွားနေ၍ ပဲရစ်နှင့် လန်ဒန်ကို အိမ်ဦးကြမ်းပြင် ကူးကာ အမေရိကန် အင်္ဂလန် မီလျှံနာများကဲ့သို့ သုံးဖြုန်း ခဲ့သူဖြစ်၏။
နောက် သူ့ဖခင်ကွယ်လွန် ၍ ပဲရစ်မှာ ပတ္တမြား ဆိုင် မရှိတော့သော်လည်း ကိုမြမောင်အဖို့ မြန်မာပြည်မှာ သူ့ တစ်သက် ဘယ်လောက် သုံးသုံးဖြုံးဖြုံး မကုန်နိုင်၊ သူ့မိခင်က တစ်ဦးတည်းသောသားကြီး အား သုံးစမ်း ပါစေ ဖြုန်းစမ်း ပါစေ မသုံးမှာ မဖြုန်းမှာကိုသာ ပူသည်၊ မြမောင် တစ်သောင်းဖိုး သုံးဖြုန်းလျှင် တစ်သိန်း ဖိုး ကျောက်ရသည်ဟု ပြောစမှတ်ပြုသည်ဟူ၏။
တစ်နေ့တစ်၌ ကိုမြမောင် သည် အရက်မူးလွန်၍ ကျွန်တော့် အိမ်တွင် လဲပြီး တစ်ရေးနိုးမှာ ထပ် သောက်ရင်း ဘာများတွေး၍ ဝမ်းနည်းလေသည် မသိ..မျက်ရည်များထွက်လျှက် ကျွန်တော့် အား ပြောဖူး သည်။
ကိုဆွေ ကျွန်တော်မှာ ငွေသိပ်ချမ်းသာတော့ သဘောရှိ သုံးဖြုန်းပြီး စိတ်ထင်သလို နေရစားရတာ ပျော်တယ် ကိုယ့် ဘဝကိုယ် ကျေနပ်နေတယ် များထင်သလား.. မထင်နဲ့ ကိုဆွေ၊ ကျွန်တော် ခင်ဗျား ဘဝနဲ့ ကျွန်တော်ဘဝ လဲရရင် လဲလိုက်ချင်တယ် သိရဲ့လား"
သူ့အသည်းနှလုံး က ပြောသောစကားဖြစ်သည်။
ဤသည်ကို ကျွန်တေယ် အလေးအနက် စဉ်းစားသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည် လောကနိဗ္ဗာန် ဖြစ်သည်ဆိုသော ခေတ်ကပင် ငွေရှိလိုတရသော ခေတ်ကပင် ကျွန်တော် သူနှင့် ရင်းနှီးလှစွာ ပေါင်းသင်းခဲ့ပါသည်။
ကိုမြမောင် သည် သူ၏ဇာတိ မိုးကုတ်မြို့နယ် နှင့် ယခု သူ့မိခင်နေသော မန္တလေးမြို့မှာထက် မြန်မာပြည် တွင် အကြီးဆုံးသော သုံးလို့ဖြုန်းလို့အကောင်းဆုံးသော ရန်ကုန်မြို့မှာ အနေများ ပါသည်။ စထရင်း ဟိုတယ် မှာ တည်းပါသည်။ ဟိုတယ်အောက်မှာ သူ့ကားကြီးတစ်စီး ထားပါ သည်။ သူလိုသမျှ ခိုင်းရန် လက်စွဲတော် တစ်ယောက်နှစ်ယောက် ထားပါသည်။ သူတို့သည် နံနက်မိုးသောက်လင်းလျှင် သူ့ဆီ ရောက်ရသည်။
ကိုမြမောင် သည် နံနက်(၈)နာရီလောက်မှာ အိပ်ရာထတတ်ပါသည်။ ဟိုတယ်က ပေးသော ဘရိတ်ဖတ်စ် ခေါ် ကောဖီတစ်ယောက်စာ၊ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်နှစ်ချပ်၊ ဝက်မလွတ်ငှက် ပျောသီးတစ်လုံးတို့ကို စားလို က စားပါသည်။ ရေချိုးအဝတ်အစားလဲပါသည်။ ရောက်လာမည့် မိတ်ဆွေများကို မျှော်ပါသည်။
ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခု မှာ နံနက်စာ စားရအောင်ပါ။ ဟိုတယ်မှာ စားတော့ လူများ မှ ဟင်းများများ နှင့် စားလို့ မြိုင်သည်။ မြိန်သည် မဟုတ်ပါလား။
(၁၁)နာရီ လောက်ထိအောင် စောင့်သည်။ ရောက်သင့်သလောက် ရောက်မလာပါက ဖုန်းရှိသောအိမ်ကို ဖုန်းဆက်၍ ခေါ်သည်။ ဖုန်းမရှိသော သူကို သူ့လက်စွဲတော်နှင့် ကားလွှတ် ၍ခေါ်သည်။
အဲ..သူ့စိတ်ကြိုက် လူပြည့်စုံပါက သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်း၍ ထွက်ခဲ့ပြီး ခု မနက်စာ ရွေးချယ် သော ဟိုတယ် သို့ လာခဲ့ကြသည်။
ကိုမြမောင် ၏ ထမင်းစားဝိုင်း မှာ အရက်ပါသည်။
ထိပ်တန်း ဝီစကီ ကို မှ သောက်သည်။
သူပြောဖူးသော စကားကို မှတ်မိပါသည်။
"ဝီစကီ ထဲမှာ ကျွန်တော် ဂျွန်ဟိတ် နဲ့ ဂျော်ကာဝါးကား ရက်လေဘယ် ကို မကြိုက်ဆုံးပဲဗျ" တဲ့။
ကဲ… သူ ဘယ်လိုဝီစကီမှသောက်သည်ကို ဝီစကီနားလည်သူများခန့်မှန်းကြပေရော့။ အများအားဖြင့် ဂျော်နီဝါကား၊ ဘလက်လေဘယ် သို့မဟုတ် ဗက်စ္စတီနိုင်းကို သောက်တတ် ပါသည်။ ဝှိုက်လေဘယ်က သူ အညံ့ဆုံးထား၍ သောက်သော အရက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း သူနှင့်ဆိုလျှင် နားတောင်း ရောင် နှင့် ပါးပြောင်ကြသည်ပေါ့။
ကိုယ်ကြိုက်သော အရက် ကိုယ်သောက်နိုင်သည်ဆိုသော်လည်း သူသောက်သော ဝီစကီထက်ကောင်းတာ မြန်မာပြည် မှာ ရှိပါဦးတော့မည်လော။ စားစရာကိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်ရာ ကိုယ်မှာနိုင်သည်။ ဤသို့ မမှာ လိုပါက "ဟေ့… တို့လူ ခြောက်ယောက်စာ ဟင်းဆယ်မျိုးကွာ " စသည်ဖြင့် အော်ဒါလုပ်လိုက်သည်။
ယင်းသို့ နံနက်စာကို (၁၁)နာရီလောက်စသောက်ကြစားကြပြီး နာရီပြန်တစ်ချက်လောက်ပြီး သည်၌ လူစု ခွဲကြသည်။
ကိုမြမောင် က ပို့သင့်တဲ့လူကို ပို့စေပြီး "ကျွန်တော်တော့ ဟိုတယ်ပြန်မှိန်းဦးမယ်ဗျာ" ဟု စထရင်းသို့ ပြန်၏။
သူ ယင်းသို့ မှိန်းပြီး နေ့လယ် သုံးနာရီလောက် အိပ်ရာကထ၏။
ကဲ… လူတစ်ယောက် (ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးထုံးစံ) တစ်နေ့ ထမင်းနှစ်ခါ စားရမည်မှာ တစ်ခါ ကျန် နေသေး၏။ ငါးနာရီခြောက်နာရီလောက်မှာ ကားနှင့်လျှောက် လေညင်းခံပြီး နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုသို့ ရောက်ကြပြန်၏။ ကောင်းတာတွေ သောက်ကြပြန်၏။. စားကြပြန်၏။
ညဆယ်တစ်နာရီ လောက် လူစုခွဲပြီး ကိုမြမောင် စထရင်းဟိုတယ်သို့ ပြန်အိပ်ပြန်၏။
နံနက်ရှစ်နာရီ လောက် အိပ်ရာက နိုးပြန်၏။ ရေချိုး အဝတ်လဲပြန်၏။ မိတ်ဆွေ တွေ ဆုံမိကြပြန်၏။
ဘဲလ်အဲယား သို့မဟုတ် မာစီဒီးဘင့်ကားကြီးနှင့် စိတ်ကြိုက်ဟိုတယ်ရွေးပြီး သွားစားကြ သောက်ကြ ပြန်၏။
နာရီပြန် တစ်ချက်လောက် လူစုခွဲကြပြန်၏။
စထရင်းဟိုတယ်၌နေ့လယ်သုံးနာရီလောက် ကိုမြမောင် မှိန်းရာက ထပြန်၏။ ရေမိုးချိုး၏။ အဝတ်လဲ၏။ သောက်ဖော် မိတ်ဆွေများကို မျှော်ပြန်၏။ စုမိကြပြန်၏။. သွာပြီး စားကြသောက် ကြပြန်၏။
သန်းခေါင် လောက် ကိုမြမောင် ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီး အိပ်ပြန်၏ နောက်တစ်နေ့၌ တစ်မိုး သောက် ပြန်၏။
ကိုမြမောင် သည် သူ၏ နစ္စဓူဝအတိုင်း တစ်နေ့တာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ရပြန်၏။
သင့်စိတ်ကူး ဖြင့် သီတင်းတစ်ပတ်လောက် သို့မဟုတ် တစ်လလောက် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် သလောက် ကိုမြမောင် နေရာမှာ ဝင်ကြည့်စမ်းပါ။
ဘဝ၏ အဓိပ္ပါယ် ဘာရှိတော့သနည်း။
(၁) လောကကြီးတွင် ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းအိပ်နေရုံနှင့် မပြီးသေးတကား။
(၂)သို့သော် ကျွန်တော်သို့သည် နေ့စဉ်ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းအိပ်၊ ကောင်းကောင်း နေကြ ရန် ကြိုးစား နေကြသည် မဟုတ်ပါလား။
ဤအကြောင်း နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီး စဉ်းစားလိုက်သောအခါ၌ ဘ၀၌အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
စင်စစ်ဘ၀၏ လန်းဆန်းစိုပြည်ရန်၊ ဘ၀ကိုမငြီးငွေ့ရန်မှာ အလုပ်လုပ်ရန်ပင် ဖြစ်ချေသည်။ ကိုယ်လုပ်သော အလုပ်၌ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် ရောက်သည်လည်းရှိမည်၊ မရောက်သည် လည်းရှိမည်၊ မကျေနပ် မှုလည်းရှိမည်၊ ၀မ်းသာမှုလည်းရှိမည်၊ ၀မ်းနည်းမှု လည်းရှိမည်။
ယင်းသည်ပင် ဘ၀၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် အနှစ်သာရဖြစ်တော့၏။
သို့သော် ကိုမြမောင်၌ ဘာအလုပ်မျှ လုပ်စရာမရှိ ဘာမျှကြိုးစားစရာမရှိ။ သည်သည် ဘ၀၏ အလုပ် လက်မဲ့ ဖြစ်နေသည်။ သူ့အခြေကလောကီဥစ္စာကို လိုတရနေသည်။ ယင်းသည်ပင် ဘ၀၏မပြည့်စုံမှု ဖြစ်သည် ကို အလေးအနက် စဉ်းစားတတ်သူတို့ နားလည်ပေမည်။
စင်စစ်ကား ဘ၀တုသည် ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး တက်ကျနိမ့်မြင့် မခြား ဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံသည် မရှိချေ။ ယင်းမပြည့်စုံ သည်ကို ပြည့်စုံလိမ့်နိုး ကြိုးစားနေရခြင်းပြင် ဘ၀မည်ပါ၏။
ကိုမြမောင် ၌ကား ယင်းသို့ကြိုးစားစရာ အကြောင်းမရှိ။
ဘ၀၏ အလုပ်လက်မဲ့ ဟု ကျွန်တော်ဆိုပါ၏။
ကိုမြမောင် သည် ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာရုံမက ရုပ်ရည်ချောမောသူလည်း ဖြစ်၏။ အသားဖြူဖြူ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် သွယ်သွယ်သပ်သပ်၊ အရပ်မြင့်မြင့် နှင့် မျက်လုံးမျက်ဖန် နှာတံနှုတ်ခမ်း လှပသူ ဖြစ်၏။
တစ်နေ့သ ၌ ရှုမ၀တိုက် ကျွန်တော့်ဆီသို့လာနေသော ကိုမြမောင်ကို ဦးကျော်က မြင်ဖူးလိုက် သဖြင့် ဒါရိုက်တာ ဦးကျော် က "ခင်ဗျားလူ ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်ခိုင်းစမ်းပါ"ဟု ပြောဖူး၏။ ကျွန်တော်က "ဝေလမင်းသား ကို ဟောလီဝုဒ်က ခေါ်မရသလို ရှိမှာပေါ့ဗျ"ဟု ပြန်ပြောလိုက်၏။
ဤစကား မလွန်ပါချေ၊ ကိုမြမောင်သည် ကျော်စောကိတ္တိလည်း မလိုချင်၊ ရှက်လည်း အလွန် ရှက်တတ်။ ငွေ ဆိုတာလည်း သူ့ဘာသူ သုံးလို့ဖြုန်းလို့မကုန်နိုင်။
ဤသို့ ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချောဖြစ်ရသည့်အတွက် ကိုမြမောင် မှာ သူ့ဘ၀တွင် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ရပ် ကြုံရပြန်သည်။ အကြောင်းမှာ သူသည်အချစ်ခရီးတွင် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ အကြိတ်အနယ် ပိုးမနေရ။ ပိုးနေစရာ မလို။ သူ့ရုပ်နှင့် သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းကြောင့် လွယ်လွယ်ကလေးရ၏။ သူ့အား သမက် မတော်ချင်သူ အလွန်ရှားပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သူသည်သူချစ်ကိုယ်ချစ် သို့မဟုတ် အချစ်စစ် အချစ်မှန်ကို ရခဲ့မည် မဟုတ်ချေ။
ကျွန်တော် နှင့် စတင်သိကျွမ်းစ သူ့အသက် သုံးဆယ်လောက်၌ အိမ်ထောင်ဆက် သုံးဆက် ကွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှာ သူသည် အိမ်ထောင်ကို စိတ်မကူးချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေ ဟန်တူပေသည်။
သို့သော် နောက်ပိုင်း၌ သူ့အပေါင်းအသင်း အိမ်ထောင်ရှင်တွေအားကျလာ၍ လည်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေ ပညာရှင် များက ဘ၀ဟူသည် အတွယ်အတာရှိရမည်၊ သံယောဇဉ်ရှိရမည်၊ တာဝန် ရှိရမည်ဟု ၀ိုင်းဝန်း နားချကြပြန်သောကြောင့် ယခုသူ့နောက်ဆုံး ဇနီးကို လက်ထပ်လိုက်လေ သည်။
သို့သော် သတ္တ၀ါတို့ မည်သည်မှာ ကံကြမ္မာ၏ သားကောင် များဖြစ်လေရာ ပဋိသန္ဓေတည် ကတည်းက ကံကောင်း လာခဲ့သော ကိုမြမောင်မှာ မည်သူမျှ မရှောင်သာသော လောက၏ တရားအတိုင်း သူ့အသက် (၃၇)နှစ် တွင် ကြမ္မာဆိုးဝင်ရလေပြီ။
ရေ၌ကျွမ်းကျင်သူသည် ရေ၌သေရ၏။ ဝေဟင် ၌ ကျွမ်းကျင်သူသည် (ယူရီဂါဂါရင်ကဲ့သို့) ဝေဟင်၌ သေရ၏။ ဆိုဘိသကဲ့သို့ ငွေ၌ကြွယ်ဝသူသည် ငွေဖြင့် ဒုက္ခရောက်ရရှာ၏။
(၁၉၆၃) ခုနှစ် ရာတန်တွေ ပေးအပ်ရမည်၊ တရားမ၀င်တော့ဟု ကြေညာသည်၌ ကိုမြမောင် သည် မန္တလေးမှ ယူခဲ့သောရာတန်ငွေ နှစ်သိန်းဖြင့် အစိုးရပြန်မှု ကျူးလွန်မိကာ မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်မှာ ဖမ်း၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ သုံးနှစ်ငါးလကြာမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း လွတ်ပြီး သုံးလကျော်ကျော်လေးလသာ နေရတော့သည်။ (၁၉၆၈)ခု၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၈)ရက်နေ့ မှာ ဦးနှောက်အာရုံကြောပြတ်၍ အနိစ္စရောက်ရှာသည်။
သူထောင်ထဲ နေရ စားရပုံတွေ ပြောပြတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ တရားကျလှသည်။ ထောင်ထဲ ၌ လူတစ်ယောက် ကို သူက ရိုက်မှုဖြစ်သဖြင့် တိုက်ပိတ်ခံရစဉ်က အကျဉ်းသားတို့ ထုံးစံ သံပန်းကန်ပြား နှင့် ထမင်း ကို ငါးပိစိမ်းစားလေး တစ်တို့ ပန်းကန်နှုတ်ခမ်း သုတ်ပေးလိုက်သည် နှင့် စားရပုံများ ကြားရတော့ ထမင်းတစ်နပ် ကို နွားတစ်ရှဉ်းဖိုးမက စားခဲ့သော သူ့ဘ၀မှာ များစွာ သံဝေဂ ရဖွယ်ကောင်းလှပါ၏။
သူ့ အသုဘ က ယပ်တောင် မှာ ပါတဲ့အတိုင်းပါပဲလား
ဤတရားတော်ကို ရေးသားတော်မူသော ဆရာတော်ဘုရားအား ရှိခိုးဦးညွှတ်လျက် ကိုမြမောင်ကို လွမ်းဆွတ် သတိရစွာနှင့်…….။
Posted by SHWE ZIN U at 9:49 AM5comments Links to this post
မင်းလူ ၏ အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ, အပိုင်း (၁၁)
မတတ်သာသဖြင့် ခွက်ကို လှမ်းယူလိုက်သည်။ အသက်အောင့်ပြီး မော့ချလိုက်၏။ စိမ်း ရွှေရွှေ၊ ချွဲတဲတဲ၊ အော်ဂလီ ဆန်စရာ အရသာမျိုး။ အီလည်လည်ကြီး ဖြစ်နေသော ဦးဝင်းမောင်ကြီး ကြည့်၍ ချစ်ဦးက ...
"ဘယ်နှယ်လဲ၊ ချက်ချင်းအားရှိသွားပြီ မဟုတ်လား"
"အင်း .. အဲ ... အော့ ... ဝေါ့"
သံစဉ်မျိုးစုံ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ဦးဝင်းမောင်ကြီး ဝေါခနဲ ထိုးအန်ချလိုက်၏။
တစ်ရက် မှာ ဦးဝင်းမောင်ကြီး ရောက်လာပြီး ...
ဟု မေးသည်။ ဒေါ်ငွေဇံက
"ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့လေ၊ တီဗွီက နေ့လယ်ပိုင်း မြန်မာကား ပြတာကိုး၊ အဲဒါကြည့်ချင်လှ ချည်ရဲ့ဆိုလို့ လမ်းထိပ် က အိမ်ကို သွားပို့ထားရတယ်၊ သဲသဲက တီဗွီသိပ်ကြိုက်တာ"
"သူများအိမ် သွား သွားကြည့်နေရတာ ဘယ်အဆင်ပြေမလဲ၊ တီဗွီလေးတစ်လုံးလောက် ၀ယ်ထားပါလား၊ ၀မ်းတင်းဆယ့်လေးလက်မ လေးတွေ သင့်သင့်တင့်တင့်ဆို လေးငါးသောင်းလောက်နဲ့ ရနိုင်ပါတယ်"
"အမလေး၊ အဲဒီလောက် ပိုက်ဆံဘယ်ကရမလဲ"
"ဒါကတော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့ အစ်မကြီးရာ"
တီဗွီဝယ်ချင်တယ်ဆိုလျှင် ငွေချေးမည့်သဘောမျိုး ဦးဝင်းမောင်ကြီး အရိပ်အမြွက်ဆိုကြောင်း မြလွင်ကို ပြောပြတော့ ...
"တီဗွီက တကယ်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းမှ မဟုတ်တာ အမေရယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီလောက် ငွေကို ဘယ်လိုလုပ် ပြန်ဆပ်မလဲ"
ဟု မြလွင်က ကန့်ကွက်သည်။
"ဟဲ့ ... ချေးတယ်ဆိုတာကလည်း စကားအဖြစ်သာ ပြောတာပါ။ ငါတို့က ပြန်ဆပ်ရင်လည်း သူကယူမှာ မဟုတ်ပါဘူး"
ဒေါ်ငွေဇံ ခြေလှမ်းတွေက နည်းနည်းလွန်လာပြီဟု မြလွင် တွေးမိ၏။ စိတ်ထဲကလည်း မကြည်မသာ ဖြစ်သွား သဖြင့် ...
"ဘာလဲ၊ အမေက ကျွန်မကို တီဗွီတစ်လုံး နဲ့ လဲစားမလို့လား"
ဟု ပြောလိုက်မိ၏။ ဒေါ်ငွေဇံက ...
"အလို၊ အထေ့အငေါ့ စကားတွေတောင် ပြောတတ်နေပါပကော၊ ဘာလဲ ညည်းလည်း ကျပ်မပြည့် တော့ဘူး ထင်တယ်"
"ဟုတ်တယ် အမေရေ၊ ကျွန်မ ရူးသွားရင် ကောင်းမယ်၊ ဒါဆို ကျွန်မကို ဘယ်သူမှ ရန်ရှာမှာ မဟုတ်တော့ ဘူး"
မြလွင် သည် အေးဆေးသည်၊ သဘောကောင်းသည်ဆိုသော်လည်း စိတ်ဓာတ် ကတော့ တည်ကြည်ခိုင်မာ ကြောင်း၊ ဒေါ်ငွေဇံ သိပြီးသား။ မြလွင်ကို အကျပ်ကိုင်လို့တော့မရ။ ထို့ကြောင့် ...
"အေးပါဟယ်၊ ငါကလည်း သဲသဲက တီဗွီကြိုက်တယ်လို့ စိတ်ကူးမိတာပါ။ ၀ယ်မယ်လို့လည်း မစဉ်းစား ပါဘူး"
ဟု စကားကို လျှောချလိုက်၏။
တကယ်တော့ မြလွင် ပြောတာ မှန်သည်။ တီဗွီ တစ်လုံးလောက်နဲ့ ဘယ်လဲနိုင်ပါ့မလဲ။ သူ့မှာ ဒီ့ထက် ကောင်း တဲ့ အကြံ ရှိတယ်လေ။
ဦးဝင်းမောင်ကြီးကို ကြည့်ရတာ ထူးခြားနေ၏။ ခါတိုင်းလို စပို့ရှပ်တို့၊ ပါတိတ်ရှပ်တို့ မဟုတ်ဘဲ လည်ကတုံး အင်္ကျီ အဖြူလက်ရှည်ကို သပ်ရပ်စွာ ၀တ်လာသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဒေါ်ငွေဇံကတောင် အလှူကလာတာ လား ဟု မေးမိသေးသည်။ သူက ဒီကိုပဲ တမင်လာတာပါဟု ဆိုသည်။
သူ့မျက်နှာကလည်း ပေါင်းတင်ထားသလား၊ စနိုးတွေ လိမ်းလာသလား မသိ။ မှိုရောင် ဖွေးနေ၏။ ပြီးတော့ သူ့ဟန်ပန် ကလည်း တစ်မျိုး ဖြစ်နေ၏။ စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရသည်။ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်သည်။ လက်ကိုင်ပ၀ါထုတ်ပြီး မကြာခဏ ချွေးသုတ်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြောဖို့ အားမွေးနေ သည် ထင်ရ၏။
ဒေါ်ငွေဇံ ကတော့ အခြေအနေကို ရိပ်မိသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး စကားစဖို့ ခက်နေတာလည်း သိသည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းကြောင်း ပေးလိုက်၏။
"မောင်ဝင်းမောင် ပြောစရာ ကိစ္စများ ရှိလို့လား"
"ဟုတ် ... အဲ"
"ပြောစရာရှိရင် ပြောလေ၊ ဒီလူနဲ့ ဒီလူ အားနာစရာမှ မဟုတ်တာ"
"ဟို ... ဟိုဒင်းပါ၊ အဲ ... ဟုတ်ပြီ။ ဟိုတစ်နေ့က ပြောတဲ့ တီဗွီဝယ်ဖို့ကိစ္စ"
"သြော် ... ဒါလား၊ မြလွင်က ဘာလုပ်မှာလဲတဲ့၊ တီဗွီဝယ်မဲ့ငွေနဲ့ ဆိုင်ကို တိုးချဲ့တာကမှ ဟုတ်ဦးမယ်လို့ ပြော နေတယ်"
သူ့စိတ်ကူးကို မြလွင်ကပဲ ပြောသယောင်ယောင် လွဲချသည်။
"အင်း ... သူပြောတာလည်း ဟုတ်သားပဲ"
ဦးဝင်းမောင်ကြီး က ထောက်ခံသည်။
"အန်တီ ကတော့ တစ်မျိုး စိတ်ကူးကြည့်တယ်။ ဈေးထဲမှာ အထည်ဆိုင်လေး ဖွင့်ရကောင်းမလားလို့၊ မြလွင် က စက်လ်းချုပ်တတ်တော့ အပ်ချုပ်စက်ကလေးပါ ဆိုင်မှာ ထားလိုက်ရင် အလုပ်နှစ်မျိုး ဖြစ်တာ ပေါ့၊ အိမ်က ဆိုင်ကိုတော့ အန်တီပဲတာဝန်ယူလို့ရတယ်လေ"
"ကျွန်တော့် မှာလည်း အဲဒီ စိတ်ကူးမျိုး ရှိပါတယ်"
"ကျွန်တော့်သဘောကတော့ အစ်မကြီး တို့နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်စီးပွားတည်း ပေါင်းလုပ်ကြရင် ကောင်း မလား လို့ ... အဲဒါ"
ဦးဝင်းမောင်ကြီး လိုရင်းအချက်ကို ပြောဖို့ စကားစလိုက်ပြီ၊ ပြီးမှ ဆက်ပြောရမှာ ခက်နေဟန်ဖြင့် ရေနွေကြမ်း တစ်ခွက်ထပ်သောက်သည်။
ဒေါ်ငွေဇံ စကားထောက်ပေးလိုက်သဖြင့် ...
"ကျွန်တော် လည်း ပြောမယ် ပြောမယ်နဲ့ ချိန်ဆနေတာ ကြပါပြီ၊ အစ်မကြီးတို့ စိတ်ဆိုးသွားမလားဆိုပြီး"
"အို ... ဘာဆိုးစရာရှိလဲ"
ပြောတောင် မပြောရသေး။ ဒေါ်ငွေဇံက ခွင့်လွှတ်ပြီးသား ဖြစ်နေပြီ။
ဒေါ်ငွေဇံ က အားတတ်သရော ခွင့်ပြု၏။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးက မပြောရင်တောင် ပါးစပ်ထဲက စကားလုံးတွေ ကို အတင်းနှိုက်ထုတ်တော့မလား ထင်ရ၏။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးက ဒေါ်ငွေဇံကို မရဲတရဲ တစ်ချက် ကြည့်သည်။ မျက်လွှာပြန်ချလိုက်ပြီး အသံတိမ်တိမ်ဖြင့် ...
"အစ်မကြီး ကို ကျွန်တော် လက်ထပ်ပါရစေ"
"ပြောလက်စ နဲ့ ဆက်ပြောပါရစေတော့၊ အစ်မကြီးကို ကျွန်တော် မေတ္တာရှိနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ"
ဒေါ်ငွေဇံ မှာ အံ့သြလွန်းသဖြင့် ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘဲ ပါးစပ်ကြီးဟပြီး ငေးကြောင်ကြည့်နေသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး သည် အရှိန်ရသွားပြီဖြစ်သောကြောင့် ...
"အစ်မကြီး တို့ တစ်မိသားစုလုံးကို ကျွန်တော် တာဝန်ယူချင်တယ်၊ မြလွင်ကိုလည်း သမီးအရင်း တစ်ယောက် လို သဘောထားပြီး စောင့်ရှောက်ပါ့မယ်၊ သဲသဲချစ် ကလေးကိုလည်း မြေးကလေးကို ချစ်ပါ့မယ်၊ ချစ်ရူး ကို လည်း ..."
"တော်တော့၊ ဘာမှ ထပ်မပြောနဲ့"
ဒေါ်ငွေဇံ မှင်တက်မိနေရာမှ သတိဝင်လာသည်။
"ကျွန်တော့်ကို မယုံလို့လား၊ အစ်မကြီးကို ကျွန်တော် တင့်တင့်တယ်တယ် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ..."
ဒေါ်ငွေ ၀ုန်းခနဲ ထရပ်လိုက်သည်။
"ထွက်သွား၊ အခုထွက်သွား၊ ငါ့အိမ်ထဲက အခုထွက်သွား"
ဒေါ်ငွေဇံ၏ အော်သံကြောင့် ဆိုင်ထဲက မြလွင် ထွက်လာပြီး အိမ်ဦးခန်းဘက် လှမ်းကြည့်သည်။ အိမ်အပြင် ဘက်ကို လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီး ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်နေသော ဒေါ်ငွေဇံ။ မျက်စိမျက်နှာ ပျက်ရင်း မော့ကြည့်နေသော ဦးဝင်းမောင်ကြီး။ တန်တော့ ငွေချေးတဲ့ ကိစ္စငြင်းလိုက်လို့ ဖြစ်မယ်ဟု မြလွင်က ထင် လိုက်၏။
ဒေါ်ငွေဇံသည် ငွေမက်တတ်တာ တော့ မှန်သည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး၏ ဥစ္စာဓနတွေကို မျက်စိကျမိ တာလည်း မှန် သည်။ သို့ရာတွင် ဒါတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရဖို့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ ရင်းနှီးဖို့တော့ လုံးဝ မဖြစ် နိုင်။ ထို့ကြောင့် ခါးခါးသီးသီး ငြင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်၏။
သူထင်ထားတာ၊ သူစိတ်ကူးထားတာက တခြား၊ တကယ်ဖြစ်လာတာက တခြား။ ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့် မထားခဲ့သော ကိစ္စ။ သူတောင့်တခဲ့သော အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုကို မတတ်သာလို့ လက်မတင်ကလေး စွန့်လွှတ် လိုက်ရတာ ရင်နာလှသည်။ ထိုအချက်ကို တနုံ့နုံ့တွေးရင်း မစားနိုင်၊ မသောက်နိုင်၊ စိတ် ထိခိုက်ပြီး တစ်ပတ်လောက်လဲသွားသေးသည်။
မြလွင်က အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိ။ ဈေးထဲကမှာ ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ပိုက်ဆံချေးတာ မရသဖြင့် သူ့အမေက ဦးဝင်းမောင်ကြီး ကို စိတ်ဆိုးသွားတာလို့သာ ထင်သည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းလည်း မပြု။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး အိမ်ကို မလာတော့တဲ့အတွက် စိတ်သက်သာချောင်ချိမှုတောင် ရသွားသေးသည်။
ဦးဝင်းမောင်ကြီးသည် ပြဿနာတတ်ပြီး တစ်ပတ်လောက် ပျောက်နေသည်။ ပြီးမှ မြလွင်ဆိုင်ထိုင်နေတုန်း ပစ္စည်း လာဝယ်သလို လုပ်ရင်းစနည်းနာသည်။ မြလွင်က ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဖော်ဖော်ရွေရွေ ဆက်ဆံသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး ဈေးဝယ်ဖို့ လာချင်ယောင်ဆောင်နေမှန်း သိသာ၏။ ဘာပစ္စည်းယူမယ်ဆိုတာမျိုး တိတိ ကျကျ မရှိ။ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်ကို ယူမလိုလို၊ ရွှေဝါဆပ်ပြာပဲ ၀ယ်မလိုလို၊ ဟိုဟာကိုင်ကြည့် ဒီဟာကိုင် ကြည့်၊ ယောင်ချာချာ လုပ်နေ၏။ အိမ်အတွင်းဘက်ကိုလည်း မသိမသာကဲကဲကြည့်သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် အိမ်ထဲက ဇလုံ သို့မဟုတ် ဒန်အိုးတစ်ခုကို ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ပစ်ချလိုက်သောအသံ "ဂလွမ်" ခနဲ ကြား လိုက်ရ၏။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး မျက်နှာပျက်သွားပြီး ဘာမှ မ၀ယ်တော့ဘဲ ပြန်ထွက်သွားသည်။
ဈေးထဲမှာ ဦးဝင်းမောင်ကြီးနှင့် ဒေါ်ငွေဇံတို့ တစ်ခါဆုံကြသေးသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးက နှုတ်ဆက်ဖို့ ကြံ သည်။ ဒေါ်ငွေဇံက မျက်နှာလွဲပြီး ထွက်သွား၏။
ဦးဝင်းမောင်ကြီးသည် ဒေါ်ငွေဇံဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း အရဲစွန့်ပြီး ၀င်လာသေးသည်။
ဟု မရဲတရဲ နှုတ်ဆက်သည်။ ဒေါ်ငွေဇံက ဘာမှ ပြန်မဖြေ။
"မြလွင်၊ ဒီမှာ ဈေးလာရောင်းဦး"
ဟု လေသံမာမာ နှင့် လှမ်းအော်ခေါ်ပြီးနောက် အိမ်ထဲ ၀င်သွားသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးလည်း လက်လျှော့ပြီး ပြန်သွားရ၏။
ချစ်ဦး ကတော့ ဘာမှမသိ။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး အိမ်ကို မလာတော့သဖြင့် ဟင်းကောင်းကောင်း မစား ရတော့ တာဘဲ သိသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးကို တွေ့လျှင်
"အိမ်ကို လာလည်ပါဦးဗျ၊ ဦးဝင်းမောင်ကြီး ထမင်းလာစားမှ အဒေါ်ကြီးက ဟင်းကောင်းကောင်းချက်တာ၊ အခုတော့ ဘဲဥ တစ်လှည့်၊ ငါးခြောက် တစ်လှည့်၊ ချဉ်ရည်ဟင်း တစ်လှည့်ပဲဗျို့"
ထိုအခါ ဦးဝင်းမောင်ကြီး ပြုံးရမလို မဲ့ရမလို အီလည်လည်ကြီး ဖြစ်ပြီး ...
ဟု မရေမရာ ပြန်ပြေသည်။
ချစ်ဦးက အိမ်မှာလည်း ပြောသေးသည်။
"ဦးဝင်းမောင်ကြီး မလာတာတောင် ကြာပြီ၊ ထမင်းစားဘေး ဘာလေးဖိတ်ပါဦးဗျ"
ဒေါ်ငွေဇံ က ...
"နင့်ပထွေး ကို တမနေနဲ့"
"ဟာဗျာ၊ ဒေါ်ကြီးကလည်း ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ပြောရော့မယ်၊ ကျွန်တော့်မှာ အမေမှ မရှိတော့တာ၊ အမေ ရှိတဲ့ လူမှ ပထွေးတော်လို့ ရမှာပေါ့"
ချစ်ဦးက ပါးစပ်ထဲ တွေ့ရာပြောခြင်း ဖြစ်သော်လည်း သူ့ကို ခလုတ်တိုက်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့် ဒေါ်ငွေဇံ ဒေါသ ထွက်ပြီး အကြမ်းပန်းကန်လုံးဖြင့် ကောက်ပေါက်လိုက်သည်။ ချစ်ဦးက အသာရှောင်တိမ်းလိုက်ပြီး ...
"အဒေါ်ကြီး၊ သိုင်းလောက စည်းကမ်းကို လိုက်နာပါဗျ၊ လက်နက်ပုန်းတွေ မသုံးပါနဲ့"
ဟု ပြောပြီး လစ်ပြေးသွား၏။
မြလွင် မရယ်ဘဲ မနေနိုင်။
ချစ်ဦး လက်လျှောက်လာတာကို ကြည့်ပြီး လူတွေ ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေကြ၏။ သူက နေကာ မျက်မှန်တစ်လက် ကို တပ်ထားသည်။ ထိုမျက်မှန်မှာ မျက်စိတစ်ဖက်ခွဲထားသူတစ်ယောက်၏ မျက်မှန် ဖြစ်သည်။ မျက်စိ ကောင်းသွားပြီး တပ်ဖို့မလိုတော့သဖြင့် ချစ်ဦးကို စွန့်ကြဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မျက်မှန်မှာ မှန်တစ်ဖက် က အမည်း၊ တစ်ဖက်က အဖြူ အကြည် ဖြစ်နေ၏။
"ဟေ့ကောင် ချစ်ရူး၊ မင်းမျက်မှန်ကလည်း တစ်ဘက်မည်း တစ်ဖက်ဖြူနေပါလားကွ"
ဟု တစ်ယောက်က လှမ်းပြောတော့ ...
"ဒါ ပြဿနာ မရှိပါဘူးဗျ၊ နေက တစ်လုံးတည်း ရှိတာပဲဟာ၊ တစ်ဖက်မည်းနေရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ဒီဖက် က မှန်အဖြူ ကတော့ လကာ မျက်မှန်ပေါ့ဗျ၊ တစ်လက်တည်းနဲ့ နေ့ကော၊ ညကော တပ်လို့ရတယ်၊ မပိုင်ဘူးလား"
ဟု ချစ်ဦးက ပြန်ပြောသည်။
ကိုဘိုလေး သည် အတော် စိတ်ဓာတ်ကျနေသည်။ သူသည် မနေ့ကပင် ၀မ်းတင်းတီဗွီလေး တစ်လုံး ၀ယ် လိုက်သည်။ မနေ့ညက ကိုရီးယားကားရော၊ တရုတ်သိုင်းကားရော ကြည့်တာအဆင်ပြေလို့ပဲ။ လုံးဝ ကြည်လင် ပြတ်သားသည်။ ဒီနေ့ညနေကျတော့ ဘာဖြစ်တယ်မသိ။ အရုပ်တွေက နှစ်ထပ် သုံထပ် ဖြစ်နေ သည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အပေါ်အောက်လိုင်းတွေ ပြေးနေသေးသည်။
ဒီညနေ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှတို့၏ ဘောလုံးခြေစစ်ပွဲကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသ မည် ဖြစ်၏။ ကိုဘိုလေးသည် ထိုပွဲကို အလွန်ကြည့်ချင်နေ၏။ အရေးထဲကျမှ စက်က ဖောက် နေသည်။
အိမ်နီးနားချင်းတချို့လည်း ရောက်နေကြပြီ။ အရုပ်တွေ မကြည်မလင် ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ...
"ဟာ ... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ တီဗွီရိုက်တဲ့လူ အရက်မူးနေပြီ ထင်တယ်၊ အရုပ်တွေ လှုပ်နေတယ်"
"စက် က ဖြစ်တာပါဗျ"
"၀မ်းတင်းစက်တွေက ဒီလိုပဲဗျ၊ စိတ်မချရဘူး"
"စက်က ဖြစ်တာ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး၊ ဂျပန်လုပ် အစစ်ပဲဗျ၊ မီးအားကျလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်"
စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေး ဝေဖန်နေကြ၏။
ကိုဘိုလေးမှာ သူ့တီဗွီကောင်းကြောင်း၊ အလွန်ကြည်လင်ပြတ်သားကြောင်း တစ်ချိန်လုံး ကြွားနေခဲ့မိတာ ခုတော့ လူပုံ အလယ်မှာ အရှက်ကွဲဖို့ ကိန်းဆိုက်နေပြီ။
ထိုစဉ်မှာပင် ကယ်တင်ရှင် ရောက်ရှိလာသည်။ ချစ်ဦးပင် ဖြစ်နေ၏။ ချစ်ဦးက အိမ်ပေါ်တက်လာရင်း ...
ဟု မေးသည်။ တစ်ယောက် ...
"တီဗွီ မကြည် လို့ကွ"
"မကြည်ရင်လည်း ဖုန်တွေ သုတ်လိုက်ပေါ့"
"ဟာ ... အရေးထဲ လာနောက်နေပြန်ပြိ၊ စက်က ဖောက်နေတာ"
ချစ်ဦးက တီဗွီကို လှမ်းကြည့်သည်။ ခဏ စဉ်းစားပြီးမှ
"ဟာ ... ခင်ဗျားတို့ ဒါလေးတောင် မတွေးမိဘူးလား၊ ဒီပွဲကို ဘောလုံးကွင်းကနေ တိုက်ရိုက် လွှင့်မှာ လေဗျာ၊ ဒါကြောင့် အင်တာနာကို သုဝဏ္ဏကွင်းဘက် လှည့်ပြီးချိန်မှ ကြည်မှာပေါ့ဗျာ"
"ဟေ့ကောင်၊ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ လာရှုပ်မနေနဲ့ကွာ"
ကိုဘိုလေး က ဟောက်လိုက်သည်။ သို့ရာတွင် တစ်ယောက်က ...
ဟုဆိုသည်။ လူငယ်တစ်ယောက်ကလည်း ...
"စမ်းကြည့်တာ မမှားပါဘူး၊ ကျွန်တော် တက်လှည့်ပေးမယ်လေ"
ကိုဘိုလေး မှာ သူ့တီဗွီ၏ အပြစ်မဟုတ်ကြောင်း ပြချင်နေသဖြင့် ဟုတ်လိုဟုတ်ငြား ဆိုပြီး။
"ကဲ ... စမ်းချင်လည်း စမ်းကြည့်၊ သုဝဏ္ဏကွင်း ဘောလုံးကွင်းက ဘယ်ဘက်မှာလဲ"
"အင်း ... အနောက်ဘက်ယွန်းယွန်းမှာ ရှိမယ်ဗျ"
လူငယ်က အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီး အင်တာနာကို အနောက်ဘက်သို့ ဦးတည်ချိန်ကြည့်လိုက်ရာ ကံအား လျော်စွာပင် တီဗွီက ကြည်လင်ပြတ်သားသွား၏။
"ဟာ ... ကြည်သွားပြီ"
"ကောင်းလိုက်တဲ့ တီဗွီကွာ၊ ပြတ်သားနေတာပဲ"
"ဟုတ်ပါရဲ့၊ ကြည်စမ်း ဇော်ထိုက်တို့ အောင်ကျော်ထွန်းတို့ ဆံပင်အနီဆေးဆိုးထားတာတောင် ထင်ထင် ရှားရှား မြင်ရတယ်"
စသည်ဖြင့် ချီးကျူးသံများ ထွက်လာ၏။ ကိုဘိုလေးလည်း ခုမှ ခပ်မိန့်မိန့် ပြုံးနိုင်လာပြီး ...
"ဒီလိုကျတော့လည်း ချစ်ရူး က တော်သွားပြန်ရောဟေ့"
ဟု ချစ်င်္ဦး၏ ပခုံးကို ပုတ်ရင်း ပြောသည်။ ချစ်ဦးက
ဟု သူ့နားထင်ကို လက်ညှိုးနှင့် ထောက်ပြရင်း ပြောလိုက်သည်။
သူတို့ရပ်ကွက်တည်နေရာ အနေအထားအရဆိုလျှင် မြ၀တီရုပ်သံမြောက် အရမ်လောက်မှာ ရှိပြီး မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနက အနောက်ယွန်းယွန်းမှာ ရှိ၏။ ကိုဘိုလေးတို့ မြ၀တီရုပ်သံကြည့်နေကျဆိုတော့ အင်တာနာဆင်ပေးတဲ့လူက မြောက်ဘက်ကို ဦးလှည့်ပြီး ချိန်ပေးသွားသည်။ ဘောလုံးပွဲက မြန်မာ့ရုပ်မြင် က ပြမှာ ဖြစ်သောကြောင့် အရုပ်တွေ မကြည်လင်ခြင်း ဖြစ်၏။ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း တည်ရှိရာ အနောက်ယွန်းယွန်း ကိုလည်း လှည့်လိုက်ရာ၊ ကြည်လင်ပြတ်သာသွားခြင်း ဖြစ်လေ၏။
ဒီတစ်ခါတော့ ချစ်ဦး ၏ ကြောင်ကွက်က အသုံးတည့်သွားသည်။
''လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ လူုနှစ်ယောက် စကားထိုင်ပြောနေသည်။
''ဂြိုလ်တုစလောင်းကတော့ တပ်သင့်တယ်လို့ ထင်တာပဲဗျ၊ တကယ်နားမျက်စိပွင့်တာပဲ၊ ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက် နေတာနေတွေကို အချိန်နာရီမဆိုင်းဘဲ ချက်ချင်းမြင်ရ ကြားရတာမဟုတ်လား''
''ကမ္ဘာ့ အရေးအခင်းတွေ စိတ်မဝင်စားပါဘူးဗျာ၊ ဘောလုံးပွဲတွေတိုက်ရိုက် ကြည့်ရတာတော့ အတော် ဟန်ကျတဲ့ ကိစ္စပဲ''
''ကျွန်တော်တော့ ဒီတစ်ခါ ငွေလေးဘာလေး အဆင်ပြေရင် စလောင်းတပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထား တယ်၊ ခင်ဗျား လည်း တပ်ချင်ရင်ပြောဗျ၊ ကျွန်တော့မှာ အဆက်အသွယ်ရှိတယ်၊ ယာဆင်းတဲ့ နေဦး သူ့လိပ်စာ ကတ်ပြားတောင် ပေးထားသေးတယ်''
ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအိတ် ထဲက လိပ်စာကတ်ကလေးကို ထုတ်ပြသည်။ ကျန်တစ်ယောက်က….
''အေးဗျာ ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေရင် တပ်ချင်တယ်၊ လိုလိုမယ်မယ် လိပ်စာလေး ယူထားချင် တယ်''
''လိပ်စာကတ် က တစ်ခုတည်းရှိတာ ကူးချင် ကူးယူထားလေ''
တစ်ယောက် က ကူးစရာစာရွက် အတိုအစ ရှာသည်။ မတွေ့။
''ခင်ဗျားမှာ စက္ကူ အပိုင်းအစလေးများ မပါဘူးလား''
ဟု အချီအချ ပြောနေကြစဉ် ဘေးကပ်လျက်စားပွဲမှာ ထိုင်နေသော ချစ်ဦးက ဝင်ပြောလိုက်၏။
''ဒါများ လွယ်လွယ်လေး၊ အဲဒီကတ်ပြားရဲကျောဘက်မှာ လွတ်နေတာပဲ၊ အဲဒီမှာ ကူးထည့်လိုက် ပေါ့''
''အင်း…. ဟုတ်သားပဲ''ဆိုပြီး တစ်ယောက်က လိပ်စာကတ်ပြားကို တစ်ဖက်လှန်ကြည့်လိုက် ကျောဘက်က လွတ်နေတဲ့ နေရာမှာ ကူးရေးလိုက် လုပ်နေသည်။ ပြီးတော့မှ ''ကျေးဇူးပဲ'' ဆိုပြီး ကတ်ပြား ကို ပိုင်ရှင်ဆီ ပြန်ပေးရင်း…
''ဟာ … ဘာဆိုင်လို့လဲ… ကတ်ပြားကို ခင်ဗျားဆီ ပြန်ပေးလိုက်တော့….. ဟာကွာ၊ မင်းတော် တော်ရှုပ် တဲ့ကောင်''
ဟု ချစ်ဦးဘက် လှည့်ပြောသည်။ ချစ်ဦးကစေတနာနဲ့လည်း အကြံပေးရသေးတယ်၊ အပြစ်လည်း ပြောချင် သေးတယ်ဆိုသော ဂိုက်ဖြင့် ပြန်ကြည့်လိုက်၏။
ချစ်ဦးသည် အိမ်ရှေ့ကွက်လပ်တွင် သဲသဲချစ်နှင့် ဆော့ကစားနေသည်။ သူက သဲသဲချစ်အတွက် ပလပ်စတစ် ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကစားစရာ ဂေါက်ရိုက်တံကလေးတစ်စုံ ဝယ်လာပေးသည်။
ဒါကလည်း သဲသဲချစ်က ပူဆာသောကြောင့်ဖြစ်၏။ သဲသဲချစ်သည် တီဗွီနိုင်ငံတကာ သတင်းအစီ အစဉ်မှာ ပါသော ဂေါက်ရိုက်ပြိ်ုင်ပွဲတွေ ကြည့်ပြီးနောက် ''ဟို ကုလားရိုက်တဲ့ တုတ်မျိုးဝယ်ပေး''
ဟု ပူဆာ သည်။ ဟိုကုလားဆိုတာက ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် ဂေါက်သီးအကျော်အမော် တိုက်ဂါးဝုဒ်ကို ပြောခြင်း ဖြစ်၏။
ဒီလို ကစားစရာမျိုးက ချစ်ဦးတို့မြို့နယ်ဘက်မှာ ရောင်းလေ့မရှိဘူး၊ သူက သဲသဲလိုချင်တာဆိုလျှင် ဘာမဆို ရအောင် လုပ်ပေးချင်သူဖြစ်၏။
ဟိုတစ်ခါတုန်း ကလည်း သဲသဲချစ်က ကြိုးနဲ့ဆွဲပြီး ကလိုရတဲ့မြင်းရုပ်လိုချင်တယ်ပြောသည်။ ဒီလို မြင်းရုပ် မျိုးက ခုချိန်မှာ အလွန်ရှာရခက်သည်။ ချစ်ဦးကလည်း ကြံရာမရသဖြင့် နတ်စင်က မြင်းရုပ် ကို ခိုးပြီးပေးခဲ့ ရ၏။
ခုလည်း ဂေါက်တံရှာလို့မရ။ ဈေးထဲမှာ ကစားစရာဆိုင်ကို မှာထားရ၏။ ကံအားလျှော်စွာ မြို့ထဲက ဆိုင်တစ်ဆိုင် မှာ တွေ့လို့ဆိုပြီး ဝယ်လာပေးသဖြင့် အဆင်ပြေသွားသည်။
ဂေါက်တံရပြန်တော့လည်း သဲသဲချစ်နှင့်အတူ ကစားပေးရပြန်သည်။ တကယ့် ဂေါက်သီးမာစတာ ကြီး တွေကတော့ ဘာကြေး ကစားကြသလဲမသိ။ သူတို့ကတော့ ကုန်းပိုးကြေးကစားခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအခါ သဲသဲချစ် အနေဖြင့် ချစ်ဦး ကို ကုန်းပိုးဖို့ မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ချစ်ဦးကပဲ အမြဲအရှုံးပေး ရသည်။
''ကဲ… သမီး ရေ၊ ရူးရူးလည်း မောရောပေါ့၊ သမီးလည်း ရေချိုးထမင်းစားဖိ်ု့ အချိန်ရောက်ပြီ''
ဟု မြလွင် က လာခေါ်တော့မှပင် ချစ်ဦးလည်း နားရတော့သည်။
ချစ်ဦးအပြင်ထွက်မည်အပြုမှာ လူတစ်ယောက်ဆိုင်ရှေ့မှာ လာရပ်ပြီး….
''ချစ်ရူး တို့အိမ် ဘယ်အိမ်လဲ''
ဟု မေးသည်။ ချစ်ဦးက….
ဟု သူ့တဲကလးကို ညွှန်ပြသည်။ ဟိုလူလည်း ချစ်ဦး၏တဲကလေးရှေ့ကို လျှောက်သွားပြီး…
''ချစ်ရူး၊ ချစ်ရူး ရှိလား''
ဟုအော်ခေါ်သည်။ ထိုအခါ ချစ်ဦးက…
ဟု လှမ်းပြောသည်။ ဟိုလူ အူအူကြောင်ကြောင် လှည့်ကြည့်ပြီး…
''ဟာ… စောစောကတည်းက မပြောဘူး''
''ဟင်.. ဘာလို့ ပြောရမှာလဲ၊ ခင်ဗျားက ကျွန်တော်ကိုမေးတာမှ မဟုတ်ပဲ၊ ကျွန်တော့်အိမ်ကို မေးတာပဲ''
''အင်း.. ဒါကြောင့်လည်း ချစ်ရူး လို့ ခေါ်တာထင်ပါရဲ့''
''ကဲ… အခု ကျွန်တော့်ကို တွေ့ပြီမဟုတ်လား၊ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ''
''ဈေးထဲက ကုန်ခြောက်ဆိုင်က ခိုင်းစရာရှိလို့ လာပါဦးတဲ့ အဲဒါ လာပြောတာ''
''ဒါများဗျာ၊ တကူးတကန့်နဲ့ လာပြောနေရသေးတယ်၊ လုပ်စရာရှိတာကို ခင်ဗျားပဲ လုပ်ပေးလိုက် လည်း ပြီးတာ ပဲဟာ၊ ဒီကို လာခေါ်နေရတာတောင် ပိုပင်ပန်းဦးမယ်''
''အောင်မာ၊ ငါ့ကိုများ ငါးပိခြင်းတွေ၊ ငါးခြောက်အိတ်တွေ ထမ်းတဲ့ကောင်မှတ်နေလို့လား၊ လမ်းကြုံ လို့ ဝင်ပြော ပေးတာကွ''
ဟိုလူက ဘုဆတ်ဆတ် ပြောပြီးထွက်သွား၏။ ချစ်ဦးကပြုံး၍…
''ငါးပိကြောက် ရင်တော့ မျောက်ပဲဖြစ်ရမယ်''
ဟု ပြောပြီး ဈေးဘက်ထွက်လာခဲ့၏။
ကုန်ခြောက်ဆိုင်က ကိစ္စတွေလုပ်ကိုင်ပေးပြီးနောက် ငွေသုံးရာရလာခဲ့သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိ်ုင် သွားထိုင်ဖို့ ထွက်လာခဲ့၏။ ထီဆိုင်ရှေ့ဖြတလျှောက်မှာ ထီရောင်းသူက…
''ဟေ့ကောင် ချစ်ရူး ထီထိုးသွားပါဦးလားကွ''
ချစ်ဦး က ထီဆိုင်ရှေ့သွားရပ်ပြီး
''ထီပဲဖွင့်တော့မယ် ထီလက်မှတ်တွေက အများကြီးကျန်နေပါလားဗျ''
''အေးကွာ၊ ဒီလ အရောင်းအဝယ်ပါးတယ်''
''အရောင်းပါမှာပေါ့ဗျ၊ ထီထိုးပြီး ပေါက်မှမပေါက်ကြတာ၊ လူတွေက ဘယ်ထိုးချင်တော့မလဲ''
''မင်း ကလည်း လုပ်ပြန်ပြီး ပေါက်တဲ့လူတွေလည်း ပေါက်ပါတယ်ကွ၊ ပေါက်ကြလို့သာ ထီပေါက်စဉ် လတိုင်း ထွက်နေတာပေါ့၊ မင်းလည်း ဒီတစ်ခါပေါက်မှာပါကွ၊ ဟောဒီမှာ နှစ်စောင်တွဲအမွှာထိုး သွား ပါလား၊ တစ်ရာ့ငါးဆယ်ရောင်းတာ၊ တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ပဲပေး''
''ကဲ… မင်းကြိုက်တဲ့ နံပါတ်ပါတ်ရွေးလေ''
''ရွေး မနေတော့ပါဘူး၊ နံပါတ်ရွေးတိုင်းလည်း ပေါက်တာမှမဟုတ်တာ၊ ပေးချင်တာသာပေးတော့''
ထီဆိုင်ရှင် က နှစ်မွှာတစ်စုံ ကို သင့်ရာဆွဲဖြုတ်လိုက်သည်။ နံပါတ်ကို ကြည့်ပြီး…
''ဟာ… နံပါတ်က အရမ်းလှတယ်ကွ၊ နှစ်အစ နှစ်အဆုံးပဲ၊ အက္ခရာကလည်း ဂငယ် ဃကြီးဆို တော့ တနလာင်္နံ ပဲ၊ သိပ်ကောင်းတယ် မင်းနာမည်ကလည်း ချစ်ဦးဆိုတော့ တနင်္လာ ပဲကွ''
ပြောပြီး ထီနံပါတ်ကို စာအုပ်ထဲ ကူးရေးသည်။
''ကဲ… သိန်းသုံးရာဆုကြီး ပေါက်ပါစေကွာ''
ချစ်ဦးက ထီလက်မှတ်ကို ယူပြီးထွက်သွားသည်။ု
Posted by SHWE ZIN U at 9:23 AM0comments Links to this post
၀တ္ထုရှည်၊ ၀တ္ထုတို ရေးတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပေးနေရာက ဒီလ တွေ့ဆုံမေးချင်တဲ့သူက ကဗျာဆရာ၊ စာပေဝေဖန်ရေးဆရာဖြစ်တဲ့ ဆရာ လမောင်စွမ်းရည်" ပါပဲ။ ဆရာမောင်စွမ်းရည်နဲ့ တွေ့ဆုံ ရာမှာ ကျွန်တော် အဓိကထား ဖတ်ခဲ့တာတွေကတော့ လစဉ်ထုတ် သောင်းပြောင်းထွေလာ မဂ္ဂဇင်း ထဲက ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးတွေနဲ့ ဆရာနဲ့ စာပေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ တခြား စာရေးဆရာများရဲ့ ဆောင်းပါး တွေပါပဲ။
ဆရာ မောင်စွမ်းရည်က မန္တလေး ဇာတိပါ။ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ရဲဘော်တွေနဲ့အတူ စာပေ မွေ့လျော် ရေးသားရင်း စာပေလောကထဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်း အမှတ်(၁) နဲ့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ကလောင် စ သွေးခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့က စာပေပညာရှင်ကြီး များ ဖြစ်ကြတဲ့ လူထုဦးလှ၊ ဒေါ်အမာ၊ ဦးမောင်မောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)၊ ဦးဆန်းထွန်း၊ ဒေါ်အုန်း စသူတို့က အားပေး ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့က ဖေးမခဲ့ကြပါတယ်။
စာပေဝေဖန်ရေးကိုတော့ ၁၉၆၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက သူငယ်ချင်း မောင်မိုးသူက တိုက်တွန်း လှုံ့ဆော်မှု နဲ့ ရေးစမ်းခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ ဝေဖန်ရေးစာပေ၊ စာပေသမိုင်း။ နိုင်ငံရေးဗေဒ၊ ဒဿနိက ဗေဒ၊ သိပ္ပံပညာတို့ကို မျက်ခြည်မပြတ်ရုံ မဆိုစလောက် လိုက်ဖတ်ရင်း စာပေသမုဒ္ဒရာထဲက ရေတစ်စက် နဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ဝေဖန်ရေးစာပေအတွက် ဆရာဇော်ဂျီနဲ့ ဒဂုန်တာရာတို့ကို ဆရာတင်ပြီး ရေးခဲ့ ပါတယ်တဲ့။ လူထုသတင်းစာ (မန္တလေး)နဲ့ အထက်မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းရဲ့ တာဝန် ပေးချက်ကြောင့် အဆက်မပြတ် ရေးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာ နဲ့ ကျွန်တော် အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ဝေဖန်ရေး၊ ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို တင်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်။
" ဆရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်အုပ်ကိုပဲ ဖတ်သလား။ ဒီစာရေးဆရာရေးတဲ့ တခြား စာအုပ်တွေကိုပါ ဖတ်ပြီးမှ ဝေဖန်ပါသလား။ စာရေးဆရာ တစ်ယောက် စာရေးတဲ့ နေရာမှာ တစ်အုပ် က (၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ်၊ သောင်းပြောင်း)မှာ ရေးထားတာက ခြုံပြီးမှ ဝေဖန်တယ်လို့ ဆိုထား ပါတယ်။ သူနဲ့ အမျိုးအစားတူတဲ့ ၀တ္ထုတွေကို ဖတ်ပြီးမှ ဝေဖန်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာ့ "စာပေရှုခင်း" မှာ ဝေဖန်ထားတာတွေ အားလုံးဟာ ခြုံငုံထားတဲ့ သဘော ရှိပါသလား"
" ဟုတ်ကဲ့၊ ကိုဝင်းငြိမ်း ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီသဘော ရှိပါတယ်။ ကိုဝင်းငြိမ်း သိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ"
" ဒီနေ့ စာပေလောကမှာ သိုင်းဘာသာပြန်တွေ လွှ့မ်းမိုးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခေတ်စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် စာပေမျိုး ထွန်းကားအောင် ဘယ်လို ကြိုးပမ်းသင့်တယ်လို့ ဆရာထင်ပါသလဲ "
" ကိုဝင်းငြိမ်း က သိုင်းဘာသာပြန်တွေကို ခေတ်စနစ်နဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ ဆိုချင်ပုံရပါတယ်။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဘယ်စာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ခေတ် ဘယ်စန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ခေတ်နဲ့သူ ပေါ် ထွက်လာ တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆချင်ပါတယ်။ ခေတ်အလျောက် ပေါ်ထွက်လာတာကို တားဆီးတာထက် ဝေဖန်တာ ကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ထွက်ကြပါစေ။ သိုင်းဝတ္ထုတွေ များများ ထွက်ပေါ်ကြသလို တခြား စာကောင်း ပေကောင်းတွေလည်း များများထွက်ရင် ကောင်းမယ်။ ပန်းတိုင်းပွင့်ကြပါစေ ဆိုတာကို ကျွန်တော် သဘော ကျတယ်။ အရေအတွက်က အရည်အချင်းကို လွှမ်းမိုးအောင် လုပ်တတ်တဲ့ သဘာဝ ကို သိထားရမယ်ပေါ့ဗျာ။
အဆိပ်ပန်း ပါလာရင် ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဆိုင်းဘုတ် ဆွဲပေးထားပေါ့ဗျာ။ "သတိ အဆိပ်ပန်း" လို့ -
ခေတ်စနစ် နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် စာပေမျိုး ထွန်းကားအောင် ဘယ်လို ကြိုးပမ်းသင့်သလဲတဲ့၊ ကိုဝင်းငြိမ်း ကြိုးပမ်း ဖို့လား၊ ကိုဝင်းငြိမ်းတို့ မဂ္ဂဇင်းက ကြိုးပမ်းဖို့လား၊ စာပေဝေဖန်ရေးသမားများ ကြိုးပမ်းဖို့လား၊ စာပေလုပ်သား အဖွဲ့က ကြိုးပမ်းဖို့လား စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ခွဲခွဲခြားခြားတော့ မေးမထားဘူးကိုးဗျ။ ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ၊ အားလုံးအတွက် ဖြေရမှာလား "
" အားလုံးအတွက် ဆိုလိုတာပါ "
" နောက်ပြီး ကိုဝင်းငြိမ်း ရဲ့ စာပေမှတ်ကျောက်က "ခေတ်စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီရမယ်" ဆိုတာ ဖြစ်ပုံရတယ်။ ကျွန်တော့် စာပေမှတ်ကျောက် က "အများပြည်သူအကျိုးနဲ့ ကိုက်ညီရမယ်" ဖြစ်တယ်"
" နေဦး ဆရာ၊ ကျွန်တော့်ကို စာပေမှတ်ကျောက်တွေ ဘာတွေနဲ့ အကြီးအကျယ် ပြောလိုက်တော့ တော် တော် ကြက်သီးထ သွားတယ်။ ကျွန်တော် ဒီမေးခွန်းကို မေးတာက ၈၂ ဇန်န၀ါရီလထုတ်၊ သောင်းပြောင်း မှာ ဆရာက ခေတ်သစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်တဲ့ဘက်မှာ အထူးသဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကို တည်ထောင် တဲ့အခါမှာ လုပ်အားတန်ဖိုး ချစ်မြတ်နိုး ရမယ့်အစား ကိုယ့်လုပ်အား၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ယုံကြည်အားကိုး ဖို့ မတိုက်တွန်းဘဲ စာပေ၀ါဒ လက်ကိုင်ထားသူများ နည်းတူပဲ ဗေဒင်၊ ယတြာ၊ ကျိန်စာ၊ လက်စားချေဝတ္ထု များကို ပြည်သူလူထု တိုးတက်ရေးလမ်းမှ ဆီးနှင်းမြူတိမ် သူရိန်မီးခိုး မှိုင်းတစ်မျိုးအဖြစ် ဖွင့်ချ ရှုတ်ချသွားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရှုတ်ချတဲ့ ၀တ္ထုတွေထဲမှာ သိုင်းဝတ္ထုတွေလည်း ပါတယ် ဆိုလို့ မေးလိုက်တာပါ။ ထားပါတော့ ဆရာ၊ စကားဆက်လိုက်ကြရအောင်"
" ကျွန်တော် ကြိုးပမ်းမှာကို ပြောရရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြည်သူကို အကျိုးပြုတဲ့ စာတွေကို ဖော်ထုတ် ချီးကျူးပြီး ပြည်သူကို အကျိုးမပြုတဲ့ စာတွေကို ဖွင့်ချတိုက်သွားရမယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။
ကိုဝင်းငြိမ်းတို့ မဂ္ဂဇင်း ဘယ်လို ကြိုးပမ်းရမလဲဆိုတာ အကြံပေးရရင် ရှည်မယ် ကိုဝင်းငြိမ်းရဲ့။ အတိုဆုံး အကြံပေးရရင် ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းအလုပ်ကို ကျွန်တော့် လက်လွှဲပေးလိုက်ဗျာ။ ပြည်သူကို အကျိုးပြု မပြုတော့ မသိဘူး။ မကြာခင် ပြုတ်မှာ သေချာတယ်"
" ဒါတော့ သည်းခံပါ ဆရာရယ် "
" ကဲ ... ဒါက ရယ်စရာလို့ပဲ သဘောထားပါဗျာ။
အတည် ပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ စာမူတွေဟာ ခေတ်စနစ်နဲ့ ညီတယ်လို့ ယူဆလို့ ထည့်တာ ပဲလားလို့ ဆိုတဲ့ ပထမမေးခွန်းကို ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ခင်ဗျားတို့ အရင်ဖြေကြည့်ပါလို့ အကြံပေး ပါရစေ။
ဒုတိယမေးခွန်းတစ်ခု မေးချင်တာက ခု ... ခင်ဗျား တွေ့တဲ့ မောင်စွမ်းရည် အပါအ၀င်ပေါ့လေ။ မင်းသိင်္ခ၊ နွမ်ဂျာသိုင်း၊ ငြိမ်းကျော်၊ နတ်နွယ် အစရှိတဲ့ ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းက တွေ့ဆုံဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ တွေကို စာဖတ်ပရိသတ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာဟာ ခေတ်စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီတယ်လို့ ခင်ဗျား ယူဆလို့ လား ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။ အဲဒါလေး အရင် "ကြိုးပမ်း" ဖြေကြည့်ပါဦးဗျာ "
" ဆရာ က တွေ့ဆုံခန်း လုပ်တဲ့လူကို ပြန်ပြီး မေးခွန်းထုတ်နေတော့ ၀င်းငြိမ်းက မောင်စွမ်းရည်ကို တွေ့ဆုံ ပေးနေရာက မောင်စွမ်းရည်က ၀င်းငြိမ်းကို တွေ့ဆုံပေးသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဆရာ မေးခွန်းနှစ်ခု မေး သွားတဲ့ အထဲက ပထမမေးခွန်းကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့အတွက် မဖြေတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် က ပေဖူးလွှာရဲ့ ဆောင်းပါးရှင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတည်းအဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ကိုယ်စား ကျွန်တော် ဖြေရရင် တရားမ၀င်ဘူးပေါ့။ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ် ဆရာ၊ တကယ်လို့ ဆရာသာ စာတည်းချုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် စာတည်းအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရင်တော့ ဘယ်လို ရွေးမလဲ ဆရာ၊ ဆရာစောစောက ပြော သလို ဆရာ့လက် အပ်လိုက်ပါပြီတဲ့။ ဒီမဂ္ဂဇင်း နောက်ထပ် နှစ်ပတ်လည် ထွက်စရာရှိမှာ မဟုတ် တော့ဘူး လို့ ထင် ပါတယ်။ ထားပါတော့ ဆရာ၊ ကျွန်တော့်ကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်တာပဲ ပြောကြရအောင်။
ကျွန်တော် တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပေးတာဟာ ခေတ်စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီလို့လားလို့ ဆရာက မေးထားတယ်။ ဆရာ့ စကားနဲပဲ ပြန်ပြောရရင် သတို့ခေတ်မို့ သူတို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာပဲဆရာ။ ခေတ်နဲ့ ညီတယ်လို့ ပြောရမှာ ပေါ့။ စာဖတ်ပရိသတ် အများစု စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူကို ကျွန်တော်က တွေ့ဆုံပေးထားတယ်။ အခု ဆရာ့ကို တွေ့တာကလည်း စာဖတ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလို့ တွေ့တာပဲ။ တကယ်လို့ ဆရာသာ စာဖတ်သူ အများစု စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူဆိုရင် ခုလို ကျွန်တော် တကူးတက လာတွေ့စရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်"
" ဒါက ဆရာက ကျွန်တော့်ကို ကြိုးပမ်းဖြေကြည့်စမ်းပါ ဆိုလို့ ဖြေကြည့်တာပါ။ တကယ်တမ်း ကျွန်တော့် သဘော ပြောရရင် ဒီတွေ့ဆုံပေးခြင်းကဏ္ဍမှာ ကျွန်တော် ဖော်ပြပေးချင်တာက တွေ့ဆုံပေးခြင်း ခံရသူရဲ့ အာဘော် သက်သက်ပါ။ ကျွန်တော့်အာဘော် မပါချင်ဘူး။ ခု ဆရာက မေးနေပြန်တော့ မဖြေပြန်ရင် ကျွန်တော့် ဘက်က လိုသွားမယ်လေ။ ကဲ ... ဆက်လိုက်ကြရအောင် ဆရာ။
နောက်ထပ် ကျွန်တော် မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းကတော့ "၀တ္ထု" အနိမ့်ဆုံး တာဝန်က ဘာဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး တာဝန်က ဘာဖြစ်သင့်ပါသလဲ ဆရာ"
" ၀တ္ထုရဲ့အနိမ့်ဆုံးတာဝန်က ဖျော်ဖြေဖို့ပါပဲ။ အမြင့်ဆုံး တာဝန်ကတော့ ပြည်သူလူထု အများစုကို အများဆုံး အကျိုးပြုဖို့ပါပဲ။ ၀တ္ထု ထုတ်ဝေသူကတော့ ပြည်သူလူထု အများစုထဲမှာ သူလည်း ပါချင်မှာပေါ့ လေ"
" ၀တ္ထုတိုလောကမှာ အမျိုးသမီး စာရေးဆရာတွေက ဦးဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ ဆရာ ယူဆပါသလဲ"
" ၀တ္ထုလောကမှာ အမျိုးသမီးတွေ ရေးတဲ့ ၀တ္ထုတွေ အထွက်များနေတယ်လို့သာ ပြောလို့ရပါမယ်။ ခု လောလောဆယ် မှာ ဘယ်အမျိုးသမီးမှ ၀တ္ထုလောကကို ရှေ့ဆောင်မှု မပေးနိုင်သေးပါဘူး။ မလွှမ်းမိုး နိုင်ပါ ဘူး။ အရင် အမျိုးသမီး ၀တ္ထုရေးဆရာတွေထက် အရေအတွက်ရော၊ ၀တ္ထုရေးသားမှု အရည်အချင်း ပါ သာလွန်လာပေမယ့် အမျိုးသားစာရေးဆရာတွေကို ကျော်လွှား လွှမ်းမိုးသွားဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တော့ မမြင်သေးပါဘူး။ တချို့ အမျိုးသားတွေထက် သာတာတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ - ကျွန်တော် နဲ့ ကိုဝင်းငြိမ်း ထက် သာကြတယ်ဗျ။ ဒါထက် ခင်ဗျား ၀တ္ထုရေးဖူးရဲ့လား "
" ဒီက ပြန်ရင်တော့ စာတည်းချုပ်ကို ၀င်တွေ့ပြီး ပြောပြလိုက်ပါ့မယ်။ ဆရာ မောင်စွမ်းရည်ကို ၀င်းငြိမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံပေးခြင်း တစ်ပုဒ်လောက် ရေးခိုင်းပေးပါလို့။ ဆရာက ကျွန်တော့်ကိုချည်း တန်ပြန်မေးခွန်းထုတ်နေ တာကိုး"
" ပဋိပုစ္ဆာဗျာ ကရဏလို့ ဆိုပါစို့ဗျာ။ မေးသူကို ပြန်မေးခြင်းဖြင့် ဖြေပြီးရာကျမလားလို့ပါ"
" ဆရာ စိတ်ကျေနပ်အောင် ဖြေရရင် ကျွန်တော် ၀တ္ထုမရေးဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၀တ္ထုဖတ်တာကတော့ ကျွန်တော့် အသက် ဆယ်နှစ်သား မရှိတရှိလောက်ကတည်းက စဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ဘက် က ဆရာ့လို စာပေဝေဖန်ရေး လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့် မရှိသည့်တိုင်အောင် စာပေအပေါ် သုံးသပ် နိုင်လောက် တဲ့ အထိတော့ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းအပေါ် ဂရုတစိုက် ဖတ်ရတော့ ကျွန်တော် တွေ့ရမယ့် စာရေးဆရာရဲ့ရေးဟန်၊ ဦးတည်ချက်တို့ကို မိအောင် ဖမ်းရတဲ့ အလေ့အကျင့် ပိုရ လာပါတယ်။ ဒါဆို ဆရာ ကျေနပ်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဆရာ့ကို ဆက်မေးပါရစေ။
ညီမလေးက အချစ်ကို ကိုးကွယ်သတဲ့လားကို ဝေဖန်တုန်းက အချစ်ဝတ္ထုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော် ရေးသွား ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်မှာ ဒီနေ့ အချစ်ဝတ္ထု တချို့ဟာ အချစ်ကို ဖော်ကျူးတာထက် "ရာဂ" နိုးကြွအောင် ဖော်ဆောင်နေတာတွေက များတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ "
" အချစ်ဝတ္ထုရေးဆရာထဲမှာ ရာဂ နိုးကြွအောင် ရေးသူ တစ်ဦးစ၊ နှစ်ဦးစပဲ ရှိပါတယ်။ ၀ါနုတဲ့ စာဖတ် ပရိသတ် ကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ဒီနည်းဟာ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အောက်တန်းအကျဆုံး နည်းပေကိုးဗျ။
အဲဒီဝတ္ထုမျိုး တွေကို "ညစ်ညမ်း အချစ်ဝတ္ထု"၊ " ရာဂနှိုးဝတ္ထု" စသည်ဖြင့် ခေါ်ချင်သလို ခေါ်ပေတော့ဗျာ။ "အပြာဝတ္ထု" လို့တော့ဖြင့် မခေါ်နိုင်လောက်သေးဘူး ထင်တယ်။ " အပြာနုဝတ္ထု" လို့ ခေါ်ရင်လည်း ရမှာပဲဗျ။ ကိုဝင်းငြိမ်းအနေနဲ့ ဒါမျိုးတွေကို မကြိုက်ဘူးဆိုရင် သူတို့ကို အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး ဆွေးနွေး ဝေဖန်ပါ လားလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်"
" ကျွန်တော့်ဘက်က ရှင်းပါတယ်။ ဒါမျိုး ရေးတဲ့သူမျိုး ကျွန်တော့်ကဏ္ဍမှာ အရင်ကလည်း မပါခဲ့ဘူး။ အခု လည်း မပါဘူး။ နောင်လည်း မပါစေရပါဘူး။ နောက်တစ်ခု ဆက်ရအောင် ဆရာ။ ၀တ္ထုသစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆရာ။ ဆရာ့ ဝေဖန်ချက် ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ "ငါ" ၀တ္ထု 1st person အနေအထားနဲ့ ရေးတာကို ၀တ္ထုသစ် လို့ ဆိုလိုဟန်ရှိကြောင်း ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သိပ္ပံမောင်ဝတို့ ခေတ်ကလည်း 1st person နဲ့ ရေးခဲ့ တာတွေ ရှိဖူးတာပဲ မဟုတ်လား။ အခုမှ ဒီပုံစံကို ၀တ္ထုသစ်ဆိုရင် ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား"
" ၀တ္ထုသစ်ဆိုတာ အတွေးသစ်၊ အရေးသစ်တဲ့ ၀တ္ထုကို ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုလိုပါတယ်။ 1st person (ပြောသူနာမ်စား) နဲ့ ရေးတိုင်းလည်း "အိုင် - နော်ဗယ်" ၀တ္ထုသစ်မခေါ်ပါဘူး။ သိပ္ပံမောင်ဝထက် စောတဲ့ ခေတ်တွေ ကတည်းက ပြောသူ နာမ်စားနဲ့ ရေးခဲ့တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-ရွှေဥဒေါင်းက "ကျွန်ုပ် သည် တစ်နေ့သ၌ ... "လို့ အစချီပြီး ရေးခဲ့တာတွေ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရှေးက ၀တ္ထုတွေမှာ အဖြစ် အပျက် (ဖြစ်စဉ်ဇာတ်လမ်း)ကို "ငါ"က ပြောတာ ဖြစ်တယ်။ ခုခေတ်မှာကျတော့ ဇာတ်လမ်း အဖြစ်အပျက် ပဓာန မဟုတ်ဘူး။ ခေတ်လူမှုရေးဘ၀နဲ့ ခေတ်ခံစားမှု၊ စိတ်အမူအရာကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ကျူးနိုင်တဲ့ အရေးအဖွဲ့က ပဓာန ဖြစ်လာတယ်။ အဲသလို အဟောင်းနဲ့ မတူလို့ အသစ်လို့ ခေါ်တာပါပဲ"
" ကဗျာဘက် ဆက်လိုက်ကြရအောင်၊ "ကဗျာ"ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ဆရာ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုမလဲ"
" ကဗျာဆိုတာ ဘာသာစကားရဲ့ အညွန့်အဖူး ဖြစ်တယ်။ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံထဲက ရရှိလာတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုကို အကောင်းဆုံး စိတ်ကူး၊ အကောင်းဆုံး စကားလုံးတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးအသံ ပေါ်ထွက်လာအောင် စီစဉ်ဖော်ကျူး ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စာပေပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးကို ကဗျာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရှေး ကတော့ "ကဗျံဗန္ဓတီတိက၀ိ" တဲ့။ "က၀ိန်အယံကဗျာ"တဲ့။
" ဆရာ ကဗျာတစ်ပုဒ် စာတစ်ပုဒ်ကို ဝေဖန်ရာမှာ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်ကို အဓိက ထား သလား၊ အရေးအသားကို အဓိကထားပါသလား "
" အကြောင်းအရာအရရော၊ အရေးအသားပါ နှစ်ခုလုံး အရေးထားပါတယ်။ " ဖန်ပြာခွက်နဲ့ ကျောက်စက်ရေ" လို့ ဆရာဇော်ဂျီ အမိန့်ရှိတာကို သဘောကျပါတယ်"
" ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလက မန္တလေးက ထုတ်တဲ့ "စာပေလုပ်သား အင်အားသစ်" မှာ ဆရာက စာတမ်း တစ်စောင် ရေးထားတယ်။ ကဗျာကို လေ့လာရင် အလင်္ကာတွေကို ခွဲခွဲဖြုတ်ထုတ် လေ့လာတဲ့ အလုပ် ကို စွန့်လွှတ်စပြုလာပြီ။ ဒါဟာ ကဗျာလေ့လာရေး နည်းမှန်ဖြစ်ဖို့ လှုပ်ရှားလာတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆို ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ် ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာကျတော့ လုံးချင်းကောက်ပြီး ဝေဖန်တာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဆရာ့ စာတမ်းနဲ့ လက်တွေ့ လေ့လာချက် မညီသလို ဖြစ်မနေဘူးလား"
" ကျွန်တော့စာတမ်းနဲ့ ကျွန်တော့် လေ့လာချက် မညီသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့အခါ ရှိကောင်းရှိပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခု ခင်ဗျား ပြောတာဟာ ကျွန်တော့်စာကို ကောင်းကောင်းမဖတ်ဘဲ ပြောတဲ့လူတွေ၊ ဒါမှ မဟုတ် ကျွန်တော့်စာကို လက်တစ်လုံးခြား လမ်းလွှဲပြီး ကျွန်တော့် အလုပ်ကို မရှုဆိတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အိုးမဲ သုတ် လိုသူတွေ ပြောတဲ့စကားကို ခင်ဗျား ကြားဖူးလို့ ဖြစ်မယ်။ နောက်ကြောင်း ရာဇ၀င်လေး ရှိခဲ့ လို့ပါ။ ခုကိစ္စ ကျွန်တော် ပြောရင် ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ကိစ္စလည်း မဟုတ်၊ မယုံကြည်ဘဲ ပြောတာ လည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါကို သူတို့ သိပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို ခင်ဗျားက နမူနာထုတ်ပြမထားတော့ ကျွန်တော်ကပဲ နမူနာထုတ်ပြရဦးမယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခါ က "ခွဲခွဲဖြုတ်ထုတ် ဝေဖန်တာတစ်ခု လုပ်ဖူးတယ် ဆိုပါတော့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ကဗျာရသ ဝေဖန်ပြတဲ့ နေရာ မှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကဗျာ ဆိုတာ ဘာသာစကားရဲ့ အညွန့်အဖူး ဖြစ်တယ်ရယ်လို့ စောစောက ပြောခဲ့ပါကောလား။ ဘာသာ စကား သုံးနှုန်း တာ မမှန်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ကျုပ်ကတော့ ကဗျာကောင်း တစ်ပုဒ်အဖြစ် မခေါ်ချင် ဘူးလို့ "ချဲ" ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဗျာ။
ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကို ဖွဲ့ရာမှာ ရှေးစာဆိုများက "တင့်တယ်စေမှု၊ သိကြားထုသို့"၊ "တင့်တယ်စေမှု၊ ပန်းပုထုသို့" ဆိုတာမျိုး ဖွဲ့ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒါကို ခုခေတ် ကဗျာ ဆရာ အကျော် တစ်ဦးက "ပန်းပွတ်ထုသို့"လို့ ရေးစပ်ထားသဗျ။ "ပန်းဆယ်မျိုး" ဆိုတာ ခင်ဗျားလည်း သိပါ တယ်။ "ပန်းပွတ်" က "မထု" ရမူမဟုတ်လား။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ပုရွက်ဆိတ်က ဆန်စေ့ ကို " ထမ်းယူပွေ့လျက်" လို့ ရေးစပ်ထားသဗျာ။ "ထမ်း" တယ် ဆိုတာက ပခုံးပေါ်မှာ၊ "ပွေ့" တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရှေ့ဘက်မှာ။ "ထမ်း" တာနဲ့ "ပွေ့"တာ တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်လို့မရဘူး မဟုတ်လားဗျာ။ အဲဒါဘာအလင်္ကာမှလဲ မဟုတ်ဘူး။
ဘယ်လိုမှလဲ အဓိပ္ပာယ် ထူးခြားပြောင်မြောက်မသွားဘူးဗျ။ ဒါဟာ "မှား" ရေးတာသက်သက်ပဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း "ခွဲခွဲဖြုတ်ထုတ်" ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။ အလင်္ကာ ဝေဖန်ရေးတောင် မရောက်သေးဘူး။ ကဗျာ တောင်မှ ပီပီသသ မဖြစ်သေးဘူးလို့ ပြောတယ် ရှိပါသေးတယ်။ "အရွယ်ပျို"ကဆို တော့ "မဆိုစလောက်၊ မာန်စောင်မြောက်" ခဲ့တာကိုး။ အားမနာတတ်တဲ့ အရွယ်ကပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခုထိ ကျွန်တော် ပြောနိုင် တာကတော့ အဲ့ဒီကိစ္စတုန်းကလည်း ကျွန်တော်ဟာ "စာတမ်း"နဲ့ "လေ့လာချက်"၊ "အပြော"နဲ့ "အလုပ်" တခြားစီ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပဲ။
နောက်တစ်ချက် က သူတို့ ဘာပြောပြော ကိုယ် မှန်တယ်ထင်လို့၊ ယုံကြည်လို့ ဒီနေ့ထိလည်း "နောက်မတွန့်ဘူး" ဆိုတာကိုလည်း သိစေချင်ပါသဗျာ"
" ကာရန်မဲ့ကဗျာကို ဆရာ လက်ခံပါသလား "
" ဘာကဗျာဖြစ်ဖြစ် ကောင်းရင် လက်ခံပါတယ် "
" ခုတစ်လော ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာမင်းသုဝဏ် ရေးနေတဲ့ ပုံပြင်ကလေးတွေကို ဆရာ ဖတ်မိမယ် ထင် ပါတယ်။ ဆရာကြီး ရေးနေတဲ့ ပုံစံဟာ ကာရန်မဲ့ကဗျာပုံစံမှာ အကျုံးဝင်သလား၊ ကာရန်မဲ့မှာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ပုံစံမျိုး ရှိပါသလား "
" ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ စာအကြောင်း ဆရာမင်းသုဝဏ်ကိုပဲ မေးဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ခုနေခါမှာ ခင်ဗျား တို့ကို အကြံပေးခွင့် ရှိနေတယ်လို့ အောက်မေ့လို့ အခွင့်အရေးယူပြီး အကြံပေးပါရစေ။ ဒီကိစ္စမျိုးမှာ ဆရာကြီးတွေကိုပဲ တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ် မေးဖို့ မကောင်းပါလား၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် ရဲ့ အဖြေစကားကို ကြားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာတပည့်၊ စာတပည့်တွေပါဗျာ။
ခင်ဗျား မေးလာလို့မှတော့ ကျုပ်က ဖြေလိုက်ရဦးမယ်။ ကဗျာ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆိုတာ ကာရန်မဲ့၊ ကာရန်ရှိ ဆိုတဲ့ အချက် နဲ့ သာ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး မဟုတ်လား။ ကဗျာ စိတ်ကူးကောင်း၊ မကောင်းနဲ့ ကဗျာ စိတ်ကူးကို ပေါ်လွင်အောင် ဖွဲ့ဆိုဖော်ကျူးနိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကို အဓိကထား ကြည့်ရမှာပေါ့။
အမှန်ကတော့ ဆရာ ဒီလို လုပ်ထားတာတော့ ဒီဇာတ်ပုံပြင်လေးတွေကို ကလေးတွေ အဖြတ်၊ အရပ်မှန် အောင် လွယ်လွယ်နဲ့ ဖတ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့သဘောပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
"ပုံစံ"အနေနဲ့ ခင်ဗျား မေးတာကို ကွက်ပြီး ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဆရာ လုပ်ထားတာ "ကဗျာပုံစံ"လို့ ကျွန်တော် ဖြေချင် ပါတယ်။ ဆရာ့စာလည်း ကာရန် မပါပေမယ့် စကားပြောသံစဉ် အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ခင်ဗျား အသံထုတ် ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကဗျာစည်းကမ်း အတိအကျ ဆိုတာကတော့ ခုခေတ်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကာရန်မဲ့ ကဗျာနဲ့ ကာရန်ရှိ ကဗျာ မှာသာမက ဘယ်ကဗျာမှ တိကျတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် လက်လှမ်းမီ သလောက် တွေ့ဖူးတဲ့ တခြားနိုင်ငံ၊ တခြားဘာသာစကားတွေ၊ ကဗျာတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာကဗျာ ပုံစံမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာသာစကားရဲ့ သဘာဝကြောင့် ကာရန် အနေအထားကို အခြေပြုပြီး ကဗျာပုံစံများ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၊ ပါဠိဘာသာ စကား တို့မှာတော့ မတြာ (မီတာ) အနေအထားကို အခြေပြုပြီး ကဗျာပုံစံများကို သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘာနဲ့ပဲ သတ်မှတ်ခဲ့၊ သတ်မှတ်ခဲ့ ခေတ်ကဗျာ တွေမှာဆိုရင် စည်းကမ်း တိကျတင်းကျပ်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ လေးချိုး၊ တေးထပ်၊ ဘောလယ်၊ တျာချင်း၊ ကာချင်း ဆိုတာတွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ရှိသလောက်ကလည်း မလွှမ်းမိုး နိုင်တေည့ပါဘူး။
ခုခေတ် ကဗျာဆရာတွေ ဒါတွေ မရေးတတ်ကြတော့လို့လားလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ သင်ယူ လေ့ကျင့် လိုက် ရင် အလွယ်နဲ့ ရေးစပ်နိုင်ပါတယ်။ စပ်နည်း လေ့ကျင့်ရတာ ရသခံစားဖို့နဲ့ စိတ်ကူးကောင်းရဖို့ လေ့ကျင့် အား ထုတ်ရသလောက် အချိန်မယူရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လေးချိုး ဆိုရင် ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်း ရဲ့ အသံကို မလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ဘူး။ တေးထပ်ဆိုရင် ဦးပုညတို့၊ လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး တို့က လက်ကုန်နှိုက် အသုံး ချခဲ့ကြပြီ။
နောက်ပြီး ခေတ် ရဲ့ ရင်ခုန်သံကလည်း အေးလေးငြိမ့်ညောင်းတဲ့အသံ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ရှေးက ပုံစံတွေ နဲ့ မဖြစ်တော့ဘူး။
ပုံစ့ စည်းကမ်း တိကျတင်းကျပ်မှု မရှိတော့ရင် ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ဘာကို အခြေခံသလဲ။ ရှေးရိုးကဗျာ အစွဲသန်သန် နဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကဗျာဆရာတချို့က"အလင်္ကာသွား"၊ "အချိုးသွား"နဲ့ "မေတ္တာစာသွား" တို့ကို အခြေခံထားကြတယ်။ ကာရန် အစီအစဉ်မှာ အခုန်အကျော်၊ အထပ်အကွန့်တွေ သင့်သလို အသုံးချ သွားတယ်။ စာကြောင်း အတိုအရှည်၊ စာပုဒ် အတိုအရှည် လိုအပ်သလို အသုံးချသွားတယ်။ လက်တွေ့မှာ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နေတယ်။ ရှေးရိုးကဗျာ အခြေခံနည်းသူများကတော့ ကာရန်မဲ့ကဗျာကို အသုံး ချလေ့ ရှိကြတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းမှု နည်းနေသေးလို့ စကားပြောသံစဉ်ရဲ့ ခွန်အား ကို အသုံးမချတတ်တဲ့အတွက် ကြိုးစားကြသလောက် အောင်မြင်မှု မရှိသေးတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
ဒါ ကျွန်တော့်အမြင် ပြောတာပြပါ။ ဒီကိစ္စမျိုးတွေမှာ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာမင်းသုဝဏ်၊ ဆရာတာရာတို့ရဲ့ အမြင်၊ မင်းယုဝေ၊ ဒေါင်းနွယ်ဆွေတို့ရဲ့ အမြင်တွေကိုလည်း လူငယ်ကဗျာသမားတွေ သိချင်ကြမှာပဲ။ ကျွန်တော် လည်း သိချင်တာပဲ။ ကိုဝင်းငြိမ်းက လူငယ်ထုကို ကိုယ်စားပြုပြီး မေးမြန်းဆွေးနွေးပေးရင် သိပ် ကောင်းမှာ ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ပြန်မေးတာတွေ၊ တောင်းဆိုတာတွေ များသွားပြန်ပြီ။ ဆောရီး ပါဗျာ"
" ဝေဖန်ရေးသမားတွေဟာ မကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ကြည့်ကြတဲ့သူတွေလို အဝေဖန်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင် တွေက ဆိုကြတယ်။ ဆရာ ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ "
" တကယ်တော့ ဝေဖန်ရေးသမားရဲ့ တာဝန်ဟာ ကောင်းတာကိုလည်း ကောင်းတယ်၊ မကောင်းတာ ကိုလည်း မကောင်းဘူးလို့ အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ပြောပြရတာပဲ မဟုတ်လား။ တချို့ ဝေဖန်သူ များက ကို့်အားနည်းချက်ကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့ ဝေဖန်သူကို နာမည်နဲ့ တပ်ပေးဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြတယ်။ အကျိုး အကြောင်းနဲ့ ပြန်ရှင်းနိုင်ရင် ရှင်းပေါ့၊ မရှင်းနိုင်ရင်တော့ စာဖတ်ပရိသတ်ကလည်း စာတတ်တဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် ပဲဗျာ။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုဆိုတာ သဘောပေါက်မှာပါ။ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ယုံကြည် ပါတယ်"
" ဆရာက ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ညံ့ကြောင်း ဝေဖန်လိုက်ပြီး နောက်တစ်လမှာ ၀တ္ထုကို ဖတ်ပြီး အနုပညာ အရသာ ခံစားရလွန်းလို့ အိပ်လို့တောင် မပျော်နိုင်ဘူးလို့ စာရေးဆရာမကြီး တစ်ယောက်က ရေးတယ်။ ဝေဖန်သူနဲ့ တခြားအနုပညာရှင်တစ်ယောက် အမြင်ချင်း ဒါလောက် ကွာဟမှု ရှိနိုင်ပါသလား"
" ဒါမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဝေဖန်သူက ခံစားမှုကို အဓိကထားပြီး ဝေဖန် နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စာပေသမိုင်း၊ စာပေသဘောတရား၊ နိုင်ငံရေး သဘောတရား စသည်တို့ကို အခြေပြုပြီး ဝေဖန်နေတာပါ။ စာဖတ်သူ ဆိုတာကတော့ အများအားဖြင့် ခံစားမှုကို အခြေခံပြီး ပြောလေ့ ရှိတာ မဟုတ်လား။
ဝေဖန်သူကလည်း ပြောဖို့လိုရင် ခံစားမှုကို ထည့်ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားမှုဆိုတာကတော့ ပုဂ္ဂလိက ခံစားမှု ဓာတ်ခံ ကွာဟမှု ရှိသလောက် ခံစားမှု အနိမ့်အမြင့် ကွာခြားမှုလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဝေဖန်သူချင်း မှာလည်း စာပေခံယူချက်၊ စာပေခံစားချက်ချင်း မတူရင် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် တည်းကိုပဲ ဝေဖန်ရာ မှာ အမြင်ချင်း မတူတတ်ကြပါဘူး "
" ဒီနေ့ မဂ္ဂဇင်း တွေမှာ ပါတဲ့ ကဗျာတွေအပေါ်မှာ ဆရာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ "
" ဒီနေ့ မဂ္ဂဇင်း ကဗျာတွေဟာ ပုံသဏ္ဍာန် စမ်းသပ်နေကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကဗျာကို ဘာသာပြန် တဲ့အခါ မောင်သာနိုးက တစ်ကြောင်းချင်း ယှဉ်ပြီး ပြန်ပြထားပါတယ်။ သူ အဆင်ပြေသလို စာလုံးများကို ဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။ လူငယ် ကဗျာဆရာ အတော်များများဟာ နိုင်ငံခြားဘာသာပြန် ကဗျာ က စိတ်ကူးပုံကို သတိမပြု၊ အလင်္ကာသုံးပုံကို သတိမပြုမိတဲ့ စာကြောင်းစီစဉ်ပုံကို သွားပြီး အတုခိုး နေဟန် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကဗျာတွေဟာ ဘာသာပြန်ကဗျာနဲ့ တူနေတာက များပြီး ပြတ်တောက်ပြတ် တောက် စိမ်းဆတ်ဆတ် နဲ့ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေသေးဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ တချို့ကတော့ မဆိုးပါဘူး။ စိတ်ကူး အားနည်း နေတယ်။ ခုနက ခင်ဗျား ကာရန်မဲ့ကဗျာကိစ္စ မေးတုန်းကလည်း ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါပြီ လေ။ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ "
"နောက်ဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့ ဆရာ။ ဝေဖန်ရေးဆရာနဲ့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲဆိုတော့ ကြုံတုန်းမှာပဲ မေး ပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်းအပေါ် အားမနာတမ်း ဝေဖန်ပေးပါဆရာ "
" အားနာပါတယ်ဗျာ "
ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းဟာ ခုအခါမှာ အပြင်အဆင် အမွမ်းအမံဘက်ကဆိုရင် ထိပ်ဆုံးကပဲလို့ ကျော်ကြားနေပါ တယ်။ အရုပ်တွေလည်း လှပါပေရဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းထွက်လာတယ် ဆိုရင်ပဲ တခြားမဂ္ဂဇင်း တွေလည်း ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင် ဆိုတာလို အလှချင်း ပြိုင်ကုန်ကြတာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ရွေးလို့တောင် မရအောင် တူကုန်ပြီ။ အဲဒီကုန်ကျစရိတ်တွေရဲ့ ငါးပုံ တစ်ပုံများ စာရေးဆရာတွေအတွက် စာမူခကို အကုန် ခံရဲ့လားလို့ သံသယရှိပါတယ်။ စာမူပေါ် ပြိုင်ဖို့ ကောင်းတယ်။ စာရေးခတွေလည်း အများ ပြိုင်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ခုတော့ စာမူခဆိုတာ မဂ္ဂဇင်းထဲကို ထည့်တဲ့ ကြော်ငြာခနဲ့တင် ကျေမှာပါ။ ကြော်ငြာခ က တောင် ပိုမြတ်ဦးမယ်။ သမီးရှင်တစ်ယောက် ပြောသလို ငါ့သမီးက ကြီးလေ လှလေပဲဟေ့၊ စာမေးပွဲ တွေလည်း ကြီးလေ ကျလေပဲလို့ မှတ်ချက်ချရမလို ဖြစ်နေပြီ။
စာဖတ်ပရိသတ်အတွက် တီထွင်မှုတွေ ရှိတာလည်း ချီးကျူးစရာပဲ။ ဥပမာ-ခုလို စာရေးဆရာနဲ့ တွေ့ဆုံခန်း ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အပါအ၀င်ပေါ့လေ၊ လေးစားလောက်တဲ့ စာရေးဆရာ နည်းနေပါသေး တယ်။ စာမူတွေကလည်း စာပေသဘောအရ လေးစားလောက်တာတွေ သိပ်မပါသေးဘူး။ ဒါကြောင့် "အဆင်း" ဘက်က မလျှော့ချင်တောင် "အချင်း"ဘက်မှာ တစ်ထစ်လောက် တိုးပါဦးလို့ အကြံပေး ချင်ပါတယ်။ အားတော့ နာတယ်ဗျာ။ ကြုံခဲ့လို့ တစ်ကြောင်း၊ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းများ ဖြစ် မလား လို့ တစ်ကြောင်း အခွင့်အရေးယူပြီး ပြောလိုက်တာပါ။
မဂ္ဂဇင်း တော်တော်များများဟာ စာရေးဆရာကြီးတွေဆီကို စာမူလုက်တောင်းရမှာကျတော့ "သန" သွားမှာလို၊ သိမ်ငယ်သွားမှာလို ဖြစ်နေကြပြီး စာမူကောင်းတွေ လိုက်မတောင်းကြဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာ ပဲဗျာ။ စာမူတန်ဖိုးအရ ပြောရရင် မြို့နယ်မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းတွေကတောင် သာလွန် နေတယ်ထင်ပါရဲ့။ ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းက အဲသလိုဘက်ကပါ ဦးဆောင်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းကို ဦးဆောင်သူတွေက စာတတ် ပေတတ်ပဲဗျ။ စာပေတန်ဖိုးလည်း သိသူ တွေပဲဗျ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မဂ္ဂဇင်းက အောင်မြင်လာပြီမို့ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ခင်ဗျားတို့ လိုရာ ဆွဲဆောင် မြှင့်တင်နိုင်လောက်ပါပြီ"
" ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ မြှောက်ပင့်ပြောတာထက် အားနည်းချက်ကို ထောက် ပြတာဟာ မိတ်ဆွေကောင်း ပိုပြီးပီသပါတယ်။ ပေဖူးလွှာရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က "မကောင်းသေးလျှင် ကောင်း အောင် ကြိုးစားမည်၊ ကောင်းလျှင် ပိုပြီးကောင်းအောင် ကြိုးစားမည်" လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ ကြိုးစားနေကြဆဲပါ။
ဆရာ လည်း ပေဖူးလွှာ ပထမအကြိမ် ထုတ်တုန်းက ကြုံဖူးမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်လောက်က တစ်ကြိမ် ထွက်ခဲ့ရာမှာ "ရက်ရော" လွန်းအားကြီးခဲ့လို့ တစ်သိန်းခွဲလောက် အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီး ပြုတ်ခဲ့ရဖူးပါသတဲ့။ စာမူခ ကိစ္စ၊ စာမူ ရွေးချယ်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ စာတည်းအဖွဲ့နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်လို့ ကျွန်တော် မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တွေ့ဆုံခန်းကဏ္ဍ ကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တာဆိုတော့ ပြောပါရစေ။
ဆရာက "ကျွန်တော် အပါအ၀င် လေးစားလောက်တဲ့သူ နည်းပါးသေးတယ်" လို့ ပြောသွားတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်ကဏ္ဍရဲ့ "မူ"ကို ပြောဖို့ လိုလာမယ်။ တွေ့ဆုံပေးခြင်းကဏ္ဍအတွက် ကျွန်တော်တို့ စီစဉ် ရာမှာ ဆရာကြီးငယ်တို့ကို ၀ါစဉ်အလိုက် မဟုတ်ဘဲ စာတည်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်း အဆင်ပြေသလို ကျွန်တော်လည်း စာဖတ်ရတာ အဆင်ပြေသလိုပေါ်မူတည်ပြီး တွေ့သွားတာပါ။ ခု ပေဖူးလွှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်း အတွင်းမှာ အမှတ်(၉) ကမှ စပြီး စာဖတ်သူများနဲ့ တွေ့ဆုံပေးခြင်းကို စခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ခေတ် လူ ငယ်ကြိုက် စာရေးဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပေးခဲ့သလို သူတို့ခေတ်၊ သူတို့အခါက စာပေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများနဲ့လည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ့အနေနဲ့ အားမရစရာအဖြစ် မြင်ခဲ့သလို ကျွန်တော် အပါအ၀င် စာတည်းအဖွဲ့ကလည်း ကြီးငယ်မဟူ အလျဉ်းသင့်သလို ဆောင်ရွက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားနည်းချက်ကို မှတ်သားထားသလို ကျွန်တော် တို့ စေတနာကိုလည်း ဆရာ သဘောပေါက် စေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲဆရာ။ ကျွန်တော့် ဘက်က မေးစရာ ကုန်ပါပြီ။ ဆရာ့ဘက်ကသာ ကျွန်တော့်ကို ဆက်ပြောစရာများရှိရင် ... "
" ဒီတွေ့ဆုံခန်း အစီအစဉ်ဟာ အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံ ပိုများတဲ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ စကား တွေ ကြားရရင် ပိုများမကောင်းဘူးလားလို့ စာဖတ်ပရိသတ်ဘက်က စဉ်းစားပြီး ပြောလိုက်ခဲ့တာပါဗျာ။ မဂ္ဂဇင်းဘက်က ကြည့်ရင်လည်း တစ်မျိုးပေါ့။
ကဲ ... ကျွန်တော်ကတော့ ပြောရတာ အားမရသေးဘူးဗျာ။ ကိုဝင်းငြိမ်းရဲ့ အဖေနဲ့ ဦးလေးတွေက ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကြီးတွေလို့ သိထားရလို့ ခင်မင်ပြီးသားပါ။ ခုလို တွေ့ရတာလည်း အလွန် ၀မ်းသာ ပါတယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ဆိုတော့ ပြောရဆိုရတာ သိပ်ပြီး အဟန့်အတား မဖြစ်တော့ဘူး၊ မစိမ်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ နောင်လည်း စာကိစ္စ၊ ပေကိစ္စတွေမှာ တွေ့ကြရဦးမှာပါ။ ကိုဝင်းငြိမ်း အောင်မြင်ပါစေ။ ပေဖူးလွှာလည်း စာပေ အကျိုး ဆတက်ထမ်းပိုး တိုးတက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"
ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ်-၃၁၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်။
Posted by SHWE ZIN U at 9:03 AM0comments Links to this post
သော်တာဆွေ ၏ ငွေကိုလေလို သုံးသူ အပိုင်း (၂)
"ဘယ်နှယ့်တော် အချိန်တန်လို့ ပြန်မရောက်တော့ မောင်တို့အမူးသမားတွေ ဂါတ်တဲပဲ ရောက်ပေလား၊ ဆေးရုံ ပဲရောက်နေပလား သေပဲသေကုန်ကြပလားလို့၊ ဒိက တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ဘူးရှင့် ဂါတ်ကပဲ လာ ခေါ်မလား၊ ဆေးရုံကပဲ အကြောင်းကြားမလား၊ စိတ်ထဲ တထင့်ထင့်နဲ့”
”ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောစရာ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ အကြောင်းကြောင်းအရာရာတွေက ရှိခဲ့ဖူးပေ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဒဏ်ရာတွေနှင့် ပြန်ရောက်လာတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်မှာ တရား ခံဖြစ်နေ တတ်သည်။ (၁၉၅၉) ခုနှစ်တုန်းကလား၊ မိုးကုတ်မြမောင်နှင့် စာရေးဆရာသော်တာဆွေ ဟိုတယ်တွင် ရန်ဖြစ်မှု၊ တရားခံများ အဖြစ်နှင့် သတင်းစာတွေထဲပင် ပါခဲ့ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်း တစ်သိုက်က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အား ”မူးလာ လျှင် တရားလိုရှာရော ”ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြသည်။ ထိုနေ့နံနက်က ကျွန်တော့်မိန်းမသည် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အား တော်တော်ကြိမ်းပစ်ပါသည်။ ယင်းအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နှစ် ယောက်သည် အမူးဒီဂရီ ကျနေသည် ဖြစ်ရာ လူတွေမှာလည်း စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေပေသည်။ အရက်သမားတို့၏ စွမ်းပကား အနိမ့်ဆုံး အခါဖြစ်၍ ကိုယ့်အလွန် ကိုယ့်အမှားကို ခေါင်းငုံ့ခံကြ သည်။ အဲသည်တုန်းကများ ဝမ်းပက် တူးပက် လောက်များ ထပ်နှက်လိုက်ရ အမူးဒီရဂီပြန်တတ် ၍ အမူးတစ်ပတ်ရစ်ဖြင့် ငါ့သူငယ်ချင်း ရှေ့ သည်လို ပြောရပါမည်လား ဟု မိန်းမကို နားသယ်ပါး လယ် ကျင်းပစ်လိုက်ပေမည်။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့မှာ သနားစဖွယ် အားဆေးကမဲ့ နေသည်ဖြစ်၍ နှစ်ယောက်သား အလျှော့ပေးရကာ ကိုမြမောင်က…
"နောက် ခင်ဗျားယောက်ျားကို အချိန်မီ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပြန်ပို့ပါ့မယ်" ဟု ကတိစကားထား ခဲ့ရ၏။
ထို့ကြောင့် သူသည် သူနှင့်သောက်လျှင် ဘယ်သောအခါမဆို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပို့လေ့ ရှိ၍ ယခုည ကျွန်တော်က လမ်းထိပ်က ဆင်းသွားပါမည်ဆိုတာကို လက်မခံဘဲ ကျွန်တော့် အိမ်အရောက် လိုက်ပို့ပြီး…
"ဟောဒီမှာ ဒေါ်မေ၊ ခင်ဗျားယောက်ျားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လာပို့ထားခဲ့ပြီးဗျို့" ဟု အော် ပြီး ကားထွက် သွား တော့၏။
နောက်တစ်နေ့ညနေ ကျွန်တော် ပေါင်းတည်ဘူတာသို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်တော့်ယောက်ဖ လာကြို နေပေသည်။
"ငါ့စက်ထဲ စပါးချရင်း လာတာကွ၊ အပြန်မှာ လယ်ထဲချဖို့ဖွဲတင်ထားတယ်၊ မင်း ငါ့ဖွဲလှည်းနဲ့ လိုက်မလား၊ မြင်းလှည်း နဲ့သွားမလား"
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ မြို့မှ သုံးမိုင်သွားရသေးသည်။
"ဟာ…. လမ်းကြမ်းကြမ်း၊ မြင်းရထား သိပ်ဆောင့်တယ်ဗျာ၊ နေကအေးပြီပဲ၊ ကိုစံတင် ဖွဲလှည်း နဲ့ပဲ လိုက်ခဲ့ တော့ မယ်"
သို့ဖြင့် ကျွန်တော်သည် မစီးရတာ ကြာပြီဖြစ်သော ဂေါ်ကာဘဲလ်အဲယားဖြင့် ရွာသို့ ယွန်းခဲ့ သည်။
အိမ် ရောက်သော သက်ကြီးရောဂါနာတာရှည်ဖြစ်သော အဖေအား ခေတ္တမေးစမ်းပြောဆိုပြီး ကျွန်တော် သောက်ချိန် နီးပြီဖြစ်ရကား ရွာရှိသောက်ဖော်များအိမ်သို့ လစ်ခဲ့တော့သည်။
ရွာတွင် ကျွန်တော်၏အရက်အဝယ်တော် ကိုမောင်ခိုသည် ကျွန်တော်ရောက်သည်ကြား၍ အသင့်စောင့် နေသည်။ သူ့အား ငွေဆယ်တန် တစ်ရွက် ဖျက်ခနဲ ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်သည်။
"တစ်ဆယ်ဖိုး ငါးလုံးကြီး တစ်ခါတည်း ယူခဲ့ရမှာလား"
"ယူခဲ့ပေါ့ဗျာ၊ အရက်များတာ မှားတာမှတ်လို့"
ကျုပ်တို့ရွာတွင် အရက်တစ်ဆယ်ဖိုးကြီး တစ်ခါတည်းဝယ်တဲ့လူ နှယ်နှယ်ရရမှတ်လို့။
ထို့နောက် ကျွန်တော်၏သောက်အိမ် ဦးထွန်းစိန်အိမ်သို့ သွားသည်။ ဦးထွန်းစိန်သည် သောက် သောက် စားစား ကာလသားကြီး ဖြစ်သည်။ (ယခုကား ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ၊ သူ့အကြောင်း"လူတစ် ယောက်အကြောင်း" ဝတ္ထုရေးခဲ့ပြီ)။ သူသည် အရက်နှင့်မြည်းရန်ကတ်သီးကတ်သတ် စားစရာ လေးများကို ကြံဖန်လုပ်တတ်သူ ဖြစ်သည်။
သူသည် ကျွန်တော့်အသံကြားသော် သူ၏မှုန်မွှားသော မျက်စိဖြင့် နဖူးပေါ် လက်ဝါးအုပ်ကြည့် ၍…
"ဟေ့..ဘိုကျင်… မင်းရောက်လာပလား၊ ငါ့လခွီး… ဒီနေ့မြည်းစရာတော့ ထူးထူးထွေထွေ မရှိ ဘူးဟေ့၊ ဘိုခို ချောင်း ထဲက ကောက်လာတဲ့ ခရုဖင်ချွန်လေးတွေ ပြုတ်ပြီး ခွေးတောက်ရွက် အုပ်ထားလိုက်တယ်၊ အရက်သောက် အနှစ်စုတ်ပေါ့ကွာ"
"ဟာ … ဒီထက် ထူးထွေနိုင်ဦးမလား ဦးထွန်းစိန်ရ"
"ဟာ… မလုပ်နဲ့တော့ ကျွန်တော် အဆီအဆိမ့်တွေ မစားချင်တော့ဘူး၊ အချဉ်ဘာရှိလဲ"
"မရမ်းသီး ရှိတယ်ဟေ့၊ ဟုတ်ပြီ အဲဒါ ငါးပိစိမ်းစားလေးနဲ့ လေးစိတ်ကွဲထောင်းလိုက်မယ်"
မကြာမီ ကိုမောင်ခို ရောက်လာသည်ဖြစ်၍ အမြည်းက ခရုဖင်ရှည်၊ ခွေးတောက်ရွက်ပြုတ်၊ မရမ်သီး လေးစိတ်ကွဲ ထောင်းကလေးနှင့် ကျွန်တော်တို့ ချက်ဝိုင်းကလေးကို စဉ်းစားကြည့် ပါဘိ။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ခရုခေါက်ဆွဲခေါ်သော ခေါက်ဆွဲကျော်ပေါ်မှာ ပြည်ကြီးမှလာသော သံဘူးဖြင့် မီးခိုးနံ့ သင်းထားသည့် အရည်ကလေးစပ်စပ်နှင့် ခရုကလေးတစ်ဇွန်းလောက် ဆမ်းပေးလိုက် သည်။ ကျွန်တော် တို့က ဤခရုမျိုးမဟုတ်။ လက်ရေတစ်ပြင်တည်းဆိုဘိသို့ သောက်ရေတစ်ခွက်တည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရှေးရိုးစဉ်လာ။
ကျွန်တော်သည် ဤသို့တောသားများနှင့် ဤသို့တောဂေဟာတွင် တောသောက်သောက်ရင်း ညက ရန်ကုန်မြို့ ဟိုတယ်ကြီးများတွင် မြို့သားများနှင့် မြို့သောက်သောက်ခဲ့ပုံကို ပြောပြ သည်။
"ဟေ့ မင်းတို့ သောက်တဲ့အရက်က တစ်ပုလင်း ဘယ်လောက်လဲကွ"
"ခင်ဗျားဝက်ပေါက်က ပေါ်လိုက်ရင် အချိန်ဘယ်လောက်ထွက်လဲ"
"ဟင် ညက ကျွန်တော်တို့ စားခဲ့တဲ့ ဝက်ကလေးကောင်လုံးကြော်ဟာ တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်ကျပ် ပေးခဲ့ ရတယ် ခင်ဗျ"
"အရှင်ဖမ်းချိန်ရင် သုံးလေးပိဿာ ရှိတော့မပေါ့ဗျာ၊ နို့စို့ ဝက်ကလေးပဲ"
"ဟာ…. မင်းတို့က အစားတယ်ရက်စက်ကြပါလာူး..ဟ"
"ဒါက ခင်ဗျားကို ဟင်းတစ်မည်တည်း ပြောသေးတာ၊ ဒိပြင် အပုံကြီးရှိသေး"
"အေး… ထားပါတော့ကွာ၊ ကဲ.. မင်းတို့ အဲဒီတစ်ည တစ်နပ်စာစားကြသောက်ကြတာ ဘယ် လောက် ကုန်မလဲ"
ကျွန်တော်လည်း အတိအကျမသိ၍ ခန့်မှန်းခြေကို ပြောလိုက်ရာ ကိုမောင်ခိုသည် အလန့်တကြား အော်လျက်…
"အောင်မလေးလေး ပထမတန်းစား နွားတစ်ရှဉ်းဖိုးလောက် ကြီးပါလားဟ၊ဒီမယ် ငါ့မှာကွာ၊ နွား တစ်ဖက်တည်း ဖြစ်နေတာ သုံးနှစ်ရှိပြီ၊ တစ်ရှဉ်းပြည့်အောင် ဖြည့်မယ်နဲ့ဟာ မင်းလူ ခေါ်ခဲ့စမ်း ကွာ ငါ့နွားတစ်ကောင် ဖိုးလောက် တောင်းချင်လို့"
"သူ….ဒီရွာ.. ကျွန်တော်နဲ့ ရောက်ဖူးသားပဲဗျ"
"အေး … ဒါဖြင့် တို့နဲ့ ဘာလို့ မတွေ့လိုက်ရတုံး"
"အဲဒီတုန်းက ပေါင်းတည်စွယ်တော်ရက်ကြီး၊ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့တောင် မတွေ့လိုက်ရဘူး၊ မဟုတ်လား ညကြီးမင်းကြီး ပြန်သွားရတာ၊ အဖြစ်က.. .ဒီလို" ဟု ဆိုပြီး ကိုမြမောင်အကြောင်း နောက်ကြောင်း ပြန်ရှင်းပြ လိုက်ရသေးသည်။
(၁၉၆၂)ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း (၁၃) ရက်၊ နှစ်စဉ်ပေါင်းတည်စွယ်တော် လှည့်ပွဲရက်၊ နံနက် ၉း၀၀ နာရီခန့်။ ကိုမြမောင်နှင့် အပေါင်းပါတွေကားနှစ်စီင်္းနှင့် ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့ ရောက် လာကြပြီး သူတို့အားလုံး ပစ်ကတ်တစ်ပတ်ရစ် တွေဖြင့်…
"ကိုဆွေ လာလာ၊ ဘာအလုပ်ရှိရှိထားခဲ့၊ အဝတ်တောင် လဲမနေနဲ့ ကြာတယ်၊ ကျုပ်တို့ကို ပေါင်းတည် စွယ်တော်လှည့်ပွဲ လိုက်ပို့"
သို့ဖြင့် ကျွန်တော်ကားပေါ်တက်ခဲ့၍ နေ့လယ်သုံးနာရီလောက် ပေါင်းတည်မြို့ထဲ ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
စွယ်တော်လှည့်ပွဲကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် လူနှစ်စုခွဲကြသည်။ တစ်စုက မြို့ပေါ်တွင် ဘုရားလူကြီး ဦးကိုကိုကြီး သား ကိုဝင်းလှိုင်ဆီမှာ တည်းကြမည်။ ကိုမြမောင်နှင့်ကိုတင်မောင် ညီအစ်ကိုက ကျွန်တော့်ရွာ ကျွန်တော့် ဂေဟာ သို့ ရောက်ဖူးအောင် လိုက်ကြမည်။ သို့ဖြင့် ညနေ ၆ နာရီ လောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရွာ ရောက်ကြ သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ရွာ လှည်းလမ်းမပေါက်သေး၍ ကိုမြမောင်၏ မာစီးဒီးကားကြီး တာလမ်း ဘေးရှိ ကျွန်တော့်ဆွေမျိုးအိမ်တွင် ထားခဲ့ပြီး ရွာထဲ ဖိနပ်ချွတ်၍ ဝင်ခဲ့ကြရသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် မြို့ပေါ်မှ ဘာမျှစားစရာများ ဝယ်မလာခဲ့ကြပေ။ အိမ်ရှိကြက်ကို ကာလသား ချက်စားကြမည်ဟု ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ရာ အဆင်သင့်ပင် ကျွန်တော့်အိမ်မှာ တော်သလင်း တွင်းအောင်း ကြွက်သားကြီး တွေ ဆီပြန်ချက်ထားသည်နှင့် ကြုံလေသည်။ သို့ဖြင့် အစားအတွက် ကျွန်တော်တို့ အဖို့ တောဟင်း တောချက်ခံတွင်းအပြောင်းအလဲ အဆင်ပြေ သွားလေသည်။
သို့သော် ညအိပ်သောအခါ ကိုမြအောင်အတွက် အခက်တွေ့လေပြီ။ သူသည်ရန်ကုန်မှာ စထရင်း ဟိ်ုတယ် တွင် လေအေးစက်နှင့် အခန်းမှာ နေသည်။ မန္တလေးရှိ် သူ့တိုက်မှာလည်း သူ့အခန်းတွင် လေအေးစက်နှင့် ဖြစ်၏။ သူနေသော အခန်းတွေမှာ ခြင်ယင်မျှ မဝင်နိုင်သည် ဖြစ်၍ အိပ်ရာတွင် ခြင်ထောင်မရှိပေ။
ယခု ကျွန်တော်တို့အိမ်ကား သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်။ တောရွာဓလေ့ ညအချိန်မှာ တံခါးတွေ အလုံ ပိတ်ရသည်။ အခါရာသီ ကလည်း တော်သလင်းနေ ပုဇွန်သေ။ ခြင်တွေကလည်း တဝီးဝီး၊ ခြင်ထောင်ကလည်း ရွာရက် ဇာဖျင်ကြမ်းကြီး။ ကိုမြမောင်အဖို့ လှလှကြီး ဒုက္ခတွေ့လေပြီ။ သူသည် အားနာပြီး အတော်ကြာ အောင့်အည်း နေသေး၏။ နောက်ဆုံး၌ မတတ်သာပြီ။
"ကိုဆွေ.. ခုည ပြန်စို့ဗျာ" ဟု စတင်ပြောတော့၏။
သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် ၉ နာရီလောက်ကြီး ရွာမှ ထွက်ခဲ့ကြ၍ ညတွင်းချင်း ရန်ကုန်သို့ ပြန်ခဲ့ကြတော့၏။
"ငါ့လခွီး…. ဒါဖြင့် မင့်လူက တယ်ပြီးနေရာရွေးတဲ့လူပါလားဟ"
ကျွန်တော့် စကားအဆုံး ၌ ဦးထွန်းစိန်က မှတ်ချက်ချ၍ ကျွန်တော်က"နေရာတင်မဟုတ်ဘူး၊ အစားအသောက်လဲ သိပ်ရွေးတယ်၊ ဝီစကီလဲ ထိပ်တန်းမှ သောက်လို့ဖြစ်တယ်"
"ဝီစကီ ဆိ်ုတာ ဘာလဲဟ ရန်ကုန် တို့လာတုန်းက ဟိုတယ်မှာ မင်းတို့ကို တိုက်တဲ့ဟာမျိုးလား"
"မဟုန်ဘူး၊ အဲဒါက ရမ်၊ ဝီစကီက ရမ်ထက် လေးငါးဆ အဖိုးတန်တယ်"
"ဟာ.. ဒါဖြင့် သိပ်ကောင်းလို့ပေါ့"
"ဒါပေမယ့်… ဦးထွန်းစိန်တို့တော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ရမ်တောင်မကြိုက်တာပဲ"
ကိုမြမောင်အကြောင်းရေးရင်း သူတို့အကြောင်းလည်း ပြောရဦးမည်။ တစ်ကြိမ်သောအခါ၌ ဦးထွန်းစိန်နှင့် ကိုမောင်ခို သည် အသွားအပြန်စရိတ်ခံပါမည်ဟု ကျွန်တော့်၏ပင့်ဖိတ်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ရောက် လာကြသည်။ ပထမ သူတို့အာသီသ ထားကြသော ဘုရားတွေအစုံ လိုက် ပို့ပြီးနောက် ညနေစောင်းမှာ (ထိုစဉ်က ကျွန်တော်စားကျက်) တာဝှာဟိုတယ်သို့ ခေါ်ခဲ့သည်။
မြည်းစရာတွေ တော်တော်များများမှာပြီး ရမ်ပုလင်းတစ်လုံးထောင်၍ ထိုစဉ်က ဟိုတယ်ထုံးစံ အတိုင်း ဘွိုင်တစ်ယောက် ကို အနားထားပြီး ပြုစုစေသည်။ ဘွိုင်က လိုသမျှ ယူပေးရသည်။ အရက်ငှဲ့ပေးရသည်။ ရေခဲ ဆော်ဒါ ထည့်ပေးရသည်။
စီးကရက် ထုတ်လိုက်လျှင် မီးခြစ်ပြီး ညိပေးရသည်။ ဒါတွေကို ပြချင်လို့ပဲ ကျွန်တော်သူတို့အား ဟိုတယ်ခေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘွိုင်ထည့်ပေးသည့်အတိုင်း အရက်သုံးခွက်စီ လောက် သောက်ပြီးနောက် ဦးထွန်းစိန်က စတင်၍ "ငါ့လခွီး… မင့်ဟာကြီးသောက်ရတာက ဖျော်ရည်သောက်ရသလို ပါပဲလားဟ"
ကိုမောင်ခိုက…. "အေးကွာ… ဟုတ်တယ်၊ ဟာဒီ အဖြူရေနဲ့ ရေခဲမပါဘဲ အနီချည်း မသောက်ရ ဘူးလား"
"ဟာ… သောက်ရပါတယ်၊ ဟေ့.. ဘွိုင် ရမ်ချည်းနိဝမ်းပက်စ်စီလောက် ထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါ ကွာ"
သူတို့သည် သည်အတိုင်း မော့ချလိုက်ကြပြီးမှ မျက်နှာမရှုံ့ဘဲ…"အင်း.. ဒီလိုဆို တော်တော်ရှိ သေး၊ ဒါပေမယ့် တို့ဆီက ချက်အရက်လောက် မကြိုက်ပေါင်ကွာ၊ ဒီဆိုင်မှာက ချက်အရက် မရောင်းဘူးလား"
"ချက်အရက်နဲ့ တူတာတော့ရှိတယ်၊ သောက်ကြည့်ကြပေါ့" ဟုဆိုပြီး ဘွိုင်အား ဂျင်ဝမ်းပက်စီ ယူခိုင်း လိုက်သည်။
သူတို့သည် ဂျင်ကို သောက်ပြီးနောက် မှတ်ချက်ချကြပြန်သည်။
"အဝင်တော့ တော်သားဟေ့၊ ရင်ထဲ ပူဆင်းသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရေမွှေးစော်ကြီး နံတယ်ကွာ၊ အရက်နဲ မတူဘူး၊ အဲဒါ ခု.. တို့သောက်တဲ့တစ်ခွက် ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ"
"ဟာ.. ငါ့လခွီးတဲ့၊ တစ်ပုလင်းလောက် ဝယ်သွားမလာအောက်မေ့တယ်"
"ရွာက ညီပု ထန်းလျက်အရက် မီးတောက်နှစ်ကျပ်ခွဲ သောက်တော့မှာပေါ့ဗျ"
"အေးလေကွယ်.. ဒါက ညီပုအရက်လောက်တော့လာသား၊ ဈေးချင်းတူမလားလို့ မေးကြည့် တာ"
"ဟင်.. သူတို့ဆီက ဘာမှမဟုတ်လဲ ဟိုတယ်မှာဆိုတော့ ဟိုတယ်ဈေးတွေ ကြီးနေတာပေါ့ဗျာ"
ဟု ကိုမောင်ခိုက နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ချလိုက်၏။
မှန်ပါသည်။ ချက်အရက်သောက်နေသူများသည် ချက်အရက်ကလွှဲလျှင် သူတို့ပါးစပ် ဘာမှ မတိုးတော့ပြီ။
ကျွန်တော်သည် စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် တစ်ပတ်မျှ ရွာတွင်နေပြီး ရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့၏။ နေအိမ်သို့ ညနေ ၄ နာရီလောက်ရောက်၍ နောက်တစ်နေ့နံနက် လှည်းတန်းဈေးက ဈေးဝယ် အပြန် ကမာရွက် ဂါတ်အနီးရှိ တယ်လီဖုန်းမှ စထရင်းဟိုတယ်သို့ ကိုမြမောင် ရှိ မရှိ ဖုန်းဆက် မေးကြည့်၏။
ကိုမြမောင်သည် မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်ကို သွားချင်တဲ့အချိန်သွား၊ ပြန်ချင်တဲ့အချိန်ပြန်၊ ကူးဂလန်ခတ်နေသူ ဖြစ်၏။ မန္တလေး ဒါးတန်းရေခဲစက်နှင့် ဘိလပ်ရည်စက်မှာ သူတို့ဟာဖြစ် ၏။ ရန်ကုန်ခြောက်မိုင်ခွဲတွင် သူတိုက်တစ်လုံးရှိ၏။ နိုင်ငံခြားသားတွေငှားလျှင် တစ်လ ၁၅၀၀ ကျပ်ရ၏။ သို့သော် သူငှားလို မှငှား၏။ အိမ်က အားနေသော်လည်း ဒရဝမ် နှင့်မာလီ သာ ထား၍ သူက ထိုိအိမ်၌ နေလေ့မရှိ။ စထရင်း ဟိုတယ် မှာသာ တစ်နေ့ ၆၀ ကျော်(အစားမပါ) ပေး၍ နေ၏။ ကျွန်တော်နှင့် စတင်သိသောအချန်မှာ မိန်းမရှိ၊ လူပျိုကြီး လိုနေ၏။
Posted by SHWE ZIN U at 8:35 AM0comments Links to this post
မင်းလူ ၏ အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောသူ, အပိုင်း (၁ဝ)
ဒေါ်ငွေဇံက ဦးဝင်းမောင်ကို အလွန်အရေးပေးသည်။ အရင်က ဈေးလာဝယ်ရင်း အကြောင်းမရှိ အကြောင်း ရှာ စကားပြောရုံသာဖြစ်၏။ ဒါကို ဒေါ်ငွေဇံက
''မောင်ဝင်းမောင်ပါလား၊ လာလေကွယ်၊ လက်ဖက်စားပါဦး ၊ ရေနွေားကမ်းသောက်ပါဦးလေ''
ဆိုပြီး အိမ်ပေါ်ကို ဖိတ်ခေါ်တတ်သည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးကလည်း
ဟု နောက်သလို ပြောင်သလိုပြောရင်း ဧည့်ခန်းမှာ တက်ထိုင်တက်လေသည်။ ပြီးတော့ နာရီဝက် တစ်နာရီ ကြာအောင် စကားတွေ ပြောနေတတ်၏။ ထိုအခါမျိုးမှာ ဒေါ်ငွေဇံကလည်း ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနှင့်ဧည့်ခံလေရှိပြီး။
''မြလွင်ရေ နင့်အစ်ကိုကြီးကို လက်ဖက်ကလေး သုပ်ပေးပါဦ၊ ရေနွေးကြမ်းလေး ယူခဲ့ပါဦး''
ဆိုတာမျိုး လုပ်တတ်သည်။ တစ်ခါတလေ..
''ဆိုင်ကို ငါကြည့်ထားမယ်၊ မောင်ဝင်းမောင်နဲ့ စကားပြောလိုက်ဦး''
ဟု ပေါ်တင်ကြီး ခွင်ဆင်တတ်သည်။
ဒါကို မြလွင်က မကြိုက်။ သူ့အမေရဲ့ အကြံအစည်ကိုလည်း ရိပ်မိသည်။ ခုလိုဦးဝင်းမောင်ကြီးက အိမ်ဦး ခန်းမှာ အခန့်သားရောက်နေတာကိုလည်း ရှက်သည်။ အရပ်ထဲက လူတွေက ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ပိုက်ဆံရှိ တဲ့ မုဆိုးဖိုကြီးကို ချူစားမြူစားနေတယ်လို့ ထက်ကြမှာပေါ့။
''အဲဒီလူကြီးကို သိပ်အရောမဝင်စမ်းပါနဲ့ အမေရယ်''
''အို…. သူက ကိုယ့်ကိုခင်မင်ရှာလို့ တကူတက လာတာပဲလာ''
''ဘယ်သူက ဘာထင်ထင် ဂရုစိုက်စရာလား၊ မောင်ဝင်းမောင်လို ဧည့်သည်မျိုး တို့အိမ်လာတာ ဂုဏ်ယူဖို့ တောင် ကောင်းသေးတယ်''
ဟုဆိုသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုလည်း စကားမစပ်လုပ်၍ ''ညည်းလည်း အရွယ်ရှိတုန်း အားကိုးရာလေး ဘာလေး ရှာထားဦးနော် ငါက အသက်ထောက်လာပြီး ညည်းကို ရေရှည်စောင့်ရှောက်ဖို့ မလွယ်ဘူး၊ အေးတစ်ခုရှိတယ်၊ အိမ်ထောင်ပြုဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကမှီရတဲ့ လူကို စဉ်းစားကြားလား'' ဟု ဆွယ် ပြောပြောတတ်၏။
ဦးဝင်းမောင်ကြီးကတော့ ဒေါ်ငွေဇံအားကိုးနှင့် အိမ်ကိုမကြာခဏ ဝင်ထွက်နေတော့သည်။ ကြုံတဲ့အခါတိုင်း လည်း လက်ဆောင်တွေယူလာတတ်သည်။ ဒေါ်ငွေဇံနှင့် မြလွင်တို့အတွက် ထဘီများ၊ အင်္ကျီများ၊ သဲသဲ ချစ်အတွက် ဂါဝန်ကလေးများ ကစားစရာများ၊ မုန့်များ။
ထိုလက်ဆောင်များကို မြလွင်က မလိုချင်၊ ဒေါ်ငွေဇံက လက်ခံထားတာဆိုတော့လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်။ သို့ရာတွင် မြလွင်က လုံးဝဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိ။
သဲသဲချစ်ကတော့ ဘာမှမသိ။ ကစားစရာလေးတွေ၊ မုန့်တွေရသောကြောင့် သဘောကျနေသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးကိုလည်း 'ဘဘ'ဟု ခေါ်ပြီး တရင်းတနှီး ဆက်ဆံသည်။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးက သဲသဲချစ်ကို မွေးစားလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုသော စကားကိုတောင် ပြောလာပြီ။
သူက ပေါင်းတတ်သင်းတတ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် ချစ်ဦးကိုလည်း စည်းရုံးထား၏။ ပုဆိုးလေး၊ စပို့ရှပ်လေး ဝယ်ပေးလိုက်၊ လက်ဖက်ရည်ဝယ်တိုက်လိုက်၊ မုန့်ဟင်းခါး ဝယ်ကျွေးလိုက်နဲ့ပေါ့။
တစ်ရက်မှာတော့ ဦးဝင်းမောင်ကြီးနှင့် ဒေါ်ငွေဇံတို့ စကားပြောနေတုန်း ချစ်ဦးရောက်လာသည်။
''ဟေ့ကောင် ချစ်ရူး၊ ဘယ်ကပြန်လာတာလဲကွ''
ဟု ဦးဝင်းမောင်ကြီးက နှုတ်ဆက်သည်။
''အမယ်၊ မင်းက ဘိလိယက်လည်း ထိုးသလား၊ ပတေးလှမြင့်နဲ့ မင်းနဲ့ ဘယ်သူက လက်ရည်သာသလဲကွ၊ သူကတော့ အရှေ့တောင် အာရှချန်ပီယံ ကျော်ဦးဟာအရင်က သူသင်ပေးလိုက်တာလို့ ကြွားနေပါလား''
''ဟာဗျာ၊ ကျွန်တော်က သွားကြည့်ရုံကြည့်တာပါ။ ဘိလိယက်ိထိုးတာတော့ ဝါသနာမပါပါဘူး၊ ဘယ်နှယ့် ဗျာ ဘောလုံးကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး လှိမ့်သွင်းလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ဟာကို အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး တုတ်နဲ့ ထိုးနေကြတာပဲဗျ''
''ဟား… ဟား… ဟား မင်းကတော့ ပြောရော့မယ်''
ချစ်ဦးသည် သူ့တဲကလေးဘက် လျှေက်သွားတော့မည်ပြုပြီးမှ လှေကားရင်းမှာ ချွတ်ထာူးသော ဦးဝင်းမောင် ကြီး၏ ဖိနပ်ကို မြင်သွား၏။
''ဟာ.. ဦးဝင်းမောင်ကြီး ဖိနပ်က အောကတ္တိပါပဲ၊ တယ်ကောင်းပါလား''
''မင်းကြိုက်လို့လား၊ နောက်တစ်ခါလာရင် ဝယ်လာခဲ့ပေးမယ်၊ ဖိနပ်အတိုင်းသာပေးလိုက်''
ကျွန်တော်က ရွှံ့ထဲသဲထဲ သွားနေတာ ဖိနပ်အသစ်ဆိုရင် နှမြောစရာကြီး''
''ဟဲ့.. အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ၊ ဧည့်သည်ဖိနပ်ကို တောင်းရသလား''
''ကျွန်တော်က ဖိနပ်အဟောင်းလေးပဲ တောင်းတာပါဗျ''
ချစ်ဦး၏ တုန့်ပြန်စကားက အဓိပ္ပာယ်ကျယ်ဝန်းသည်။ ဒေါ်ငွေဇံက…
ဟု ဟောက်လိုက်စဉ်မှာ ဦးဝင်းမောင်ကြီးက ဝင်၍
''ရပါတယ်၊ ရပါတယ် မင်းလိုချင်ယူလိုက်လေ''
ဟု ပြောသဖြင့် ချစ်ဦးလည်း သူ့ ရာဘာဖိနပ်မြီးတိုကို ချွတ်ထားခဲ့ပြီး ကတ္တီပါဖိနပ်ကို စွပ်ပြီး ထွက်သွားလေ ၏။
ချစ်ဦးအနေဖြင့် ဦးဝင်းမောင်ကြီးအပေါ်မှာ မတင်မကျ သဘောထားရှိနေ၏။ ဦးဝင်းမောင်ကြီးသည် စေတနာကောင်းသည်။ သူ့အပေါ် လိုက်လိုက်လျောလျောရှိသည်။ စိတ်ရင်းကောင်းပုံလည်း ရသည်။ ထို့ ကြောင့် ခင်မင်မိ၏။
တဖက်က ကြည့်တော့လည်း ဦးဝင်းမောင်ကြီး တစ်ယောက်သူ့တို့အိမ်ကို လာလာနေတာ သွေးရိုးသားရိုးမ ဟုတ်။ မြလွင်ကို လာရှိတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူတွေကပြောကြသည်။ တချို့ကဆိ်ုလျှင် ''ကိုယ့်အဖေ အရွယ်ကြီးကို ယောက်ဖတော်ရမှာ မင်းမရှက်ဘူးလား'' ဟု စနောက်ကြသည်။ ကိုဘိုလေးကလည်း ''မင်း က ငါပြောတာမှ လက်မခံပဲကွ'' ဟု ပြောသေးသည်။
ချစ်ဦးသဘောကတော့ ဦးဝင်းမောင်ကြီးသည် နည်းနည်းပေါတောတောနိုင်သော်လည်း ပိုက်ဆံလည်းရှိ၊ သဘောလည်း ကောင်းသူဖြစ်သဖြင့် မြလွင်ကသာလက်ခံမယ်ဆိုလျှင် သူ့အနေဖြင့် မကျေနပ်ဖြစ်စရာ မရှိ။
သို့ရာတွင် မြလွင်နှင့် ဦးဝင်းမောင်ကြီးတို့ ယူကြမည်ဆိုလျှင် သဲသဲချစ်ကိုပါ ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုသော အချက် ကိုတော့ သူလုံးဝ လက်မခံနိုင်။ ဒီကြားထဲမှာ ဦးဝင်းမောင်ကြီးက သဲသဲချစ်ကို မွေးစားရကောင်းမလား၊ စဉ်း စားနေသယောင်ယောင်သတင်း ကြားရသောအခါ သူမခံမရပ်နိုင် ဖြစ်သွား၏။ ထို့ကြောင့်
''ဦးဝင်းမောင်ကြီးက အိမ်ကို ဘာကြောင့် ခဏခဏ လာရတာလဲ''
ဟု မြလွင်ကို မကျေမနပ် မေးသည်။ မြလွင်ကတော့ ဖြေပြောပြော၏။
''သြော်… ခင်လို့ မင်လို့ပေါ့ မောင်လေးရယ်''
''ခင်စရာအိမ် ဒီလောက်ရှားသလားဗျ၊ ကျွန်တော့်တို့အိမ်မှ ရွေးပြီး ခင်ရသလား၊ ပြီးတော့ အဒေါ်ကြီးမ လည်း သူလာရင် သွားကိုဖြဲနေတာပဲ၊ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေလာတာကျတော့ အိမ်ရှု့ပ်သလေး ဘာလေးနဲ့ သူက မမကို လာရှိတ်နေတာဗျ။ သိရဲ့လား''
''ဘာလို့ မဟုတ်ရမှာလဲ လူတိုင်းပြောနေတာ၊ ဒီမှာ .. ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမတူဘူးနော်၊ မမက ငယ် ငယ်လေးရှိသေးတာ၊ အခုမှ အစိတ်ပဲရှိသေးတယ်၊ သူက ငါးဆယ်လောက်ရှိပြီ''
မြလွင် အနေဖြင့် သူလည်းသဘောမကျကြောင်း ပြောလို့မဖြစ်၊ ချစ်ဦးက ယုံရတာမဟုတ်၊ တော်ကြာ ဦးဝင်း မောင်ကြီးကို တစ်ခုခုသွားလုပ်လိုက်လျှင် မျက်နှာပူစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဖေးဖေးမမ လုပ်နေရ၏။ ချစ်ဦးက ဆက်ပြောသည်။
''အသက်ချင်းက နှစ်ဆတောင် ကွာတယ်ဆိုတော့ မမစဉ်းစားကြည့် အခုမမအသက်က အစိတ်မှာ သူကငါးဆယ်၊ မမအသက်သုံးဆယ်ဆိုရင် သူက ခြောက်ဆယ်၊ မမသုံးဆယ့်ငါးနှစ်မှာ ခုနှစ်ဆယ်၊ မမလည်း အသက်လေးဆယ်ရှိရော သူက အသက်ရှစ်ဆယ်အရွယ် အဘိုးအိုကြီးဖြစ်နေမှပေါ့''
ချစ်ဦးက အသက်ချင်း နှစ်ဆယ်ငါနှစ် ကွာတယ်ဆိုသော အချက်ကို အခြေမခံဘဲ နှစ်ဆကွာတယ်ဆိုတာကို မူတည်ပြီး တွက်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ အဖြက မှားသော်လည်း သီအိုရီသဘောအရဆိုလျှင်တော့ တွက်နည်း မှန်သည်ဟု ဆိုကောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဒါမျိုးကို သာမန်လူတို့ မတွေးခေါ်နိုင်။ ချစ်ဦးတို့လိုလူမျိုးနှင့် ဦးနှောက်အလွန်းကောင်းသော ဥာဏ်ကြီးရှင် တို့သာ စဉ်းစားနိုင်သော ပုစ္ဆာမျိုးဖြစ်၏။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း ရူးခြင်းနှင့်ထူခြင်းသည် သိပ်မကွာ ခြားလှပါ။
မြလွင်ကတော့ ပြုံးရုံသာ ပြုံးလိုက်ပြီး။
''မမကို စိတ်ချစမ်းပါ မောင်လေးရယ်၊ မမ တစ်သက်မှာ အစ်ကိုချစ်မှူးကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်မကူးဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။ မမစိတ်ထဲမှာတော့ အစ်ကိုချစ်မှူးဟာ မမတို့နဲ့ အတူခုထိ ရှိနေတယ်လို့ ထင်နေ တုန်းပဲ ကျေနပ်ပြီလား''
''ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ ထင်နေတာပါပဲဗျ''
ဟု ချစ်ဦးက ကျေနပ်သွားသော လေသံဖြင့် ပြန်ပြော၏။
ဒေါ်ငွေဇံ မျှော်လင့်နေသောရက်သည် တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဟု ဆိုကောင်းဆိုနိုင်၏။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး သူတို့ အိမ်ကို လာလည်သောရက်တွေ စိပ်လာသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ဒေါ်ငွေဇံကလည်း အမြဲတမ်း 'ဝဲလ်ကမ်း' လုပ်ရုံတွင်သာမက ထမင်းတွေ ဘာတွေတောင် ဖိတ်ကျွေးလိုက် သေးသည်။ မြလွင်ဟင်းချက်ကောင်းကြောင်း သိစေချင်သော ကြောင့်ဖြစ်၏။ ဒီလိုအရွယ်ကြီးတွေက ဟင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တတ်သည်။
မြလွင်ကလည်း ဒီအကွက်ဆင်နေတာသိသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးဝင်းမောင်ကြီးစိတ်ကုန်သွားအောင် ဆိုပြီး ဟင်းတွေကို အဆီအငေါ်မတည့် စပ်ဟပ်လိုက်တာမျိုး၊ ငန်ကျွတ်နေအောင်၊ ခါးတူးနေအောင် စပ်လန်နေ အောင် ချက်လိုက်တာမျိုးတော့ မလုပ်ပါ။ သူ့ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုက ဒီလိုပညာပြတာမျိုး ဝါသနာမပါ။ ဘယ်သူအပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာထားတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဟင်းတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ ချက် ကျွေးသည်။
ဦးဝင်းမောင်ကြီးကလည်း မြလွင်လက်ရာကို အလွန်သဘောကျသည်။ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် လောကွက် ပြုခြင်းမဟုတ်။ တကယ်ကို ခံတွင်းတွေ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ မြိန်ရေရှက်ရေ စားတတ်သည်။ ''
''အေးဗျာ၊ ကျွန်တော်က တစ်ကိုယ်တည်းသမားဆိုတော့ အိမ်မှာ ဖြစ်သလိုစားနေရတာ၊ အိမ်က တပည့် ကျော်က ချက်တော့ ကျွေးပါရဲ့ ယောက်ျားလေးဆိုတော့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာမလုပ်တတ်ဘူး။ ဆိ်ုက်က ဝယ်စား ရတာပဲများပါတယ်။ ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ခုလောက်ကောင်းတဲ့ လက်ရာမျိုး တစ်ခါမှ မစားဖူးသေးဘူး။ ဒါမျိုးသာနေ့တိုင်း စားလိုက်ရ ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဗျာ''
ဟု တိုင်လိုက်သည်။ ဒေါ်ငွေဇံကလည်း…
''ဒါတော့ တစ်နေ့နေ့ ဖြစ်လာမှာပေါ့ကွယ်''
ဟု ဖောက်လိုက်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ပါပါ ပြိုင်တူရယ်ကြ၏။ မြလွင်က နားရှက်ပြီးအနားမှာ မနေတော့ဘဲ ဆိုင်ထဲ သွားနေလိုက်၏။
ချစ်ဦးကတော့ ဦးဝင်းမောင်ကြီး ထမင်းလာစားတာကို သဘောကျသည်။ ဒီလိုနေ့မျိုးဆိုလျှင် သူလည်း ဟင်းကောင်းကောင်း စားရသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဦးဝင်းမောင်ကြီးကို ခဏ ခဏ ထမင်းစား ဖိတ် ဖို့ တိုက်တွန်းလေသည်။
ဟု ဦးဝင်းမောင်ကြီးကိုလည်း ပြောတတ်သည်။ ဒါတွင်မက..
''မမမြလွင်က ဝက်သားသုံးထပ်သားကို မရန်းပြားနဲ့ ချက်တာ သိပ်ကောင်းတယ်ဗျ၊ ဒီတစ်ခါ ထမင်း လာစားမယ်ဆိုရင် အဲဒီဟင်းချက်ခိုင်းသိလား''
ဟု ဒလန်လုပ်တတ်သေးသည်။ သူက မြလွင်နှင့် သဘောမတူရသည့်အကြောင်းမှာ သဲသဲချစ်ကြောင့်သာ ဖြစ်၏။ သာမာန်အားဖြင့်ဆိုလျှင်တော့ ဦးဝင်းမောင်ကြီးကို ခင်မင်မိ၏။ မြလွင်နှင့် သဘောမတူတာက တခြား အိမ်မှာ ထမင်းလာစားတာက တခြားဟု ယူဆထားသည်။
ဦးဝင်းမောင်ကြီးခမျာမှာလည်း သိပ်စားသာလှတာတော့မဟုတ်။ သဲသဲချစ်ဆင်လုပ်စီးရတာကိုလည်း ခံရ သည်။ ချစ်ဦးအပေါ်လည်း အနွံတာခံရသေးသည်။
တစ်ရက်မှာ အိမ်ကိုလာလည်ရင်း တဲကလေးရှေ့မှာ တစ်စုံတစ်ခုကို ထုထောင်းနေသော ချစ်ဦးကိုတွေ့ရ၏။ ထို့ကြောင့် အနားကို လျှောက်သွားရင်း..
ဟု နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ချစ်ဦးသည် မြက်တွေကို ဆုံထဲထည့်ထောင်းနေခြင်းဖြစ်၏။ သူက …
''ဘာ… မြက်နို့ ဟုတ်လား''
''ဟုတ်တယ်၊ ဦးဝင်းမောင်ကြီး စဉ်းစားကြည့်လေ မြက်စားတဲ့နွားရဲ့နို့ကို လူတွေက အားရှိတယ်ဆိုပြီး သောက်ကြတယ်၊ ဒါဆိုရင် မြက်ထဲမှာ နွားနို့ဓာတ်တွေပါတာပေါ့ဗျ၊ ဒီတော့ မြက်ကိုအရည်ညစ်ပြီး သောက် ရင် နွားနို့လိုပဲ အားရှိမှာပဲမဟုတ်ဘူးလား''
ဦးဝင်းမောင်ကြီးလည်း ချစ်ဦးကျေနပ်အောင် အလိုက်အထိုက် သဘောဖြင့်
''အေး .. ဖြစ်နိုင်တယ်ကွ၊ ကြည့်စမ်း ငါတောင်ဒါကို မစဉ်းစားမိဘူး မင်းတော်တော်အတွေး အခေါ်ကောင်း တဲ့ကောင်ပဲ''
ဟု ချီကျူးလိုက်၏။ ဒါဟာ ဦးဝင်းမောင်ကြီးရဲ့ အမှားပဲ။ ချစ်ဦးက ထောင်းပြီးခါစ မြက်ဖက်များကို ယူ၍ ပန်းကန်လုံးထဲညစ်ထည့်သည်။
''ခုဆိုရင် ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ အားရှိတဲ့နည်းကို တီထွင်နိုင်ပြီဗျ၊ ကဲ အားပေးလိုက်ပါဦး''
ဆိုပြီး ပန်းကန်လုံးကို ကမ်းပေးလိုက်၏။ ဦးဝင်းမောင်ကြီး မျက်လုံးပြူးသွားပြီး…
''အဲ… ဟိုဒင်း…. ဒါကတော့''
''ကျွန်တော်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ တစ်ခွက်သောက်ပါဗျာ''
''ဟာ… ငါမသောက်တော့ပါဘူး၊ ဗိုက်ပြည့်နေလို့''
''ဘာလဲ ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ် မပြုတဲ့ သဘောလား''
''ဟာမဟုတ်ပါဘူး၊ ငါက… ဟုဥစ္စာ''
''သြော်… ဦးဝင်းမောင်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို အထင်သေးတာပေါ့လေ၊ ဒါဆိုလည်း ရတယ်ဗျာ ကျွန်တော် က လူကြီးမို့ ဦးဦးဖျားဖျားတိုက်တာပါ စေတနာကို တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုလည်း ပြီးတာပဲ''
ဦးဝင်းမောင်ကြီး နည်းနည်ူးဖြုံသွားသည်။ ခုချိန်မှာ ချစ်ဦးစိတ်ဆိုးအောင် လုပ်လို့မဖြစ်၊ သူနှင့် အတိုက်အခံ ဖြစ်မှာကို မလိုလား၊ ထို့ကြောင့်….
''ကဲ.. ကဲ… တစ်ငုံလောက်တော့ မြည်းကြည့်မယ်ကွာ''
Posted by SHWE ZIN U at 8:12 AM2comments Links to this post
ဝင်းငြိမ်း နှင့် စာရေးဆရာများ ပေဖူးလွှာစာပေအင်တာဗျူး, အပိုင်း (၂၃)
သုံးဖက်မြင်၊ လေးဖက် လှစေဖို့
၀တ္ထုရှည် လုံးချင်းဝတ္ထုတွေ ရေးနေကြတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများနဲ့ တွေ့ဆုံပေးနေရာက ဒီလမှာတော့ ၀တ္ထုတို တွေကို ရေးအားသန်ပြီး ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်နဲ့ အမျိုးသားစာပေဆု ရခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာမ ကြူကြူသင်း နဲ့ တွေ့ဆုံပေးချင်ပါတယ်။
" စာဖတ်သူ အများစုရဲ့စိတ်ထဲမှာ "တက္ကသိုလ်ကြူကြူသင်း" ဆိုတာနဲ့ "ကြူကြူသင်း" ဆိုတာ တစ်ယောက်စီ ပဲလား၊ တစ်ယောက်တည်းပဲလား ဆိုတာ မကွဲပြားဘဲ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဆရာမ သိတဲ့ အတိုင်း ဒီနေ့ အနုပညာလောကမှာလည်း သိုးကာသီကာ လွဲတဲ့ နာမည်တူတွေ ရှိနေကြတယ် မဟုတ်လား။ တချို့ကလည်း နာမည်တူ စာလုံးပေါင်း ကွဲရုံနဲ့ တစ်ယောက်စီ ဖြစ်သွားတယ်။ တချို့ ကလည်း ရှေ့က "မောင်" တို့၊ "မ"တို့ ထည့်လိုက်တာနဲ့ပဲ တစ်ယောက်စီ ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဆရာမ ပရိသတ် အတွက် ဒီမေးခွန်းက စပြောလိုက်ကြရအောင် "
" ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်မ စာပေဟောပြောပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ မကြာခဏ ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ ခုထိလည်း ဒီကလောင်နာမည် နှစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူတွေ ဒွိဟဖြစ်နေကြတုန်းပါပဲ။ ပေဖူးလွှာလို စာဖတ်သူ အကြိုက်များတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကြီး တစ်စောင်ကနေ ဖြေရှင်းခွင့်ရတာ "မှာထား အလားသင့်" ဆိုသလို ဖြစ် သွားပါ တယ်။ တစ်ယောက် တည်းပါပဲ ကိုဝင်းငြိမ်း။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ရောက်တော့ မူလ "ကြူကြူသင်း" ရှေ့မှာ "တက္ကသိုလ်" ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ "တက္ကသိုလ်ကြူကြူသင်း" ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည် နဲ့ ရေးခဲ့တာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်အထိပါ။ ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ "ကြူကြူသင်း" ဆိုတဲ့ ကလောင်နာမည် နဲ့ပဲ ဆက်ရေးနေပါတယ် "
" ကလောင်နာမည်အကြောင်း ဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက် ဆရာမ စာပေလောကထဲ ၀င်ရောက်လာပုံကို သိပါရစေ"
" သိပ်တော့ မထူးခြားပါဘူးလေ။ စာပေ မွေ့လျော်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းလာရတော့ ငယ်ငယ် ကလေး ဘ၀ကတည်းက စာဖတ်ရတာကို နှစ်သက်တဲ့ ခံစားမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေကလည်း စာဖတ်တာ ကို အားပေး လမ်းညွှန်မှု ပြုခဲ့ပါတယ်။ စာရေးချင်တဲ့စိတ် ပေါ်လာတာကို ကျွန်မ သတိထားမိတော့ အသက် ဆယ့်နှစ်နှစ်၊ ဆယ့်သုံးနှစ်လောက် ရှိနေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတာက ကဗျာပါ။
ကဗျာဆရာကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသုဝဏ်၊ ဇော်ဂျီ၊ ကြည်အေး၊ နုယဉ် စသူတို့ရဲ့ ကဗျာတွေကို မြတ်မြတ် နိုးနိုး ဖတ်ခဲ့၊ နှစ်နှစ်သက်သက် အလွတ်ကျက်ခဲ့မိပါတယ်။ ကဗျာကို စိတ်ဝင်စားတော့ ကဗျာလေးတွေ စပ်ကြည့် မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက စာရေးချင်စိတ်တွေ တားမရ ဆီးမရ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာမှ တစ်ချိန်က စာဖတ်တာကို အားပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေက ပိတ်ပင်ကြတော့တာပါပဲ။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဘာကြောင့် ပိတ်ပင်ကြတာပါလိမ့်လို့ တွေးမရခဲ့ဘူး။ အခု စာလေး ဘာလေး ရေးပြီး စာရေး ဆရာဘ၀ကို ခံယူလိုက်ချိန် မှာမှ သြော် ... မိဘတွေက သူတို့သမီးလေးကို ချမ်းချမ်းသာသာ ရှိစေချင်လို့ဆို တာ သဘော ပေါက်လာရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာရေးရင်း စာစောင်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ကဗျာလေးတွေ ပို့ပို့ကြည့်ရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ပုံနှိပ်စာလုံးနဲ့ မြင်ရတာက "တိုင်းရင်းမေ ကဗျာဥယျာဉ်စခန်း"မှာလေ။ အဲဒီတုန်းက ၁၉၅၇ ခုနှစ် ရှစ်တန်း တက်ခါစပေါ့။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကဗျာလေးတွေ ရေးရာကနေ ၀တ္ထုတိုလေးတွေပါ ရေးဖို့ အားသန်လာပါတယ်။ စာပေလောကထဲကို ခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ လျှောက်ဝင်လာနိုင်အောင် ကျွန်မကို ဦးစွာ လမ်းညွှန်ဖေးမခဲ့သူတွေကတော့ ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာမကြီး ငွေတာရီ၊ တက္ကသိုလ်မင်းမော်၊ ဆရာဒေါင်းနွယ်ဆွေ နဲ့ ဆရာသင်္ခါတို့ပါပဲ"
" ဆရာမတို့ ခေတ်က စာပေလောကထဲ ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားရတာနဲ့ ဒီနေ့ ကြိုးပမ်းရတာ ဘယ်လို ကွာ ခြားမယ်ထင်ပါသလဲ"
" ကျွန်မတို့ ခေတ်က ခုခေတ်လောက်မလွယ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုလေ၊ ကျွန်မတို့ စာရေးစ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ပေါင်း အစိတ်ကျော်ကျော်လောက်က ရေးစရာ နေရာ သိပ်မရှိလှဘူး။ လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းစာစောင် စုစုပေါင်း မှ လေး ငါးစောင်လောက် ရှိတာ။ နောက်ပြီး စာရေးချင်သူ တစ်ယောက်အတွက် စာပေလောက နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံကလည်း ရဖို့ နည်းပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတွေကို စာမူ ဘယ်လို ပို့ရမှန်းတောင် တချို့ မသိခဲ့ကြပါဘူး။
စာရေးဆရာ ဆိုတာကို အသိအကျွမ်း ဖြစ်ချင်လွန်းလို့၊ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးချင်လွန်းလို့ စုံစမ်းရ၊ အိမ်နား သွားချောင်းကြည့်ရနဲ့ ကျွန်မတို့ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ စာပေရေးရာ၊ ၀ါဒသဘောထား၊ အဆိုအမိန့်၊ လမ်းညွှန်မှု တွေ ကျွန်မ တို့ မကြားခဲ့ မသိခဲ့ရဘူး။ မဂ္ဂဇင်းထဲပါလာတဲ့ အရေးအသားလောက်နဲ့သာ ကျေနပ် နေခဲ့ကြရပါ တယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ စာပေဟောပြောပွဲ၊ စာပေဆွေးနွေးပွဲ ဒါတွေ အများကြီး ရှိလာတော့ ကျွန်မတို့ခေတ်နဲ့ စာရင် နား၊ မျက်စိ ပွင့်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ တစ်ခု၊ အခု ဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ မတူတာက ဟိုတုန်းက လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ရေးတဲ့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေနဲ့ အပြင် လုံးချင်းဝတ္ထုရေးတဲ့ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေဟာ အတူတူပါပဲ။ ဥပမာ- သာဓု၊ တင့်တယ်၊ အောင်လင်း၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ ရန်ကုန်ဘဆွေ၊ ခင်ဆွေဦး စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။ အခု ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အဲသလို မဟုတ်ဘူး။
မဂ္ဂဇင်းက စာရေးဆရာ နာမည်ကြီးတွေနဲ့ အပြင် လုံးချင်းတွေရေးတဲ့ စူပါစတားတွေ အတူတူ မဟုတ် တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်မ အမြင်တစ်ခု ပြောရမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးချင်း ကြိုးပမ်းရမှုကိုတော့ အတွင်း ကျကျ မသိဘူးပေါ့ ကိုဝင်းငြိမ်း။ ဒါပေမဲ့ စာရေးဆရာလို့ အမည်ခံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တော်တော်များများဟာ နေ့ချင်း ညချင်း မှာပဲ တိုးပွား များပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရေးစရာ နေရာတွေကလည်း အတော့်ကို များလာပါ တယ်။ လစဉ်ထုတ် စာစောင်၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း စုစုပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် ရှိလာတယ်။ ပြီး မြို့နယ် မဂ္ဂဇင်းတွေ အသင်းအဖွဲ့ ကျောင်းမဂ္ဂဇင်းတွေ။ ဒီလိုနေရာတွေ ဖွင့်ပေးထား လို့ပါပဲ ကိုဝင်းငြိမ်း။ နေရာများတော့ တစ်နေရာ မဟုတ် တစ်နေရာ ၀င်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးပမ်းရတာ သိပ်မခက်ခဲ လှဘူးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ရေးစရာ နေရာတွေ များလာသလို စာရေးဆရာ ဖြစ်ချင်သူတွေကလည်း သိပ်များလာတော့ ဟို ကျွန်မ တို့ ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရသလို Survival of the Fittest ပေါ့။ ဘယ်နှယောက် တင်ကျန်ရစ် မလဲတော့ မသိနိုင်ဘူး "
" ဆရာမက ၀တ္ထုကို အရေးများတဲ့သူ၊ ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်နဲ့ ဆုရခဲ့သူ ဆိုတော့ ၀တ္ထုတိုနဲ့ ပတ်သက်တာ လေး တွေ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ၀တ္ထုတို ရေးရတာနဲ့ ၀တ္ထုရှည်ရေးရတာ ဘယ်လို ကွာခြား တယ်လို့ ဆရာမ မြင်ပါသလဲ"
" ဒီမေးခွန်း ကြားရတော့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောခဲ့တာကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ သူက ၀တ္ထုတို ထက် ၀တ္ထုရှည်ကို ပိုပြီး လူကြိုက်များတယ်၊ ၀တ္ထုတိုထက် ၀တ္ထုရှည်က စာမူခ များများ ရတယ် ဆိုတာ သိတော့ ကျွန်မ ၀တ္ထုတို ရေးတိုင်း ၀တ္ထုရှည်ဖြစ်အောင် ပြင်ရေးစမ်းပါ။ ဒီနားမှာ ဒီလို ဖြည့်လိုက်၊ ရှေ့နားကျ ဟိုလိုချဲ့လိုက်၊ ဘာညာနဲ့ သူ့အပြောနဲ့သူတော့ချောလို့။ ကျွန်မတော့ ၀တ္ထုတိုကို ၀တ္ထုရှည် ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကြိုးစားလို့မှ မရေးတတ်ခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။
ဆိုလိုတာကို ကိုဝင်းငြိမ်း သဘောပေါက်မှာပါနော်။ ၀တ္ထုတိုလို ခံစားရေးရင် ၀တ္ထုတိုပဲရမယ်။ အဲဒီဝတ္ထုကို ၀တ္ထုရှည်ဖြစ်အောင် ဖြည့်စွက်ချဲ့ထွင် ပြုပြင်ပြီး ၀တ္ထုရှည်ဖြစ်အောင် ရေးလို့မရဘူး ဆိုတာပါ။
၀တ္ထုတို ရေးရတာနဲ့ ၀တ္ထုရှည် ရေးရတာမှာ သိသိသာသာ ကွာခြားတာကတော့ အသေးစိတ် ဖွဲ့နွဲ့ ရေးသား တာမှာပါ။ ၀တ္ထုတိုမှာက တိုတိုနဲ့ လိုရင်းရောက်အောင် ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် ရေးရတော့ အသေးစိတ် ဖွဲ့နွဲ့ ရေးသားတာမျိုး သိပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖတ်တဲ့ လူတွေအတွက် အသေးစိတ် ဆက်လက် ခံစားစေဖို့ကို တော့ ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တယ်လို့တော့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်။ ၀တ္ထုရှည် ရေးရာ မှာတော့ အသေးစိတ် ဖွဲ့နွဲ့ရေး သားဖို့ အခွင့်သာပါတယ်။ ဒီတော့ စာရေးဆရာ အရေးကောင်းရင် ကောင်း သလောက် စာဖတ်သူ ရင်ထဲမှာ တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ စာဖတ်ပရိသတ် တွေအနေဲ့ ၀တ္ထုတိုထက် ၀တ္ထုရှည်ကို ပိုပြီး စွဲစွဲလမ်း လမ်း ဖတ်ရှုလေ့ရှိကြတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်"
" ဆရာကြီး တစ်ယောက် က ၀တ္ထုတို ရေးရတာ ၀တ္ထုရှည် ရေးရတာထက် ခက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆရာမ လက်ခံပါသလား။ ဘာကြောင့်ပါလဲ"
" ကိုဝင်းငြိမ်း ကတော့ ကျွန်မကို တရားခံရှာပြီထင်ပါရဲ့။ ၀တ္ထုတိုရေးရတာ ၀တ္ထုရှည်ရေးရတာထက် ခက်တယ် လို့ ကျွန်မ မပြောရဲပါဘူး။ ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာဆိုတဲ့ စကားလေးလည်း ရှိသား ပဲနော်"
" ၀တ္ထုတိုမှာ က တစ်ကွက်၊ နှစ်ကွက်လောက်နဲ့ ဖမ်းရတာဆိုတော့ ၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ရနိုင်ဖို့ ဆရာမ ဘယ်လို ဖန်တီး ပါသလဲ"
" ဟုတ်ပါတယ်။ ၀တ္ထုတိုမှာက တစ်ကွက်၊ နှစ်ကွက်လောက်နဲ့ အမိဖမ်းရတာပါ။ အဲဒီလို ရင်တွင်းကို ဖျတ်ခနဲ ရိုက်ခတ် တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုကို အရအမိ ဖမ်းပြီး သရုပ်ပေါ်အောင် ရေးရတာဆိုတော့ တစ်ခါ တစ်ခါ အတော့်ကို ပင်ပန်းပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်မ ရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေကို ကျွန်မ ဇွတ် ဖန်တီးယူ ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုဝင်းငြိမ်း။ ရင်တွင်းခံစားချက်ကို သရုပ်ပေါ်အောင် ဖော်ထုတ် ရေးသား ခဲ့တာ တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်"
" ဒါဆို ပေဖူးလွှာမှာ ပါခဲ့တဲ့ "အညှာ" ကကော ဆရာမ "
" အညှာ က အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ကူးစက်ခံစားပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာအမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရှင်တွေဟာ အိမ်ထောင်မှုအလုပ်တွေ၊ သားသမီးနဲ့ လင်ယောက်ျား ဝေယျာဝစ္စတွေနဲ့ အချိန်ကုန်လေ့ရှိတာ တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ငါးယောက် မဟုတ်လား။ ဒီအလုပ်တွေနဲ့ ကိုယ့် ကျန်းမာရေးလည်း ကိုယ် ဂရုစိုက်ရမှန်းမသိ၊ အိမ်ထောင်မှုထဲပဲ နစ်မွန်းနေကြတာ မဟုတ်လား။ နဂိုကမှ လင်နဲ့မယား သက်တူရွယ်တူ ဆိုရင် မယားက အရွယ်ကျ ရုပ်အိုသွားတတ်ကြတယ်လေ။
အဲဒီအချိန်မှာ လင်တော်မောင်တွေက သဘာဝရဲ့ ဖြစ်မြဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ အသက်ငါးဆယ်ကျော်ပေမယ့် သန်တုန်း၊ မြန်တုန်း၊ ဖျတ်လတ်တုန်း။ ဒီတော့ "အညှာ" ထဲမှာ ရေးထားသလိုပေါ့လေ။ အိမ်က မိန်းမကို မချစ်တော့ တာလည်း မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ လှလှပပ သွက်သွက် လက်လက် ကောင်မလေး ကေခိုင်လို ဟိုလိုလို သည်လိုလို ဖြစ်လာတယ်လေ။ ကိုဝင်းငြိမ်း ကိုတော့ အားနာပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားတွေရဲ့သဘာဝကို တစ်စွန်းတစ်စ ဖော်ထုတ်ပြလိုက်တာပါပဲ။ ဒီဝတ္ထုရဲ့ "အညှာ"က ဒါပါပဲ"
"မူးယစ်၊ အသူရာမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀တ္ထုတိုကလေးတွေ ဆရာမ ရေးတာ ဖတ်လိုက် ရပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိခင် သားသမီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် သုံးဦးအနက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆရာမ ယူဆသလဲ "
" ပကတိ ဖြူစင်ပြီး ကြင်နာစရာကောင်းတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ကို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေကို အညွန့်တုံးစေရုံသာမက လူဖြစ်ပါရုံ အသက်ဆုံးစေတဲ့အထိ နှိပ်စက်နေတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ် ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ကျွန်မ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း ၀တ္ထုလေးတွေ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိတာကတော့ မိဘရော၊ သားသမီးရော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရော သုံးခုစလုံးပါပဲ။ အဲဒီအထဲမှာ အဓိကအကျဆုံးကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်"
" မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲတဲ့ လူငယ်တွေကို နိုင်ငံတော်က ကုန်ကျစရိတ် ကျခံပြီး ဆေးဖြတ်ပေးတဲ့ စခန်းတွေ တည်ထောင်ပြီး ဘ၀သစ် ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေပါတယ်။ ဒီစခန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတွေဘက်က ဘယ်လို ပူးပေါင်းပါဝင်သင့်တယ်လို့ ဆရာမ မြင်ပါသလဲ"
" ဆေးစွဲသူ ကိုယ်တိုင်က မှန်ကန်တဲ့ အသိတရားနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြုပြင်ဖို့ ကိုယ်တိုင် လာရောက် ဆေးကုသ ခံရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ နစ်နေတဲ့ ရွှံ့ညွန်ပုပ်ကြီးထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အားမရှိရင် ဘေးက "အား" အကူအညီကို ယူရပါလိမ့်မယ်။ ဆေးစွဲသူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမှာ ပျော်မွေ့စွာ နေထိုင် တတ်အောင် ဆေးဖြတ်စေရုံသာမက ဘ၀သစ် ပြန်လည်ထူထောင်ပေးတဲ့ စခန်းတွေဟာ အားကိုး ရာပဲပေါ့ ကိုဝင်းငြိမ်း "
" ဆရာမ ၀တ္ထု တော်တော်များများမှာ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ထည့်ရေးသွားတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ - "မူးမြစ်ကမ်းသာမှာ"၊ "တကဏန်းက မရှမ်း"၊ "သရက်ခြံက မခင်လှ" စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။ ဒီဝတ္ထုတွေက ဆရာမ သွားရင်းလာရင်း တွေ့ကြုံရတာလေးတွေပေါ်မှာ ဖန်တီးသွားတာလား"
" ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတနဲ့ ဘ၀သရုပ်ဖော်လေးတွေ ကျွန်မ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ရေးတဲ့နေရာမှာ သွားရင်း လာရင်း ခရီးကြုံကြိုက်လို့ အချက်အလက်တွေကို မှတ်စုစာအုပ်ထဲ ရေးမှတ်ပြီး ရေးခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တတ်နိုင်သရွေ့ ကျွန်မ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ဘ၀တွေထဲမှာ ကျွန်မပါ စိမ့်ဝင်ခံစားပြီး ရေးခဲ့တာ များပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့ ဘ၀လေးတွေကို အပေါ်ယံရှပ်မြင်တဲ့ အမြင်ကို မရေးဘဲ အတွင်း ကျကျ မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပြီး ကျွန်မ ရေးခဲ့ပါတယ်။
" တကဏန်း က မရှမ်း" ဆိုပါတော့။ အပေါ်ယံကြည့်တဲ့ အမြင်ဆိုရင် ကောက်စိုက်သမားတွေ တစ်ဖွဲ့ကြီး သီချင်းတကြော်ကြော်နဲ့ ပျော်စရာကြီး၊ ကောင်းကင်ကြီး၊ ကောင်းကင်ကြီးကလည်း ပြာလဲ့လို့၊ လယ်ကွင်းကြီးကလည်း စိမ်းလို့၊ ကောက်ပင်တွေကလည်း ယိမ်းလို့ ဆိုတာမျိုးပေါ့ ကိုဝင်းငြိမ်း။ တကယ် လက်တွေ့ သူတို့ဘ၀ထဲ စိမ့်ဝင်သွားတော့ ရေရှားတဲ့ ဒေသမှာ မူးတွေထဲ (မူးဆိုတာ တူးမြောင်းကို သူတို့ ခေါ်တာပါ) ရေခိုးချိုးကြတာ၊ အပန်းဆီ တက် လို့ ပုဆိုးကြမ်းတွေ (ပုဆိုးကြမ်းကို ထဘီအဖြစ် သူတို့ ၀တ်ကြ ပါတယ်) နတ်ပြီကုန်တာ။ အဲဒီလို ရသ သဘောလေးတွေ အလိုလို ပါလာတော့တယ်။ ဒါက ကျွန်မ ၀တ္ထုတို ရေးတဲ့ ပုံစံပြောမလား၊ ရေးပုံရေးနည်း ပြောမလား၊ မပြောတတ်ဘူး"
" ဆရာမ ၁၉၈၁ ခုနှစ်အတွက် ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ဆု ရတာ "စံပယ်တစ်ကုံး၊ ဂမုန်းတစ်ပွင့်"နဲ့နော်"
" အဲဒီဝတ္ထုတိုလေးတွေထဲက အချို့ကို ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် "
" ဆေါးနွေးပါ ကိုဝင်းငြိမ်း၊ ဒီစာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့သူတွေ အတော်များပါတယ်။ အင်းတော်မြို့က တက်ထွန်းစာပေ အဖွဲ့သားများကဆို ဆွေးနွေး မေးမြန်းချက်တွေကို စာရေးပြီးတောင် ပို့ ပါတယ်။ အင်မတန် အဖတ်နည်းတဲ့၊ လူကြိုက်နည်းတဲ့ ၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်လို စာအုပ်မျိုးကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ကြ၊ ဆွေးနွေးကြဆိုတော့ ကျွန်မ သိပ်ဝမ်းသာရပါတယ် "
" တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ တစ်ယောက်လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ ၀တ္ထုကလေးမှာ အိမ်မှာ မွေးစားထားတဲ့ သိန်းသိန်း ဆိုတဲ့ အပျိုပေါက်ကလေး တစ်ယောက် ရေစည်လှည်း တိုက်ရတဲ့ ရေသည်ကောင်လေးနဲ့ ကြိုက်ကြတာ ကို မွေးစားတဲ့ အပျိုကြီးက သိသွားတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆုံးမတယ်။ ကောင်လေးမှာ ၀င်ငွေ နည်းပုံ၊ မိသားစုတာဝန်ကြီးပုံ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ သိန်းသိန်းက ခြင်ထောင်လေး တစ်လုံးတည်း ယူပြီး ကောင်လေးနောက် လိုက်ပြေးသွားတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဆုံးမတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်မျိုး ရေးသွားတာ တွေ့ရတယ်။ အပျိုကြီးရဲ့ ညီမ အိမ်ထောင်သည်က သိန်းသိန်းကို တစ်နည်းနဲ့ ဆုံးမပြီး အပျိုကြီးက တစ်နည်း ဆုံးမတယ်။ လူငယ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ကလည်း အခက်သားပဲ။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်က ဆုံးမတာပေမယ့် ဆုံးမတဲ့ စကားကိုက လမ်းဖွင့် ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ ဒီဝတ္ထုမှာ သိန်းသိန်းကို ကိုင်တွယ်နည်း မှားသွားလို့ အမြန်ဆုံး လိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဆရာမအနေနဲ့ ရည်းစားထားတဲ့ အပျိုပေါက်၊ လူပျိုပေါက် အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေကိုပေါ့ လေ၊ ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါသလဲ"
" တစ်ကမ္ဘာလုံး နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုလိုချက်ကို ကိုဝင်းငြိမ်း နားလည်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်မ ပြောချင်တာ နည်းနည်း လွဲ သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောချင်တာ ကောင်မလေး သိန်းသိန်းရဲ့ မေတ္တာစစ်ကို ဖော် ချင်တာပါ။
သိန်းသိန်း ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးက သိပ်ဆင်းရဲတယ်။ ရေစည်တိုက်ပြီး သူညီ သူ့ညီမလေးတွေကို ကျွေး မွေးရတယ်။ ဒီတော့ သိန်းသိန်းကို မွေးစားထားတဲ့ အိမ်က ဒီကောင်လေးနဲ့ သဘောမတူဘူး။ သူတို့ ကလည်း သိန်းသိန်းကို တူမလေးလို၊ ညီမလေးလို ရွှေနဲ့ ငွေနဲ့ တန်းတူရည်တူ ထားတာကိုး။ ကောင်လေးနဲ့ ယူရင် ဆင်းရဲမှာ စိုးလို့ အမျိုးမျိုး တားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးကို ပြန်ချစ်နေမိတဲ့ သိန်းသိန်းက ခြင် ထောင် တစ်ခုတောင် မရှိဘဲ သူ့ညီလေးနဲ့အတူ ခြင်ကိုက်ခံပြီး အိပ်ရရှာတဲ့ ကောင်လေးအတွက် ခြင်ထောင် လေး တစ်ခုတည်းကိုပဲ ယူပြီး ခိုးရာလိုက်သွားတယ်။ ကျန်တဲ့ ရွှေ ငွေ တွေထားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဝတ္ထု မှာ ကျွန်မ သရုပ်ဖော်ချင်တာက မေတ္တာရေးပါ။ ကြင်နာချစ်နဲ့ ချစ်တဲ့ သိန်းသိန်းရဲ့ အဖြေပါ။ ခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ အလွန်ပွင့်လင်းရဲတင်းတဲ့ ရည်းစားထားတမ်း ကစားတတ်ကြတဲ့ ပြဿနာ ကိုလည်း ကျွန်မ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမယ် မပြောတတ်သေးပါဘူး "
" ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။ "အရောင်မဲ့ အရိပ်"ကို ဆက်လိုက်ကြရအောင်။ ဒီဝတ္ထုမှာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အရိပ် ကို ခိုနေခဲ့တဲ့ အရာရှိကတော်ကြီးတစ်ယောက် ခင်ပွန်းသည် ပင်စင်ယူလိုက်ချိန်မှာ မနေတတ် မထိုင် တတ် ဖြစ်ရပုံနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့မှ ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုး ကို နားလည်လာရကြောင်း ဖော်ပြထားတယ်။
မြန်မာ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အရိပ်ကို မှီခိုနေတတ်ကြပါတယ်။ လင်သား ပြုစုခြင်း သည်သာ သူတို့တာဝန်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာမအနေနဲ့ ဒီအယူအဆ အပေါ် ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ "
" အရောင်မဲ့ အရိပ် ၀တ္ထုကို ရေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ စေတနာက အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ ခင်ပွန်းသည် တွေရဲ့ အရိပ်သာ ဖြစ်မနေသင့်ဘူး။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အလင်းရောင် ဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့သူ တွေသာ ဖြစ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ စေတနာပါပဲ ကိုဝင်းငြိမ်း။
ကျွန်မတို့ မြန်မာ အမျိုးသမီးအများစုဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အရိပ်ကို မှီခိုပြီး အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ ကိစ္စတွေနဲ့သာ နစ်မြှုပ်နေကြတာ အမှန်ပဲ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုရင် လင်သား ပြုစုခြင်းကို အဓိကထားပြီး အိမ်ထောင်ရေးကမ္ဘာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာပဲ ၀ဲလည် နေကြတော့တာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့မှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအားတွေဟာ မှေးမှိန်ကုန်ကြရတာ များပါတယ်။
အမှန် မှာ လင်ရယ်၊ မယားရယ် ဆိုတာ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ တစ်ယောက်စီအတွက် တစ်သက်တာ လက်တွဲရမယ့် အဖော်တွေချည်း ဖြစ်ပါတယ်။ " အဖော် " ဆိုတာနဲ့ "အလုပ်အကျွေး" ဆိုတာ အများကြီး ခြားနားတယ်ဆိုတာ ကိုဝင်းငြိမ်းလည်း သိပြီးသားပါနော်။ ခံစားစရာရှိလည်း အတူတူ၊ စံစားစရာရှိလည်း အတူတူ၊ ဘယ်သူမှ သခင်မဟုတ်သလို ဘယ်သူမှလဲ အခိုင်းအစေ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ပြောချင်တာက အဲဒါပါ"
" ဒီနေ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေနဲ့ ဆရာမတို့ စာရေးစချိန်က ၀တ္ထုတိုတွေရဲ့ ခြားနားချက် ကို ဘယ်လို မြင်ပါသလဲ "
" ဟုတ်တယ်၊ နှစ်ပေါင်း အစိတ် သုံးဆယ်လောက်အတွင်းမှာ အတော်ကြီးကို ခြားနားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မတို့ စာရေးစ အချိန်တုန်းက ၀တ္ထုတိုလေးတွေဟာ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက် အလွန် နည်း ပါးပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက် အချစ်ဝတ္ထုတွေများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးအဖွဲ့ စေ့စပ် သိပ်သည်းပြီး စွဲငြိ စေပါတယ်။
အဲဒီ အချစ်ဝတ္ထုတွေထဲကနေ ထူးထူးခြားခြား ထွန်းပေါက်လာတဲ့ ဆရာကြယ်နီတို့၊ ဆရာမင်းရှင်တို့၊ ဆရာ သာဓု တို့၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့ရဲ့ ဘ၀သရုပ်ဖော် ၀တ္ထုတိုမျိုးလေးတွေကတော့ "ရှိတော့ ရှိတယ်၊ ရှား တယ်" ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့လေ။
အခု ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု ဘ၀သရုပ်ဖော် ၀တ္ထုတိုလေးတွေ၊ အတွေးအခေါ် ရင့်သန် စေတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတွေ၊ အသိတရား ပွားစေတဲ့ အကျိုးပြု ၀တ္ထုတိုလေးတွေ အများကြီး တွေ့လာရလို့ ကျေနပ် ရပါတယ်။ အရေးအသားဟန်ကလည်း စကားလုံး နုနုလှလှနဲ့ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ ရေးကြရာကနေ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သွက်သွက်လက်လက် မြူးလာကြတယ်လို့ ကျွန်မ မြင်ပါတယ်"
" အမျိုးသားစာပေဆု ရပြီးတဲ့ စာရေးဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီနေ့ မြန်မာစာပေလောကကို ဘယ်လို မြင်ပါသလဲလို့ "
" ဒီမေးခွန်းကတော့ ကျွန်မအတွက် အတော့်ကို အဖြေရခက်စေတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ ကိုဝင်းငြိမ်းရေ၊ ဒီနေ့ မြန်မာ စာပေလောကအပေါ် ကျွန်မ အမြင်ဆိုတော့ ပထမတန်း တက်ခါစကလေးကို ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေခိုင်း သလို ဖြစ်နေပြီ။ မေးခွန်းက အဆင့်မြင့်လွန်းပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်မထက် ပိုဝါရင့်ပြီး မြန်မာစာ ပေလောကကို ပိုကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရေးဆရာကြီးတွေ ဖြေဖို့ ချန်ခဲ့ပါရစေ"
" ဒါဆို ဒီနေ့ စာပေလောကထဲ ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ စာရေးချင်သူတွေအတွက် ဘယ်လိုများ အဘကံပေးချင်ပါသလဲ "
" စာရေးချင်သူတွေဟာ စာကို များများ ဖတ်ရပါမယ်။ များများ လေ့လာရပါမယ်။ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ဘ၀အထွေထွေကို နှိုက်နှိုက်နဲနဲ ကြည့်ခံစား၊ ပြီးတော့ စေတနာမှန်မှန်နဲ့ ရေးတတ်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ ပြီးတော့ ဇွဲ၊ စာရေးချင်သူ တစ်ယောက်ဟာ ဇွဲလည်း ရှိရပါမယ်။ အမှန်မှာတော့ တကယ် စာရေးချင်သူတွေ ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အပယ်ခံရပါစေ ရေးနေမှာပါပဲ။
စာရေးချင်စိတ်ဟာ အသည်းနှလုံးပေါ်မှာ ပေါက်လာတဲ့ ယားနာတစ်မျိုးပါပဲ။ ရေးကို ရေးရမှ၊ ရေးနေရမှ ယားနာ သက်သာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက စာရေးတဲ့ အတတ်ပညာမှာ "ပုံသေနည်း" မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းသိက္ကခာတော့ ရှိရပါမယ်။ စည်းကမ်းဆိုတာက မြန်မာစာ ရေးထုံး စည်းစနစ် မှန်ကန်ဖို့ပါပဲ။ အဲဒီ အထဲမှာ ၀ါကျ မှန်ကန်စွာ တည်ဆောက်တတ်ဖို့နဲ့ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းတွေ မလွဲမှားစေဖို့ ဆိုတာ တွေလည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။
သိကခာဆိုတာကတော့ စာပေသိက္ခာပါ။ စာရေးချင်သူဘက်က စောင့်ထိန်းရမယ့် အကျင့်တရားပါ။ ဘာ တွေ စောင့်ထိန်းရမယ်၊ ဘယ်လို ဆိုတာတွေကတော့ အများသဘောပေါက်နားလည်ပြီးသားလို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ် ကိုဝင်းငြိမ်း။
၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ဟာ မြန်မာစာ အရေးအသားလည်း မှန်ကန်မယ်၊ အကြောင်းအရာအချက်အလက်လည်း မလွဲဘူး၊ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက် အချိတ်အဆက် မိအောင်လည်း ရေးသားနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီဝတ္ထုဟာ အောင်မြင်တာပါပဲ။ များသောအားဖြင့် ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် အောင်မြင်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူး ဆိုတာကို အဲဒီ ထောင့်သုံးထောင့်က ကြည့်ပြီး မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ အကဲဖြတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သုံးဖက်မြင် ဆိုပါတော့ ကိုဝင်းငြိမ်း။ ဒါပေမဲ့ ကြာရှည်ခိုင်ခံ့ကျန်ရစ်တဲ့စာမျိုး ဖြစ်ဖို့ကတော့ သုံးဖက်က ကြည့်လို့ မြင်ရတဲ့ အလှ သာမက မမြင်ရတဲ့ အလှတစ်မျိုးပါ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါဦးမယ်။
အဲဒီ မမြင်ရတဲ့ ခံစားရုံသာ ခံစားနိုင်တဲ့ အလှကတော့ စာရေးသူရဲ့ စေတနာအလှပါပဲ။ တစ်နည်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပေါ့လေ။ စေတနာအလှကိုပါ ထည့်သွင်းရေးသားနိုင်တဲ့ စာရေးဆရာရဲ့ စာပေမျိုးဟာ ထာဝရ တင်ကျန်ရစ်မှာပါ။ "သုံးဖက်မြင်၊ လေးဖက်လှ" စာမျိုး ရေးသားနိုင် အောင် ကြိုးစားကြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် "
" ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာမ၊ တွေ့ဆုံပေးခြင်း ကဏ္ဍအတွက် အချိန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ပေဖူးလွှာ စာချစ်သူများနဲ့ အတူ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "
ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ်-၃၀၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်။
Posted by SHWE ZIN U at 6:28 AM0comments Links to this post